အပျော်ချစ်ကလေး လက်ဆောင်ပေးမယ် – Grab Love Story
သည်နေ့ ဒေါ်ခင်မေထား ဘတ်စ်ကားစီးပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားမှာ ကိုယ်ပိုင်ကား ရှိပါတယ်..။ မော်ဒယ်မြင့်မြင့် အကောင်းစားကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး..။ ဆန်နီပစ်ကပ် ကလေး…။ ဓါတ်ဆီချွေတာတဲ့ အနေနဲ့ တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုသလို ကိုယ်ပိုင်ကား မသုံးပဲ ဘတ်စ်ကားစီးတတ်တယ်…။
ဒေါ်ခင်မေထားဟာ အသက် (၄၂)နှစ် ရှိပါပြီ။ မုဆိုးမ ၊ သမီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်..။ သမီးနာမည်က မိုမိုဟန် ။ အသက်က (၂၀)။ အခု ဆေးကျောင်းမှာ တက်နေတယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားက အညာသူ မြန်မာစစ်စစ်ပါပဲ…။ ရွှေဘိုဇာတိ ။ ဒါပေမဲ့ ထူးခြားတယ်လို့ ဆိုရမလား…။ အညာသူအများစုတွေလို အသားမညိုဘူး ။ ဖြူတယ် ။ ဖြူတာမှ တော်တော်ကို ဖြူတာ..။ မသိရင် ရှမ်းလား တရုတ်ကပြားမလားလို့ကို ထင်မိလိမ့်မယ်..။ အရပ်ကလဲ မြင့်တယ်..။ ငါးပေခြောက်လက်မ ။ အရပ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလဲ စိုပြေအချိုးကျတယ်..။ ရင်သား မို့မို့ဝန်းဝန်း ၊ တင်ပါး စွင့်စွင့်ကားကား ၊ ပေါင်တံရှည်ရှည် ဖြောင့်ဖြောင့်စင်းစင်း ၊ ခါးကလေး ခပ်ကျင်ကျင် …။ ရုပ်က တော့ အချောစားကြီး မဟုတ်သလို အရုပ်ဆိုးတယ်လို့လဲ မပြောနိုင်ဘူး..။ ဆွဲဆောင်မှုတော့ အားကောင်းတယ်။ ဒါ့အပြင် ဝတ်တတ်စားတတ် ပြင်တတ်ဆင်တတ်တော့လဲ အဆင်ပြေနေတာပေါ့..။
ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ခင်ပွန်းကတော့ မြန်မာမဟုတ်ဘူး…။ အင်္ဂလိပ်-ဂျာမန် ကပြား ။ အခု မရှိတော့ပါဘူး ။ သေသွားတာ ဆယ်နှစ်လောက် ရှိသွားပြီ ။ ခင်ပွန်းသည် ကျေးဇူးကြောင့် စမ်းချောင်းဘက်မှာ အိမ်ကလေးတစ်လုံး၊ ကားတစ်စီး ၊ အိမ်အသုံးအဆောင် လက်ဝတ်ရတနာ အတော်အသင့်နဲ့လူတန်းစေ့အောင်တော့ သားအမိနှစ်ယောက် ဟန်မပျက် ဆက်နေနိုင်ခဲ့ကြတယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားက ရုံးတစ်ရုံးမှာ အရာရှိမ တစ်ယောက်..။ လစဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရှိတယ်..။ သည်ကြားထဲ အိမ်ပွဲစား မြေပွဲစားလေး ဘာလေးလဲ လုပ်တယ်..။ မဆိုးပါဘူး ..သားအမိနှစ်ယောက် ဝဝလင်လင် စားသောက်နေနိုင်ကြတယ်.။ အခု သမီးမိုမိုဟန်က ပဲခူးမှာ ရှိတဲ့ အမျိုးတွေဆီ အလည်သွားနေတယ်။ ပြန်လာတော့မှာပါ ။ ပြန်လာမှ ကားဂိတ်ကနေ အိမ်ကို ဖုန်းဆက်လိမ့်မယ် ။ အိမ်ကကားနဲ့ သွားခေါ်လိုက်ရုံပဲ..။ မိုမိုဟန်ကို သွားကြိုဖို့ ဓါတ်ဆီ ချန်ထားချင်တာကြောင့် ဒီနေ့ ဒေါ်ခင်မေထား ရုံးအပြန် ဘတ်စ်ကားစီးပြန်ခဲ့တာလေ…။
သိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ…။ ရုံးတက်ရုံဆင်းချိန်ဆို ထုံးစံ ။ ဘတ်စ်ကားက အရမ်းကြပ်တာ..။ တိုးတိုးတိုက်တိုက် နဲ့ စီးရတယ် ။ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ အညာသူဖြစ်ပေမဲ့ ရန်ကုန်ရောက်တာ ကြာပြီမို့ ကားကြပ်တာ အဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး ။ ဒီလိုပဲ တိုးတိုးတိုက်တိုက် ကြပ်ကြပ်ညပ်ညပ်နဲ့ စီးသွားမိတာပါပဲ ။
အဲ…..ဒီနေ့တော့ ခါတိုင်းနဲ့ မတူ..။ ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ကို ဒေါ်ခင်မေထား ကြုံရတော့တယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထား လုပ်တဲ့ရုံးက သမိုင်းဘက်မှာ ။ အဲဒီကနေ စမ်းချောင်းအိမ်ကိုပြန်ရင် ကားနှစ်ဆင့်လောက်စီးရတယ် ။ (၈) ကားတစ်ခါစီး ၊ မြေနီကုန်းဆင်းပြီး (၄၂) ပြောင်းစီး ။ ဒါမှမဟုတ် မြေနီကုန်းကနေ အိမ်ကို လမ်းလျှောက်သွားချင်သွား ။ ဒီနေ့လဲ ဒေါ်ခင်မေထား အမှတ် (၈) ကားနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ် ။ ရုံးဆင်ချိန်မှာ မြို့ပြင်ထွက်တဲ့ကားတွေ ကြပ်သလောက် မြို့ထဲဝင်တဲ့ကားတွေကနဲနဲတော့ ချောင်တယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ ထိုင်စရာမရတာကြောင့် မတ်တတ်ရပ်စီးခဲ့ရတယ် ။ ကမာရွတ်လှည်းတန်းမှတ်တိုင်ရောက်တော့ လူရွယ်တစ်ယောက် ကားပေါ်တက်လာတယ်…။ အသက် (၂၅) နှစ်လောက်ရှိလိမ့်မယ် ။ အရပ် ငါးပေဆယ်လက်မလောက်မြင့်တယ် ။ အသားလတ်လတ် ၊ ကိုယ်ဟန်သွယ်သွယ် ၊ မျက်လုံးအကြည့်ရဲတယ် ။ ကားပေါ်အတက်မှာ ဒေါ်ခင်မေထားကို တစ်ချက် စူးခနဲ လှမ်းကြည့်တယ်။ ဒေါ်ခင်မေထားကလဲ ကားပေါ်တက်လာတာကို အမှတ်တမဲ့ လှမ်းအကြည့်နဲ့ဆိုတော့ မျက်လုံးချင်း ခဏတော့ဆုံမိတယ် ။ လူရွယ်က မသိမသာလေး ပြုံးပြတယ် ။ ဒေါ်ခင်မေထားကို ပိုပြီးတော့လဲ စူးစူးရဲရဲ ကြည့်တယ် ။ အို….ဒေါ်ခင်မေထား စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးပဲ…ခံစားလိုက်ရတယ်..။ သူ့အသက်သူ့အရွယ်နဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတွေလို ရင်ဖိုသွားတာမျိုးတော့လဲ မဟုတ်ဖူးပေါ့..။ ဆိုင်မိတဲ့ အကြည့်ကိုလဲ ချက်ချင်းပဲ လွှဲပစ်လိုက်တယ်..။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာ လှုပ်ရှားနေတာက ပျောက်မသွားဘူး ..။ တသိမ့်သိမ့် ရှိနေတုံးပဲ…။ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ အစတော့ ဒေါ်ခင်မေထား မသိပါဘူး..။ စိတ်ထဲ တစ်မျိုးကြီး ဖြစ်နေတာကြောင့် လူရွယ်ဘက်ကို လှမ်းပြီး မျက်စိဝေ့ အကဲခတ်ကြည့်မိပြန်တယ်..။ အို……..သူမကို စူးစူးရဲရဲကြီး စိုက်ကြည့်နေတဲ့ လူရွယ်ရဲ့ အကြည့်ရိုင်းတွေနဲ့ ဆုံမိပြန်ပါလေရော…။ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ ရင်ထဲမှာ ဒိန်းခနဲကို ခုန်သွားမိတယ်..။ ဒီကောင်လေး ငါ့ကို ကြည့်လှချည်လားလို့လဲ တွေးမိတယ်..။ ဒီအတွေးဝင်လာတဲ့အခါ စောစောက ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ခံစားစိတ်လှုပ်ရှားမှုကလဲ ပိုပြင်းထန်လာတယ်..။
စိတ်ကလဲမထိန်းနိုင်..။ လူရွယ်ဘက်ကို မျက်စိ ဝင့်ဝင့်ပြီးလည်း အကဲခတ်သလိုလှမ်းကြည့်မိတယ် ။ ဒါကြောင့် လူရွယ်ရဲ့ အကြည့်ရိုင်းတွေက သူမရင်ဘတ်ပိုင်းကို ရောက်နေတာ ဒေါ်ခင်မေထား သတိပြုမိသွားတယ်…။ ဒေါ်ခင်မေထားလည်း အလိုလို သူမရင်ဘတ်ကိုသူမ ငုံ့ကြည့်လိုက်မိတယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ ရင်တွေပိုခုန်လာတယ်..။ ရင်ခုန်ရုံတောင်မကပါဘူး…။ မျက်နှာတွေပါ ပူထူသွားရတယ်..။ ဘယ့်နှယ်…..သူမနို့သီးလေးတွေ စူကြွချွန်တက်နေတာကို မြင်လိုက်ရတာ ကိုး…..။
ဒေါ်ခင်မေထားဟာ ဘရာစီယာ စည်းထားပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့ ..ယိုးဒယားနိုင်လွန် ဘရာစီယာ ဖြစ်နေတာမို့ ရင်ဘုံက သိပ်မထူဘူး ..။ ပါးပါးအိအိ ပျော့ပျော့ကလေး..။ ဖြစ်ချင်တော့ ဒီနေ့ဝတ်လာမိတဲ့ အင်းကျီကလဲ အတော်ကလေး Fitting ဖြစ်လွန်းနေတယ်..။ ကိုယ်နဲ့ကပ်ထားသလိုပဲ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် ရှိလွန်းနေတာ..။ ဒေါ်ခင်မေထား ဟာ ရင်သားတွေက ထွားမို့နေသလို နို့သီးလေးတွေကလဲ တော်တော်ရှည်တယ်..။ သာမန်အခြေအနေမှာ ပျော့ပျော့လေး ဖြစ်နေတာမို့ နို့သီးခေါင်းရှည်တာ မသိသာဘူး..။ မပေါ်လွင်နေဘူး..။ ဟော….ခုတော့ နို့သီးခေါင်းတွေက တင်းမာကော့ထောင်ထွက်နေတာဆိုတော့ ခပ်ပါးပါးပျော့ပျော့ ဘရာစီယာရင်ဘုံက ဘယ်လိုမှ ဖုံးအုပ်ပေးမထားနိုင်တော့ဘူး..။ အင်းကျီကလဲ ကြပ်ပြီး ကိုယ်နဲ့ ချပ်ရပ်နေတာမို့ နို့သီးခေါင်းတွေ ကော့ထောင်ချွန်ထွက်နေတာကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် မြင်သာနေတာပေါ့….။
ယိုးဒယားဘရာစီယာ ရင်ဘုံပျော့ပျော့နဲ့ အင်းကျီ ကြပ်ကြပ် ဝတ်လာမိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ ပြန်ပြီး ဒေါ်ခင်မေထား ဒေါပွမိတယ်…။ ပြီးတော့ စောစောက ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတာဟာ ရိုးရိုးစိတ်လှုပ်ရှားမှုမှ မဟုတ်ပဲ….။
ကာမရမက်ဇောတွေ နိုးကြားတက်ကြွနေတာဖြစ်ကြောင်းလည်း ဒေါ်ခင်မေထား နားလည်လိုက်ရတယ်..။ ဟုတ်တယ်လေ…နို့သီးတွေသာ ချွန်ကော့နေတာ မဟုတ်ဘူး..။ ပေါင်ခွကြားက အဖုတ်ကြီးကလဲ မို့ဖောင်းပြီး အရည်တွေတောင် စိုစပြုနေပြီ…။ ဟိုလူရွယ်ရဲ့ စူးစူးရဲရဲ ကြည့်တာကို ခံရရုံလေးနဲ့ ဘာကြောင့် ဒီလိုမျိုး ကာမရမက်စိတ်လိုအင်တွေ နိုးကြွလှုပ်ရှားလာရတာလဲ….။ ဒေါ်ခင်မေထား မတွေးတတ်တော့ပါဘူး…။ အို….တွေးရင်းနဲ့ ပဲ မျက်နှာတစ်ခုလုံးလဲ ရှက်သွေးလေးတွေနဲ့ နီရဲလာပါတယ်..။
ခင်ပွန်သည် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီ ဆိုတော့ ဒေါ်ခင်မေထားအနေနဲ့လည်း ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ ကာမ မစပ်ယှက်ရတာ ဆယ်နှစ်ကျော်လောက် ကြာမြင့်နေပြီပေါ့….။
ဒီအချိန်ကာလတွေအတွင်းမှာ တစ်ခါတလေတော့လည်း ကာမစပ်ယှက်ချင်တဲ့ စိတ်လိုလားမှုတွေ မကြာခဏတော့ ဖြစ်ပေါ်ဖူးပါတယ်..။ အခုလိုမျိုး ဘတ်စ်ကားပေါ် လူသူလေးပါး အလယ်ခေါင်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး…။ ညဘက်အိပ်ယားပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်း ရှိနေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာပါ…။
အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင် ရေမိုးထချိုးချင်ချိုး ဒါမှမဟုတ် စာအုပ်ဖတ်၊ဗီဒီယိုထကြည့် အာရုံလွှဲပြောင်းပစ်ရင်ပစ် ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ ကိုယ့်အဖုတ်ကိုယ် လက်နဲ့အသာပွတ် အာသာဖြေခဲ့ရတာပဲ..။ များသောအားဖြင့်တော့ စိတ်ထနေတာတွေကို ငြိမ်ကျသွားအောင် ထိန်းနိုင်ခဲ့တာများပါတယ်..။ လက်ဝါးနဲ့ အဖုတ်ကို ပွတ်ပြီး အာသာဖြေမိတာကတော့ ဆယ်ခါမှ တစ်ခါလောက်ပါ…။
ဟော …ခုတော့ လူပုံအလယ်မှာ ကာမရမက်စိတ်တွေ နိုးကြွပြီး နို့သီးတွေ ကော့ထောင် ၊ စောက်ဖုတ်ကြီး မို့ဖောင်း ၊ အရည်တွေ တရွှမ်းရွှမ်း ဖြစ်လာနေပြီ…။ ပေါင်ခွကြားက အဖုတ်ကြီး မို့ဖောင်းရွှမ်းစိုနေတာကိုတော့ သိပ်မမြင်သာ မသိသာပါဘူး..။ နို့သီးတွေ ကော့ထောင် တက်နေတာကို မြင်သာသိသာနေတာတော့ ခက်တယ်…။ ဟိုလူရွယ်ကလဲ ဒီလိုနို့သီးတွေ ကော့တောင်တက်နေတာကို မြင်လို့ မျက်စိ အရသာခံပြီး စူးစူးရဲရဲ ကြည့်နေတာ ဖြစ်မှာပါပဲ…။ ဒီလိုတွေးမိလိုက်တော့ ရှက်စိတ်တွေ ဖြစ်လာမိတယ်..။ အဲဒီရှက်စိတ်က နိုးကြွစ ရမက်စိတ်ကို ပိုလို့ထန်ပြင်းလာအောင် အားဖြည့် လှုံ့ဆော်နေသလိုပဲ..။ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ တုန်တုန်ရင်ရင်နဲ့ ပုခုံးသိုင်း လက်ကိုင်အိတ်ကို မယူပြီး ရင်ဘတ်မှာ ပွေ့တင်ထားလိုက်တယ်..။ နို့သီးတွေ ကော့တောင်တက်နေတာကို မသိနိုင် မမြင်နိုင်အောင် ကာကွယ်လိုက်တဲ့ သဘောပေါ့လေ….။
ဒီနေ့ စံရပ်ငြိမ်မှာ အခန်းငှားနေတဲ့ သူငယ်ချင်း ငြိမ်းကိုဆီ အလည်သွားရင်း ၊ ငြိမ်းကိုတို့ ဆော်ပင့်လာတာနဲ့ ကြုံလို့ စိုးထိုက်လဲ တစ်ချီ ဝင်ဖိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်..။
ဆော်က စိုးထိုက် ကြိုက်တတ်တဲ့ ရှမ်းတရုတ်ကပြားမ ဖြူဖြူတောင့်တောင့်ကြီးပဲ…။ ဒါပေမဲ့ ဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့ ကြုံဆွဲ ဝင်ရတာမို့ ၊ စိုးထိုက်ဟာ တစ်ချီကောင်းပဲ လိုးခဲ့ရတယ်..။ သိပ်အာသာမပြေခဲ့ဘူး..။
ဒါကြောင့် အပြန်လမ်းမှာ ဘတ်စ်ကားပေါ်တက်လိုက်တဲ့အခါ ဖြူဖြူချောချော တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် အစ်မကြီးတစ်ယောက် မြင်လိုက်ရတော့ စိုးထိုက်ဟာ အလိုလိုပဲ စူးစူးရဲရဲ စိုက်ကြည့်မိလိုက်တယ်..။
ဒါကလဲ သူ့အကျင့်ပါပဲ..။ သူသဘောတွေ့တဲ့ မိန်းမတွေကို ကြည့်ရင် အားမနာတမ်း စူးစူရဲရဲ ကြည့်လေ့ရှိတယ်..။ အမျိုးသမီကြီးက အသက်တော့ သူ့ထက်ကြီးမဲ့ ပုံပဲ…။ ဒါပေမဲ့ တော်တော်ကြည့်လို့ ကောင်းတယ်..။ အသားဖြူဖြူ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်ကလဲ သူ့အကြိုက် အယ်အယ်ဖြိုးဖြိုး ကြီး…။ အားလုံး အိုဗာဆိုက်ကြီးတွေ ချည်းပဲ…။
လောလောလတ်လတ်ကလဲ ဖြူဖြူတောင့်တောင့် ဆော်ကြီးတစ်ပွေကို လိုးခဲ့ပြီးခါစ….။ အာသာမပြေသေးပဲ ဆက်လိုးချင်စိတ်တွေ ရှိနေဆဲဆိုတော့ စိုးထိုက်ဟာ ဒီအစ်မကြီးကို မြင်လိုက်ရတော့ ဒီဆော်ကြီး လိုးပစ်လိုက်ရရင်တော့ ဇိမ်ပဲလို့ စိတ်ထဲမှာ အုံးနေတဲ့ ရမက်မီးစက ပြန်လူးလွန့်ထလာတယ်..။ အပြတ်ကို ဟော့လာပြီး သိပ်ကို သဘောကျနေတယ်..။ ဒီတော့ သူ့အကြည့်က စူးရဲရုံတင်မကဘူး…၊ ကာမရမက်ဓါတ်တွေလည်း အပြည့် ပါနေတာပေါ့…။
ကာမရမက်ဓါတ်တွေ အပြည့်ပါနေတဲ့ အကြည့်ရဲ့ ညှို့အားကြောင့်လားတော့ မပြောတတ်ဘူး..။ စူးစိုက်ကြည့်နေရင်းကပဲ အမျိုးသမီကြီးရဲ့ ရင်ဘတ်ဆီမှာ စူစူကော့ကော့ ကြွကြွရွရွ ဖြစ်လာတာကို စိုးထိုက် သတိပြုမိလိုက်တယ်..။
ဒီအမျိုးသမီးကြီး သူ့အကြည့်တွေကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ရမက်ဇောတွေ ကြွလာနေပြီမှန်း စိုးထိုက် ရိပ်မိတာပေါ့…။ နို့သီးလေးတွေ ကော့ထောင်နေပြီဆိုတာလဲ ဗီဇစိတ်က အလိုလိုသိနေတယ်..။ ပြီးတော့ ဒီလောက်ဆိုရင် စောက်ဖုတ်ကြီးလဲ အရေကြည်တွေ နဲ့ စိုစိမ့်နေတော့မှာပဲလို့လဲ စိတ်ကူးနဲ့ မှန်းဆကြည့်မိတယ်…။ အဲဒီအခါ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးတန်ကြီးဟာလည်း တောင်မတ်ချင်လာတော့တယ်…။
မြေနီကုန်း ရတနာပုံရုံရှေ့ မှတ်တိုင်မှာ ဘတ်စ်ကား ထိုးဆိုက်လိုက်တယ်…။ ဒေါ်ခင်မေထား ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ်..။ အဆင်းမှာ စိုးထိုက်အနားက ဖြတ်ပြီးသွားရတယ်..။ ကားကလူအကြပ်ကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ ဆင်းတဲ့လူက များတော့ အပေါက်ဝနားမှာ တိုးတိုးကြပ်ကြပ်လေး ဖြစ်နေတယ်..။
စိုးထိုက်အနားကို ဖြတ်အသွားမှာ ဒေါ်ခင်မေထား ပိုပြီးတော့ ရင်ဖိုမောလာတယ်..။ ကတုန်ကရင်ကြီးလဲ ဖြစ်လို့… ။ ဘာရယ်မဟုတ်ပဲ…စိုးထိုက်ဘက်ကို တစ်ချက်ခိုးကြည့်မိလိုက်တဲ့အခါ သူမကို စူးရဲစွာ ကြည့်နေတဲ့ စိုးထိုက်ရဲ့ အကြည့်နဲ့ ဆုံမပြန်တယ်..။ အိုး…..ရင်ထဲကို ဒိန်းခနဲ ဖြစ်သွားတာပါပဲ…။ ကမန်းကတန်းနဲ့ တိုးဆင်းလိုက်မိတယ်..။ ဒီလိုအဆင်းမှာ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ တင်ပါးကြီးဟာ စိုးထိုက်ရဲ့ရှေ့ဘက်နားဆီက ၀ိုက်ပြီးကပ်သွားရတယ်..။ စိုးထိုက်ရဲ့ ဆီးစပ်နဲ့တော့ မထိပါဘူး..။ဒါပေမဲ့ မတ်တောင်ထနေတဲ့ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးတန်ကြီး ထိပ်ပိုင်းကတော့ ဒေါ်ခင်မေထား ရဲ့ တင်ပါးဆုံကြီး ကို မထိတထိလေး ပွတ်ထိမိသွားတယ်..။
နှစ်ယောက်စလုံး ထမိန်တွေ ပုဆိုးတွေ ဘာတွေညာတွေ ဝတ်ထားလျှက်ပါပဲ၊ ထိမိတာကလည်း မသိမသာကလေးပဲ..။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ လီးအတွေ့ပဲဆိုတာကို ဒေါ်ခင်မေထား ကောင်းကောင်းသိတယ်..။ သိတာကြောင့်လဲ ရင်ကပိုခုန်သွားရတယ်..။ ကားအောက်ကိုလည်း အတင်းကြီးပဲ တိုးဆင်းသွားမိတယ်..။ သူ့လီးနဲ့ထိမိသွားတာကြောင့် အမျိုးသမီးကြီး စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားသွားတယ်ဆိုတာကို စိုးထိုက် သိလိုက်တယ်..။ အခြေအနေကို ဆက်စူးစမ်းလိုတာနဲ့ သူလဲ ကားပေါ်ကနေ အောက်ကို ဆင်းလိုက်တယ်..။
ဖြစ်ချင်တော့ ပြောပါတယ်..။ အကြောင်းကတိုက်ဆိုင်လိုက်တာ..။ စိုးထိုက် ကားအောက်ကို ဆင်းအလာမှာ ဒေါ်ခင်မေထားကလဲ ရှေ့ကို လျှောက်လှမ်းအထွက် လက်တစ်ဖက်က နောက်ကို အသာဝှေ့ယမ်းလိုက်မိတော့ အဲဒီလက်ဟာ စိုးထိုက်ပေါင်ခွကြားကို ကျကျနန ရောက်သွားပါလေရော….။
သေသေချာချာ ချိန်ဆပြီး လုပ်ရင်တောင် လွဲချင်လွဲဦးမယ်..။ အခုတော့ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ လက်ဖဝါးဟာ တောင်မတ်နေလေတဲ့ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးတံကြီးကို အောက်ကနေ အသာပင့်ကိုင်လိုက်သလိုမျိုး ထိမိသွားတယ်..။ လီးကို ပုဆိုးပေါ်ကနေပြီး အသာပင့်ကိုင်ကြည့်တဲ့ သဘောမျိုးပေါ့…။
စိုးထိုက်ရော ဒေါ်ခင်မေထားပါ အရမ်းကို လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားတယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားဆိုတာ…ရှက်လဲရှက် ၊ ရမက်စိတ်တွေလဲ ဖြင်းခနဲ ဖြစ်သွားတာကြောင့် ကမန်းကတန်း သုတ်သုတ်၊ သုတ်သုတ်နဲ့ ကားလမ်း တစ်ဖက်ခြမ်းကို လျှောက်သွားပါလေတော့တယ်..။ စိုးထိုက်ကတော့ ခဏလောက် ငိုင်ပြီး ရပ်နေမိသေးတယ်..။ နောက်မှ ရုတ်တရက် အချက်ပေးခံလိုက်ရသလို ဒေါ်ခင်မေထားနောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်သွားပါလေရော…။
ပဒုမာ ကွင်းရှေ့ရောက်တော့ ဒေါ်ခင်မေထား စိတ်မလုံစွာနဲ့ နောက်ကို မသိမသာ လှည့်ကြည့်မိတယ်..။ သူမနောက်ကို စိုးထိုက်တစ်ယောက် လိုက်လာတာကို မြင်ရတော့ ခြေဖျားလက်ဖျားတွေ တောင် အေးစက်လာတယ်..။ ရှက်ကြောက်မိသလိုလို..၊ ရမက်စိတ်ကလဲ ပိုထန်လာတယ်..။
ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ အိမ်က စမ်းချောင်း မင်္ဂလာလမ်းထဲမှာ ရှိတာမို့ လမ်းလျှောက်သွားရင် ရသလို ရွှေမန်းရုံရှေ့က နေ ကားတက်စီးသွားလို့လဲ ရတယ်..။
ကားက တစ်မှတ်တိုင်ပဲ စီးရမှာမို့ ဒေါ်ခင်မေထား လမ်းလျှောက်ပြီး ပြန်ဖြစ်တာပဲ များပါတယ်..။ ကားချောင်တာတွေ့တဲ့အခါမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် နေသိပ်ပူတဲ့ အခါမျိုးကျမှ ကားစီးတာ…။
ဒီနေ့ညနေပိုင်းကတော့ မိုးအုံ့နေတယ်..။ နေသိပ်မပူဘူး..။ ဒါပေမဲက ဟိုလူရွယ်က သူ့နောက်က တကောက်ကောက်လိုက်လာနေတာ မြင်ရပြီး ကြောက်သလိုလိုနဲ့ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားတစ်ယောက် ဟာ ယောက်ပေါင်ပြီး ကားလမ်းကို ဖြတ်ကူးလိုက်မိတယ်..။ စိုးထိုက်ကလဲ ကားလမ်းကိုဖြတ်ကူးပြီး ဆက်လိုက်လာတယ်..။
ရွှေမန်းရုံ ရှေ့မှတ်တိုက်မှာ ဘတ်စ်ကားတစ်စီး ထွက်တော့မဲ့ ဆဲဆဲ ရှိနေတယ်..။ လူကတော့ သိပ်မချောင်ဘူး..။ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ ထွက်လုဆဲဆဲ ကားပေါ် အပြေးလေး တက်လိုက်တယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထား ကားပေါ်တက်ပြီးတာနဲ့ ကားကလည်း ဝူးခနဲ မောင်းအထွက် စိုးထိုက်ကလဲ နောက်ကျန်မနေခဲ့ပါဘူး..။ လူငယ်ပီပီ ခြေသွက်လက်သွက်နဲ့ မောင်းထွက်စကားပေါ် လွှားခနဲ ခုန်တက်လိုက်သွားတယ်..။
တက်မိတာနဲ့ ကားကမောင်းထွက်သွားတာကြောင့် ဒေါ်ခင်မေထားခမျာ ..ကားပေါ်ကို ကျကျနန မတက်နိုင်သေးဘူး..။ ခြေနင်းခုံမှာပဲ ရပ်လျှက်သား ရှိနေတာ..။ လူကလဲ ကြပ်သိပ်နေတာမို့ ရှေ့ကို ချက်ချင်း မတိုးသာဘူးလေ..။ ကားပေါ်လှမ်းတက်လာတဲ့ စိုးထိုက်ဟာ ဒေါ်ခင်မေထား ရဲ့ နောက်ဘက်မှာ ကပ်လျှက်သား ဖြစ်သွားရတယ်..။ သူ့ရဲ့ မတ်တောင်နေတဲ့ လီးကြီးကလဲ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ဖင်ဆုံကြီးကို ထောက်မိသွားတာပေါ့..။ ထောက်တာမှ ဖင်ဆုံကြီး အကွဲကြားထဲမှာ လီးချောင်းကြီး အလျားလိုက်ထိကပ်မိသွားအောင် ကို အပ်မိနေတော့တယ်..။
ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ပါးစပ်က ရေရွတ်သံကလေး မတိုးမကျယ် ထွက်တယ်..။
စိုးထိုက်လည်း အံကြိတ်ပြီး သက်ပြင်းရှည်ကြီး တချက်ချလိုက်တယ်..။
စိုးထိုက်ရဲ့ ဆီးခုံကလဲ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ကားကားအိအိဖင်ဆုံကြီးနဲ့ ကျကျနနကြီးကို ထိကပ်မိနေသလို ၊ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ နောက်ကျောပိုင်းဟာလည်း စိုးထိုက်ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကို ရောက်နေတယ်..။ ကားကလဲ အတော်ကြပ်တာကိုး…။ ဒေါ်ခင်မေထား ရှောင်ထွက်ချင်တာတောင် မရနိုင်ဘူး…။ စိုးထိုက်ကလဲ ဘယ်လိုမှ နောက်မဆုတ်သာ…။
ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ပါးစပ်က ရေရွတ်သံလေး ထွက်သွားတာကို စိုးထိုက်သိသလို ၊ စိုးထိုက် အံကြိတ်ပြီး သက်ပြင်းချလိုက်သံကိုလည်း ဒေါ်ခင်မေထား ကြားရတယ်..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြောက်ရင်လွဲ၊ ရဲရင် ဘာဖြစ်ဆိုလား.. စိုးထိုက် စွန့်စားလုပ်ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ဖင်ကြီးကို ကိုင်ကြည့်ဖို့လေ..။ ဒါပေမဲ့ ခုလောလောဆယ်မှာတော့ ကားပေါ်က ပြုတ်ကျမသွားရအောင် ကားတံခါးက လက်ကိုင်သံချောင်းကို လက်နှစ်ဘက်လုံးနဲ့ ဆုတ်ကိုင်ထားရတာမို့ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ဖင်ဆုံကြီးကို မကိုင်နိုင်သေးဘူး..။ သူမ ကားပေါ်ကို ကျကျနန တက်မိမှ ဖင်ကို ကိုင်ကြည့်မယ်လို့ တေးထားရတာ..။ ဒီဆော်ကြီး ဖင်ကိုင်တာ ငြိမ်ခံနေရင်တော့ အိုခေ…။ ဆက်ချဉ်းကပ်ပြီး အကြံအဖန် လုပ်မယ်…။
ဒါပေမဲ့ ရှမ်းလမ်းမှတ်တိုင်မှာ ကားရပ်တော့ ဒေါ်ခင်မေထား တိုးတိုက်ပြီး ဇွတ်ဆင်းသွားတာကြောင့် စိုးထိုက်ရဲ့ အကြံ အထမမြောက်ခဲ့ဘူး..။ ဒါနဲ့ သူလဲပဲ ကားပေါ်ကနေ ကသုတ်ကယက် ဆင်းပြီး ဒေါ်ခင်မေထားနောက်ကို လိုက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်..။
ဒီလို လိုက်လာရင်း အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ တင်ပါး အိအိလှလှကြီးတွေ တလိမ့်လိမ့် ယမ်းခါ လှုပ်ရှားနေတာ ကို နောက်ကနေ မျက်စိအရသာခံပြီးကြည့်မိတယ်..။ ခြေလှမ်းသွက်သွက်နဲ့ ခပ်မြန်မြန် လျှောက်နေတာမို့ အမျိုးသမီးရဲ့ အိုးထွားကြီးတွေဟာ လေဝှေ့ခံရတဲ့ စပါးခင်းလို တသိမ့်သိမ့် တငြိမ့်ငြိမ့် တုန်ခါလှုပ်ရမ်းနေကြတယ်..။ ခြံဝင်းဝ တစ်ခုရှေ့မှာ အမျိုးသမီးကြီး ရပ်လိုက်တာကို စိုးထိုက် တွေ့တယ်..။
ခြံဝင်းတံခါးက သော့ခတ်ထားတယ်..။ အမျိုးသမီးကြီးက လက်ကိုင်အိပ်ထဲက သော့ထုတ်ယူပြီး တံခါးဖွင့်ကာ ခြံထဲ ဝင်သွားပါတယ်..။ ပြီးနောက်..အိမ်တံခါးသော့ဖွင့်ပြီး အိမ်ထဲလှမ်းအဝင် စိုးထိုက်ကို တစ်ချက် ဝေ့ကြည့်လိုက်မိတယ်..။ စိုးထိုက်ကတော့ ခပ်တည်တည်နဲ့ပဲ အိမ်ရှေ့ကဖြတ်ပြီး ဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်…။ သူ့ခေါင်းထဲမှာတော့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ အကြံထုတ်စဉ်းစားလို့နေတယ်..။
အိမ်ထဲကို ရောက်တော့မှ ဒေါ်ခင်မေထား လေပူတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်..။ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာထဲရောက်လာလို့ စိတ်ထဲမှာ အတော်အားရှိလာသလိုလို..။ ဒါပေမဲ့ စိတ်လှုပ်ရှား ရမက်ဇောကြွမှုတွေကတော့ ပျောက်မသွားပါဘူး..။ စိုးရိမ်ရှက်ကြောက်မှုတွေ လျော့ပါးသွားတာနဲ့အမျှ သိမ့်သိမ့်ငြိမ့်ငြိမ့်လေး လှုပ်ရှားနေတဲ့ ရမက်ဇောအဟုန်က ပိုလို့တောင် နိုးကြွလာနေတယ်..။ အထူးသဖြင့် သူမလက်ဖဝါးနဲ့ ထိကိုင်မိခဲ့တဲ့ လီးချောင်းကြီးရဲ့ အတွေ့နွေးနွေးကို ရင်တဖိုဖိုဖြင့် ပြန်တမ်းတနေမိတယ်..။ တော်တော်လဲကြီးတဲ့ ဟာကြီး…။ မာကလဲမာ သန်လဲသန် ..။ ဒါကြီးနဲ့များ အလိုးခံလိုက်ရရင်……။ အို……ငါဘာတွေတွေးနေတာလဲ၊ ဘယ်ကလူမှန်းလည်း မသိပဲနဲ့..၊ ငါကဘာကြောင့် သူ့လိုးတာကို ခံရမှာလဲ…။
ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ အတွေးတွေ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်..။ ဘာတွေးတွေး ရမက်တောမှာ ချာချာလည်နေပါတော့တယ်..။ ရင်ဖိုမောဟိုက်ပြီး အသက်ရှူကြပ်သလိုလို မောသလိုလို ဖြစ်လာတာကြောင့် ဒေါ်ခင်မေထားဟာ ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖာခုန်တစ်ခုပေါ်ကို ပစ်ထိုင်ချလိုက်မိတယ်..။ အခုတစ်ခါ စိတ်လှုပ်ရှားတာက အရင်နဲ့ မတူဘူး ။ ပိုထူးတယ်..။ ပိုပြီးတော့လည်း ပြင်းပြတယ်၊ အားထန်တယ်..။ ဒီတိုင်းတော့ ဘယ်လိုမှ အာသာပြေမှာ မဟုတ်ဘူး..။
ဒေါ်ခင်မေထား ထိုင်ခုန်ပေါ်မှာ ထိုင်ချပြီးတာနဲ့ ပေါင်ကြားက စောက်ဖုတ်ပေါ်ကို လက်နဲ့ အုပ်လိုက်မိတယ်..။ အဖုတ်က အပြတ်ကိုဖောင်းထနေပြီး အတွင်းဘက်ပိုင်းကလဲ ရွစိရွစိနဲ့လှုပ်ရှားပြီး ယားနေတယ်..။ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့တာကြောင့် စောက်ဖုတ်ကို အပေါ်ကနေ လက်နဲ့အုပ်ပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်ပစ်လိုက်တယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထား တစ်ကိုယ်လုံး ထူပူဖိန်းရှိန်းသွားတယ်..။ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတယ်..။ သွေးသားတွေ ဆူပွက်လှုပ်ရှားကြတယ်..။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ……..။
လူခေါ်ခေါင်းလောင်းသံ မြည်လာတယ်..။ ဖီလင်တွေ တရိပ်ရိပ်တက်နေပြီဖြစ်လေတဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ ချက်ချင်း ဘရိတ်အုပ်လို့မရဘူး…။ အပြတ်ကို ညိမ့်နေတာကိုး..။ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဆက်ပွတ်ပေးနေတယ်..။
လူခေါ် ခေါင်းလောင်းသံ နောက်တစ်ခါ ထပ်မြည်လာတော့မှ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ ကိုယ့်အရှိန်ကို မနည်းထိန်းပြီး ထိုင်နေရာက ထလိုက်တယ်..။ စောက်ဖုတ်ထဲက အရေကြည်တွေက အရမ်းကို စိမ့်ထွက်နေပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီးလေး ရှေ့ခွကြားမှာစိုရွှဲလို့ ဘောင်းဘီအပြင်ဘက်တောင် ယိုစီးစပြုလာတယ်..။
“ဟင်း….ဟင်း….နော် အရေးထဲမှ ဘယ်ကဧည့်သည်များရောက်လာရပါလိမ့်…“
ဒေါ်ခင်မေထားဟာ စိတ်ထဲက ကြိတ်ရေရွတ်မိရင်း တံခါးကို ဖွင့်ဟလိုက်တယ်…။ တံခါးဝမှာ မားမားကြီးရပ်နေတာကတော့…..ဟင် ကားပေါ်မှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေးပါလား…..။
ဒီအိမ်မှာ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်တည်းပဲ အခုလောလောဆယ် ရှိနေမှာပဲလို့ အကဲခတ်မိတဲ့အတွက် စိုးထိုက်က သွေးတိုးစမ်းကြည့်ဖို့ အကြံရပြီး ၊ ခပ်တည်တည်နဲ့ လူခေါ်ခေါင်းလောင်းကို နှိပ်လိုက်တာပါ ။ အဆင်ပြေလို့ အထာကြည်ရင်လဲ စားရမယ် ။ အထာမကြည်ဘူးဆိုရင်လဲ အသာခေါက်ပြန်ရုံပေါ့..။ အရှုံးတော့ မရှိနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ လုပ်လိုက်တာ…။တံခါးလာဖွင့်ပေးတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ မျက်နှာအမူအရာကို ကြည့်တာနဲ့ ရမက်စိတ်တွေ အတော်လေး ထရွနေကြောင်း စိုးထိုက် အကဲခတ်မိလိုက်တယ်..။ ပြေလည်အောင်လုပ်နိုင်ရင် သူ့အဖို့ စားပေါက်တိုးရမှာကို တွေးမိတယ်..။ ဒါကြောင့် နှစ်လိုခင်မင်ဖွယ်ရာ ပြုံးရယ်ပြပြီး ရည်ရည်မွန်မွန်ပဲ ပြောတယ်..။ “အော်…..မမ…ကျနော် ရေငတ်နေလို့ ရေလေးတစ်ခွက်လောက် သောက်နိုင်မလား….““အော်….အေးအေး…ရပါတယ်…“အမျိုးသမီးကြီးက ခေါင်းညိတ်ပြီး ပြန်ပြောတာကြောင့် စိုးထိုက် အားတက်သွားတယ်..။ အမျိုးသမီး အသာကိုယ်ယို့ပြီး ဖယ်အပေးမှာ စိုးထိုက် အိမ်ထဲ လျှောက်ဝင်လိုက်တယ်..။ ဒီလိုဝင်ရင်း အမျိုးသမီးကြီးနဲ့ ကိုယ်ချင်းထိအောင် လုပ်မယ်ဆိုရင် လုပ်လို့ဖြစ်တယ်…။ ဒါပေမဲ့ စိုးထိုက်မလုပ်ပဲ…အသားချင်းမထိရအောင် ဂရုတစိုက်နဲ့ ကိုယ်ကို အသာထိန်းပြီး အိမ်ထဲလှမ်းဝင်လိုက်တယ်..။ အမျိုးသမီးကြီးက ရေခပ်ယူဖို့ နောက်ဖေးခန်းဘက် တင်ပါးဆုံကြီး တရမ်းရမ်းနဲ့ လျှောက်လှမ်းဝင်သွားတယ်..။ အဲဒီမှာ အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ ဖင်အောက်ဘက်နားက ထမိန်မှာ ကွက်ပြီး စိုတိုတို ဖြစ်နေတာကို စိုးထိုက်ရဲ့ စူးရှတဲ့ မျက်လုံးအကြည့်က မြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်တယ်…။ အင်း…ဒီအစ်မကြီးတော့ အရမ်းကို စိတ်ထကြွနေပြီဆိုတာ သေချာပြီ….။ အပီအပြင် ကိုင်နိုင်ဖို့ပဲ လိုတယ်….။ မကြာပါဘူး..။ အမျိုးသမီးကြီး ရေဖန်ခွက်တစ်ခုကို စတီးလ်လင်ပန်းကလေးမှာတင်ပြီး ပြန်ထွက်လာတယ်..။ “ရော့…မောင်လေး..သောက်လိုက်အုန်း….“စိုးထိုက်ကို ကမ်းပေးတယ်…။“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…နော် မမ…၊ ကျနော့်နာမည် စိုးထိုက်ပါ…““အော်…..အင်း အင်း….““မမ…….မမနာမည်ကရော…““မမက….ခင်မေထားပါ…“နာမည်ထုတ်ပြောပြ အပြီးမှာ ဒေါ်ခင်မေထားက စိုးထိုက်ကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်..။ မျက်စလေး မချီတချီနဲ့ …။ မျက်တောင်ကော့တွေကလဲ တဖြတ်ဖြတ်ခတ်လို့…၊ မျက်နက်ကလေးက ထောင့်ကပ်ပြီး စိုတောက်နေတာပဲ…။ ဒီအကြည့်ထဲမှာ မြင်တတ်ရင် စကားတွေ အများကြီးပဲလို့ စိုးထိုက် အထာပေါက်တယ်..။ အဖုတ်ထဲက ယားပြီး အရည်တွေစိုလို့ ရွနေပါပြီ..။ ကာမစပ်ယှက်မှုကို သိပ်ပြီးလိုလားတမ်းတနေပါပြီ…ဆိုတဲ့ အထာလေးတွေကို ဒီအကြည့်လေးနဲ့ ပြောလိုက်တာပဲ..။ ဘာပြောကြောင်း စိုးထိုက် ရိပ်မိနားလည်ပါစေလို့ ဒေါ်ခင်မေထား ဆုတောင်းရတယ်..။ ဟုတ်တယ်လေ…သူမက မိန်းမသားမို့လား…။ ပြီးတော့ အသက်အရွယ်ကလည်း ရှိသေးတယ်လေ…။ ဒီတော့ စိတ်ထဲရှိတာကို အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ပြောပြဖို့ သူမရဲ့ အရှက်တရားနဲ့ အသိစိတ်က ခွင့်မပြုဘူး…။ ဒါကြောင့် မျက်လုံးအကြည့်၊ အမူအရာနဲ့ပဲ ပြရတာ…။ ဒါကို အထာနပ်လို့ စိုးထိုက် ရှေ့တိုးလာရင် အိုခေပေါ့..။ အထာမပေါက်လို့ နောက်ဆုတ်သွားရင်လဲ မတတ်နိုင်တော့ဘူး…ဟယ်…။
စိုးထိုက်ကလဲ အထာကျွမ်းတဲ့ ခေတ်လူငယ်ပဲ..။ ဒီလောက်တော့ သိပ်သိတာပေါ့..။ ဒေါ်ခင်မေထား..သူဝင်လာလို့ရအောင် မနဲစွန့်စားပြီး ဖွင့်ပြပေးထားတယ်ဆိုတာ မျက်လုံးအကြည့်ကနေ အကဲခတ်မိတယ်..။ ဒါကြောင့် ထိုင်နေရာက အသာထရပ်လိုက်တယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားက စိုးထိုက် ထိုင်နေတဲ့ခုန်ဘေးနားမှာ ရပ်နေတာဆိုတော့ မတ်တတ်ရပ်လိုက်တာနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြစ်သွားတယ်..။စိုးထိုက် ဒေါ်ခင်မေထားကို အသာလေး ဖက်ပွေ့လိုက်တယ်..။ ဗြုံးခနဲ ဒိုင်းခနဲ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးနော်…။ အသာယာလေး လက်လှမ်းပြီး သိုင်းဖက်လိုက်တာပါ..။ လက်လှမ်းဖက်လိုက်တဲ့ အခိုက် နောက်ဆုတ်ရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လဲ ရှောင်သာပါတယ်..။ မဆွတ်ခင်ကထဲက ညွှတ်ချင်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားတစ်ယောက် အခုလို စိုးထိုက်က သိုင်းဖက်လာတော့ ဘယ်လာ..ရှောင်တိမ်းမှာလဲ…။ အသာလေး ငြိမ်နေလိုက်ပေါ့..။ အလိုက်သင့် ပဲ အဖက်ခံလိုက်တယ်..။ဟော…။ လေးဆယ်ကျော် မမကြီး ဒေါ်ခင်မေထား တစ်ယောက်တော့ အသက်အစိတ်လောက်သာ ရှိသေးတဲ့ စိုးထိုက်ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကို ကြော့ကြော့ ကော့ကော့လေး ရောက်သွားပြီ…။ ရင်ချင်း အပ်မိနေတယ်..။ စိုးထိုက်က အသာအောက်ငုံ့လိုက်တာ မျက်နှာချင်းလဲ ထပ်လုနီးနီး ဖြစ်သွားတယ်..။ နှုတ်ခမ်းချင်းကလဲ လက်မဝက်လောက်ပဲ ကွာတော့တယ်..။ ထိလုထိခင် ဖြစ်နေပါပြီ….။“မမကို ….ချစ်တယ်ဗျာ….“စိုးထိုက် ခပ်တိုးတိုးလေး ပြောတယ်..။“ခစ်ခစ်….ခစ်ခစ်…“ဒေါ်ခင်မေထား က တသိမ့်သိမ့်လေး ရယ်လိုက်တယ်..။အဲဒီနောက်တော့ စိုးထိုက်က ဒေါ်ခင်မေထားနှုတ်ခမ်းပေါ်ကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ဖိကပ်ပြီး စုတ်နမ်းလိုက်ပါတော့တယ်…။ထိုအနမ်းက ဒေါ်ခင်မေထား တစ်ကိုယ်လုံးကို ပျော့ကျ ညွှတ်ပြောင်း သွားအောင်ကို လွှမ်းမိုးသွားတယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထား ပါးစပ်ကို အလိုလိုပဲ ဟပေးမိတယ်…။ စိုးထိုက်ရဲ့ လျှာက ဟသွားတဲ့ ပါးစပ်ထဲကို တိုးဝင်လာတယ်..။ လျှာချင်း ကလိမိတဲ့ အခါ ဒေါ်ခင်မေထား ရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်းထပြီး တုန်ခါလို့နေပါတယ်..။ ငါဟာ တော်တော်ကို ရမက်ပြင်းတဲ့ မိန်းမပဲ..။ အခု ငါလိုက်လျော လုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာ ငါ့ရဲ့ အရှက် အဝတ်လွှာကို ခွာချပစ်နေတာနဲ့ အတူတူပဲ လို့ ဒေါ်ခင်မေထား တွေးမိတယ်..။ တွေးမိတာသာ ရှိတာပါ..။ သူမရဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်လောက် အောင့်အီး မြိုသိပ်လာခဲ့ရတဲ့ ရမက်လိုအင်တွေကို သူမ ဘယ်လိုမှ မထိန်သိမ်းနိုင်ဘူး..။ သူမရဲ့ သွေးသားတွေကလဲ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ဖိုဓါတ်ကို သိပ်ကို လိုလားတောင့်တနေကြပြီလေ…။ ပြတ်လပ်နေခဲ့ရတာ သိပ်ကိုကြာလွန်းနေပြီ…။ မသင့်တော်မှန်း သိပေမဲ့ ဘယ်လိုမှ မငြင်းဆန်ချင်တော့ဘူး..။ မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့ လိုက်လျောလုပ်ဆောင်ချင်လှပြီ…။
ဒေါ်ခင်မေထားဟာ ရင်စေ့အင်းကျီ ဝတ်ထားတယ်..။ စိတ်တွေအရမ်းပဲ လှုပ်ရှားနေတာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ဘယ်လိုအင်းကျီမျိုး ဝတ်ထားမှန်း အမှတ်မရတော့ဘူး..။စိုးထိုက်က သူမရဲ့ အင်းကျီကြယ်သီးတွေ ဖြုတ်တော့မှပဲ သူမ ရင်စေ့အင်းကျီ ဝတ်ထားမိမှန်း သတိပြုမိတော့တယ်.။ ဒီလို ချွတ်ခွာတဲ့ အခါမှာ ရင်စေ့အကျီ င်္ဟာ ချွတ်ရအလွယ်ဆုံးမို့လား..။ဒီလိုချွတ်လို့လွယ်အောင်ပဲ ရင်စေ့အကျီ င်္ဝတ်ထားမိသလိုမျိုးတောင် ဖြစ်သွားတယ်..။ အမှန်ကတော့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့ သဘောပါ..။ အကျီ င်္ကြယ်သီး အဖြုတ်ခံရတာကို ဒေါ်ခင်မေထား မရှက်နိုင်တော့ပါဘူး..။ ဒါမှသာ သူမရဲ့ ရင်သားမို့မို့ဝန်းဝန်း ထွားထွားအိအိကြီးတွေကို စိုးထိုက်က မြင်တွေ့ပြီး အငန်းမရပဲ ဒီရင်သား ဆူဆူဖြိုးဖြိုးကြီးတွေကို ဆုတ်ကိုင်ပွတ်နယ်တာကို ခံရမှာ မဟုတ်လား..။ အကာအကွယ် အစည်းအနှောင်မဲ့သွားတဲ့ ရင်သားဆိုင်တွေကို အရမ်းပဲ ဆုတ်ကိုင်ပေးတာကို ခံချင်လှပြီလေ…။နို့အုံကြီးတွေ ဗလာကျင်းသွားရင် စိုးထိုက်ကလဲ အမှန်ကို ကိုင်တွယ် သုံးသပ်မှာပဲ..။ စိုးထိုက်က သူမနို့တွေကို အသာအယာ ခပ်ဖြည်းဖြည်းပဲ ကိုင်တွယ်မှာလား ၊ အရမ်းကြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဖျစ်ညှစ်ပစ်မှာလား……။ အို….တွေးရင်နဲ့ပဲ ဒေါ်ခင်မေထား ရင်တွေဖိုမောလာပြီး ရမက်စိတ်တွေ ပိုပြီး ပြင်းပြ ထက်သန်လာပြန်ပါတယ်..။ဘရာစီယာ ပုံဆန်းဝတ်ထားမိတာကိုလဲ အခုမှ ဒေါ်ခင်မေထား သတိရမိတယ်..။ ငါးထောင်ကျော်တောင် ပေးခဲ့ရတဲ့ ဘရာစီယာ ။ အရောင်က အနက်ရောင် ။ ဇာနားကွပ်..၊ ရင်ဘုံ ပျော့ပျော့ပါးပါး တင်းတင်းရင်းရင်း ၊ ရင်သားတွေကို ပုံကျပြီး ဖူးကြွကော့တက်နေအောင် ထုပ်စည်းပင့်တင်ပေးထားနိုင်တဲ့ ဘရာစီယာ အမျိုးအစား ၊ ပြီးတော့ ရင်ဘုံကိုလဲ အလွယ်တကူ မတင်၊ ဆွဲချ လုပ်နိုင်သေးတယ်လေ..။ အို…..ဘရာစီယာ ပုံဆန်းနဲ့ ထုပ်ပိုးပင့်တင်ထားတဲ့ သူမရဲ့ ရင်သားဆိုင်ကြီးတွေကို တွေ့ရရင်ပဲ စိုးထိုက်ဆိုတဲ့ ကောင်လေး အငမ်းမရ ဖြစ်လာမှာကို တွေးပြီး ဒေါ်ခင်မေထား တစ်ယောက် ရင်ခုန်ကျေနပ်နေတယ်..။ စိုးထိုက်ရဲ့ဖက်ပွေ့ထားမှုကို ခံနေရတာမို့ စိုးထိုက်ရဲ့ ကျစ်လျစ်သန်မာတဲ့ အားအင်နဲ့ ကြွက်သားတွေကို ဒေါ်ခင်မေထား ထိတွေ့ခံစားရတယ်..။ ယောက်ျားပျိုရွယ်တွေဆီမှာပဲ ရှိတတ်တဲ့ ကိုယ်နံ့သင်းသင်းကိုလဲ အပြတ်ရှူနေရတယ်..။ ဒါတွေက အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ ကာမရမက်ဇော ပိုထန် ပိုပြင်း ပိုတက်ကြွလာအောင် အားဖြည့်ပေးနေတဲ့ လောင်စာတွေပေါ့..။ ဒေါ်ခင်မေထားတစ်ယောက် စောက်ဖုတ်ထဲက အရည်ကြည်တွေ စိမ့်စိမ့်ယိုထွက်ကျလာအောင်ကို ရမက်ဇောထန်ပြင်းနေပါပြီ…။ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ အသိစိတ်ကိုလဲ ရမက်စိတ်ရိုင်းတွေက ကမ်းကုန်အောင် လွှမ်းမိုးနေပြီလို့ ဆိုရမယ်..။အခြားဘာကိုမှ မစဉ်းစားချင်တော့ဘူး..။ စိုးထိုက်နဲ့အတူ စပ်ယှက်ဖို့ကိုပဲ လိုလားနေတယ်..။ ဇောသန်နေတယ်..။ သူမ ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့် မွှေကလိပေးနေတဲ့ စိုးထိုက်ရဲ့ လျှာအစွမ်းကလည်း အတော်ထိရောက်တယ်..။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်က သူမရဲ့ နို့အုံတွေ ၊ ပေါင်သားတွေကြား ခုန်းမို့နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီး၊ ဖင်သားကြိးနှစ်ခုကြားက စအိုဝ စတဲ့နေရာတွေကို ပြန့်နှံ့အောင် အရသာထူးတွေ ပေးနေတယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ စိုးထိုက်ကို ပိုပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖက်လိုက်မိတယ်..။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ တသားတည်းကျလုမတတ် ပူးပူးကပ်ကပ်ကို ဖြစ်နေပါပြီ..။ စိုးထိုက်ရဲ့ ဘောင်းဘီခွကြားက ဖုဖုထစ်ထစ် ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတာနဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ဆီးစပ်ကို ထိမိသွားတယ်..။ ထိတွေ့မှု ပိုကောင်းအောင်လို့ ဒေါ်ခင်မေထားက ခါးကိုကော့ပြီး သူမဆီးစပ်ကို ရှေ့ပိုမောက်သွားအောင်တောင် လုပ်ပေးလိုက်မိလေရဲ့…..။
ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ အကျီ င်္ရင်ဘတ်ကျယ်သီးတွေ ပြုတ်ထွက်ကုန်ပါပြီ ။ ကျယ်သီးပြုတ်လို့ ဟသွားတဲ့ အကျီ င်္ရင်ဘတ်ကြားထဲကို စိုးထိုက်က လက်ထိုးသွင်းတယ် ။ ဘရာစီယာရင်ဘုံကို အသာလှန်တင်တယ် ။ ပြီးတော့မှ ဗလာကျင်းပြီး အထင်းသားပေါ်လာတဲ့ နို့အုံကြီးတွေကို လက်နဲ့ ဆုတ်နယ်တော့တာပဲ..။ အို….ဘာပြောကောင်းမလဲ…။ နို့တွေ အကိုင်ခံရတာနဲ့ပဲ နို့သီးခေါင်းလေးတွေဟာ ချက်ချင်းကြီးကို ကော့ထောင်စူကြွတက်လာတော့တာပဲ..။ စိုးထိုက်က ကော့ချွန်တက်လာတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ပွတ်ပေးလိုက်၊ ဖျစ်ညှစ်ကြည့်လိုက် ၊ နောက် အောက်ကနေ လက်ဖဝါးနဲ့ ဆကာဆကာနဲ့ မ..ကြည့်သေးတယ်..။ စိုးထိုက်ဟာ သူမနို့တွေကို သူစိတ်တိုင်းကျ နှိုးဆွအသုံးချနေတာဟာ သိပ်ကိုပညာပါတာပဲ..။ ဒီနို့တွေကို မိုမိုဟန်တို့အဖေ ရှိတုန်းကလဲ အကြိမ်ပေါင်း မရေနိုင်အောင် သုံးစွဲခဲ့ဘူးတာပဲ..။ ဒေါ်ခင်မေထားကိုယ်တိုင်လဲ တစ်ကိုယ်တည်း ရမက်စိတ်ဖြေရင်း ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ခဲ့ဖူးပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့ အခု စိုးထိုက် ကိုင်တွယ်ဖျစ်ညှစ် ပွတ်ပေးနေတာလောက်လောက်တော့ ဖီလင် တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးပါဘူး..။ ရင်ထဲက တလှိုက်လှိုက် ဖြစ်ရလောက်အောင် မကြုံခဲ့ဘူး…။ နို့သီးခေါင်းတွေကို ဖျစ်ညှစ် ဆိတ်ဆွဲနေတာ..နာလှပေမဲ့ အသည်းခိုက်အောင်လည်း အရသာတွေ့နေရတာမို့ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ မငြင်းဆန်နိုင်ဘူး ၊ ရုန်းမထွက်နိုင်ဘူး…။ စိုးထိုက်ပြုသမျှ ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ငြိမ်လို့သာ ခံနေတော့တယ်..။“မမနို့ကြီးတွေက တင်းရင်းပြီး အယ်နေတာပဲ..ကိုင်ဆွဲနေရတာ အရမ်းမိုက်တယ်..မမရယ်..“ စိုးထိုက်က နှုတ်ခမ်းချင်းစုတ်ဆွဲနေရာက ခဏခွာပြီး ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ နား နားကိုကပ်ပြီး တိုးတိုးလေးပြောတယ်..။ ပါးစပ်ကပြောနေရင်းကလဲ သူ့လက်တွေက ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ နို့အုံကြီးတွေကို အပြတ်ဆုပ်နယ် ကိုင်တွယ်နေသေးတယ်..။ဒီလိုအပြောခံရတော့ ဒေါ်ခင်မေထားတစ်ယောက် သိစိတ်က ရှက်သွေးပိုမိပေမဲ့ ရမက်စိတ်ရိုင်းတွေလည်း ပိုပြင်းပြင်းပြပြ ဖြစ်လာရတယ်..။“ဟင့်..ဟင့်…..မောင်လေးကလဲကွာ…““ခဏလောက်နော်….မမ..မနေတတ်တော့ဘူး….အိမ်ရှေခန်းကြီးမှာ…ရှက်စရာကြီး..အိပ်ခန်းထဲ သွားရအောင်….“ဒေါ်ခင်မေထားဟာ သူမကိုယ် သူမတောင် အံ့သြသွားမိတယ်..။ အို …ငါဘာတွေပြောလိုက်မိပါလိမ့်….။ ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ…နော်..။ သူမပါးစပ်က ဒီလိုအပြောမျိုး လျှောခနဲ ပြောထွက်သွားမိလိမ့်မယ်လို့ ဒေါ်ခင်မေထား လုံးဝ ထင်မထားခဲ့မိဘူးလေ…။ အမျိုးသမီးက ဒီလိုစပြောလာပြီဆိုတော့ စိုးထိုက်ကလဲ ဘယ်နေတော့မှာလဲ..။ ဒေါ်ခင်မေထားနဲ့အတူ အိပ်ခန်းထဲ ဝင်ခဲ့တာပေါ့…။ အိပ်ခန်းထဲမှာ နှစ်ယောက်အိပ်ခုတင်ကြီးက မွေ့ရာထူထူတဲတဲကြီးနဲ့ အခန့်သား ပနံရနေတာပဲ..။ မိုမိုဟန်တို့အဖေ နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်စဉ်ကထဲက ဝယ်ထားခဲ့တဲ့ ကြေးခုတင်ကြီးပေါ့..။ ခင်ပွန်းသည်နဲ့ ဒီခုတင်ကြီးပေါ်မှာ အကြိမ်ပေါင်း မမှတ်မိအောင်ပဲ စပ်ယှက်ခဲ့ဘူးကြတယ်..။ ခင်ပွန်းသည် ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ ဒီနှစ်ယောက်အိပ်ခုတင်ကြီးပေါ်မှာ ဒေါ်ခင်မေထား တစ်ယောက်ထဲ အိပ်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်ကာလတွေ အတော်ကိုကြာညောင်းနေခဲ့ပါပြီ…။ဟော….ခုတော့ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် အားကောင်းမောင်းသန် ယောက်ျားပျိုတစ်ယောက်နဲ့ ဒီခုတင်ကြီးပေါ်မှာ နှစ်ယောက်သား စိတ်တူကိုယ်တူ ကာမစပ်ယှက်ရတော့မယ်..။အိပ်ခန်းထဲရောက်တဲ့အခါ စိုးထိုက်က သူ့ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစားတွေ ကိုချွတ်တယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားလဲ သူမအဝတ်တွေကို ချွတ်ရတော့တာပေါ့..။ ဝတ်လစ်စလစ်ချွတ်ပြီး သူမကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် လိုးတော့မယ်ဆိုတာ ဒေါ်ခင်မေထား သိနေပြီလေ..။ တစ်စိမ်းယောက်ျားပျိုတစ်ယောက်နဲ့ ဗလာကျင်းအောင် အဝတ်တွေချွတ်ပြီး ကာမစပ်ယှက်ရတော့မှာမို့ ဏှာစိတ်တွေများလာသလို ရှက်လဲ ရှက်နေမိတယ်..။
အဝတ်တွေ ချွတ်ခွာနေတဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားကို ကြည့်ရင်း စိုးထိုက်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးစဉ်းစားမိတယ်..။ “အင်း…ဒီအစ်မကြီးဟာ ဒီလိုပဲ ကောင်လေးတွေနဲ့ အထာကြည်ပြီး ပျော်နေကျလား..။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကြည့်ရတာတော့ အရမ်းရှက်နေသလိုပါပဲ..။ ဘရာစီယာနဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ချွတ်တုန်းကဆိုရင် ငါ့ဘက်ကို ကြည့်တောင်မကြည့်ရဲဘူး…။ မျက်နှာကြီးကလဲ နီရဲနေတာပဲ..။ ဒါမျိုးတွေ လုပ်နေကျဆိုရင် ဒီလိုရှက်နေတာမျိုး ဘာညာ ရှိနေမှာတော့ မဟုတ်ဘူး…“ကိုယ်ဝတ်တွေ ကျွတ်ကွာသွားတဲ့အခါ မြင်ရတဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်ကြီးဟာ သူထင်ထားတာထက်တောင် ပိုတောင့်၊ပိုထွား..ပိုအယ်နေတာကို စိုးထိုက် တွေ့ရတယ်..။ အထူးသဖြင့် စိုးထိုက်အတွက် သဘောကျစရာဖြစ်တာက နို့လုံးကြီးတွေ အိတွဲကျမနေတာပဲ…။ နို့ပျဥ်းတွဲကျနေတဲ့ မိန်းမကြီးတွေတော့ စိုးထိုက်က ဖီလင်မလာဘူး..။ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ လေးဆယ်ကျော် မမကြီးတစ်ယောက်မို့ ဘရာ သာထောက်ကူမထားရင် နို့ကြီးတွေ အိတွဲကျနေမလားလို့တောင် စိုးထိုက် တွေးနေခဲ့မိတယ်..။ အခုလို နိကက် ချွတ်ခွာပြီး ဗလာကျင်းနေတဲ့အခါ နို့တွေ တွဲကျမနေကြောင်း မြင်သိလိုက်ရတော့ စိုးထိုက်တစ်ယောက် သဘောအကျကြီး ကျမိသွားရတော့ လေလေးတောင် တိုးတိုးချွန်လိုက်မိသေးတယ်..။ အိတွဲမနေရုံ မကပါဘူး…။ နို့တွေက တင်းရင်းပြီး ကို မို့ဝန်းနေတာ..။နို့သီးခေါင်းလေးတွေကတော့ ရှည်တယ်..။ ပြီးတော့ နို့သီးခေါင်း အခြေတဝိုက်က နီညိုရောင်ဖျော့ဖျော့ အဝိုင်းကလည်း တော်တော်ကျယ်တယ်..။ နို့သီးခေါင်းနှစ်ခု တင်းမာကော့ထောင်တက်နေပုံက ရင်သားနှစ်မွှာကို သရဖူဆောင်း အလှတင်ပေးထားနေသလိုပါပဲ..။ စိုးထိုက်လည်း ဗလာကျင်းလို့ နေပါပြီ..။ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးတန်ကြီးကို ထင်ထင်ရှားရှားကြီး မြင်လိုက်ရလို့ ဒေါ်ခင်မေထား မျက်လုံးတွေ အဝိုင်းသား ဖြစ်သွားရတယ်..။ အိပ်ရာခင်းတွေကိုလည်း လက်ချောင်းတွေနဲ့ ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိတယ်..။ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးတန်ကြီးက သူမလက်နဲ့ဆို တစ်ထွာပိုပိုလောက်ကိုရှိမယ်..။ လုံးပတ်ကြီးကလည်း သူမလက်ချောင်းတွေနဲ့တောင် ဆုပ်မိပါ့မလား…။ ပြီးတော့ ကာမစိတ်တွေ အရမ်းပြင်းပြနေတာဆိုတော့ မတ်မတ်ကြီးကိုထောင်နေတော့တာပါပဲလား..။ ထိပ်ဝက ဒစ်ဖူးကြီးကလဲ သူမကိုင်ပြီး ထိုးနေကျ ကားဂီယာ လက်ကိုင် ဘုသီးလောက်ကို ရှိလိမ့်မယ်..။ မြင်နေရတဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားခမျာ မျက်လုံးဝိုင်းစရာပေါ့…။ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ပေါင်ကြီးနှစ်ချောင်း အလိုလိုပဲ ကားသွားတယ်..။ စောက်ဖုတ်ထဲက စိုးခနဲ အရည်ကြည်တွေ ထပ်မံ ယိုစိမ့်ကျလာတယ်..။ ဆီးခုန် ကော့တက်အောင်ကို စောက်ဖုတ်က မို့မို့ဖောင်းလာတယ်..။ စောက်စေ့လေးကလဲ ငေါက်တောက်လေးကို ထောင်တက်နေတယ်..။ မျက်လုံးရွဲကြီးတွေကတော့ အရောင်တွေ တလက်လက်နဲ့ စိုတောက်နေတယ်..။ ပြီးတော့ မျက်နှာတင်မကဘူး..၊ လည်ပင်းတစ်ဝိုက်နဲ့ ရင်ဘတ်အပေါ်ပိုင်းပါ အနီရောင်တွေသန်းနေတယ်..။ မိန်းမတစ်ယောက် ရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ ဒီလို ရမက်အတွေးတွေနဲ့ အတူ ရှက်သွေးတွေ ရောယှက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အသွင်အပြင်မျိုး စိုးထိုက် အရင်က မတွေ့ဖူးသေးဘူး…။ တကယ်တော့ စိုးထိုက်က အဝတ်အစားတွေချွတ်ခွာပြီး ဒေါ်ခင်မေထားကို ပွေ့ဖက်ပွတ်သပ်ရင်းနဲ့ ရမက်ဒီရေ တက်သထက် တက်အောင် နှိုးဆွပေးအုန်းမလို့ပါ..။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ တုန်တုန်ခိုက်ခိုက်နဲ့ ရမက်ခိုးတွေ ယှက်သန်းနေတဲ့ အသွင်အပြင် ကိုမြင်ရတော့ တစ်ခါတည်း လိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်..။ သူကိုယ်တိုင်လဲ စိတ်တွေမထိန်းနိုင်တော့ပါဘူး…။ ဒါကြောင့် ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ကိုယ်လုံးအိအိကြီးပေါ် ကို တက်ခွလိုက်ပါလေတော့တယ်…။
ပက်လက်လှန်လျှက်သားဖြစ်နေလေသော ဒေါ်ခင်မေထား၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ စိုးထိုက်တက်ခွလိုက်သည် ။ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးကြီးကို လှမ်းကိုင်ကာ သူမရဲ့ စောက်ဖုတ်ဝမှာ ဆွဲတေ့ပေးတာမျိုးတော့ မလုပ်ပါ..။ သို့သော် စိုးထိုက် သူမကိုယ်ပေါ် တက်ခွပြီး လီးသွင်းရန်ပြင်တာနဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားက ဆီးစပ်ကို အလိုက်သင့်ကော့ပင့်ပေးလိုက်တယ်..။ လီးက စောက်ဖုတ်တွင် ကျကျနန တေ့ထောက်မိတယ်..။“အို…..အဟင့်…..“အဖုတ်ဝမှာ လီးတေ့ထောက်ခံရတာနဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ပါးစပ်မှ ညည်းသံကလေး ပေါါ်လာတယ်..။ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးနှစ်ခု မို့မို့ဖောင်းလျှက် အဝတွင် အရေတွေ ရွှဲနေအောင်ကို စိုလျှက်ရှိရာ လီးတေ့ထောက်လိုက်တဲ့အခါ ဖောင်းအိနွေးထွေးပြီး စိုစိစိ အရသာကို ခံစားရသည်..။ စိုးထိုက်က လီးဒစ်ကို အသာဖိသွင်းသည်..။ ကျဥ်းကြပ်သော စောက်ခေါင်းပေါက်၏ ဖျစ်ညှစ်မှုကို လီးထိပ်ဖျားက ခံရတယ်…။ လီးတန်ကြီးက ထွားလွန်းတော့ ဖိထိုးသွင်းပေမဲ့ ဒစ်ကြီးတစ်ခုလုံး မဝင်..။ အဖျားပိုင်း လက်တစ်ဆစ် သာသာလောက်သာ တိုးဝင်ပြီး တစ်နေတယ်..။လီးထိပ်ပိုင်းနှင့် ထိကပ်မိနေသော စောက်ဖုတ်အသားများ တဆတ်ဆတ် တုန်နေသလို ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ပေါင်တန်ကြီးနှစ်ချောင်း ဆတ်ခနဲဆတ်ခနဲ လှုပ်ခါသွားကြတာကို စိုးထိုက် သိလိုက်တယ်..။လီးဒစ်အဖျားပိုင်း တိုးဝင်နေသော အဖုတ်ဝမှာ တင်းကြပ်ကာ ပြဲလန်လို့ နေတယ်..။ သမီးတစ်ယောက် မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးသည့်တိုင် လီးနဲ့ ကင်းကွာနေခဲ့သည်မှာ ၁၀ နှစ်ကျော် ရှိနေပြီမို့ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ အဖုတ်ဝဟာ အတော်ပင် ကျဉ်းနေသည်..။ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးတန်ကြီးကလဲ သာမန်ယောက်ျားတွေထက် ပိုတုတ်၊ ပိုကြီး တဲ့ အိုဗာ ဆိုဒ် ဖြစ်နေ သည်..။ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ကွယ်လွန်သွားလေသူ ခင်ပွန်းသည်၏ လီးထက် နှစ်ဆနီးပါးလောက် ပိုကြီး ပိုတုတ်တယ်..။ကျဉ်းကြပ်သော စောက်ခေါင်းပေါက်လေးထဲသို့ ကြီးမားတုတ်ခိုင်သော လီးတန်ကြီး ထိုးသွင်းလို့ ဝင်မှ ဝင်ပါ့မလားဟု နှစ်ယောက်သား တွေးပူမိကြသည်…။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ လီးအဆုံးဝင်သွားစေချင်တဲ့ အာသီသကလဲ ပြိုင်တူဖြစ်ပေါ်နေကြသည်…။စိုးထိုက်ရော ၊ ဒေါ်ခင်မေထားပါ ကာမစပ်ယှက်မှုတွင် အစိမ်း ၊ အရိုင်းလေးတွေတော့ မဟုတ်ကြပါ…။ အတွေ့အကြုံ ကောင်းကောင်း ရှိပြီးသားသူတွေ…။ ကာမအရသာကို ထဲထဲဝင်ဝင် ခံစားနှစ်ခြိုက်ဖူးကြသူတွေပဲ….။ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးဝင်သွားပြီးလျင် ဘယ်လိုအရသာ ၊ ဖီလင်မျိုးကို ခံစားရမည်ဆိုတာ နှစ်ယောက်စလုံး အသေအချာသိကြတယ်…။ ထိုအရသာများကိုလဲ ပြင်းပြင်းပြပြ ခံစားလိုကြတယ်..။အခုတော့ လီးတစ်ချောင်းလုံး မဆိုထားနှင့်..၊ လီးဒစ်ဖူးကြီး တစ်ခုလုံးတောင် မဝင်နိုင်သေးပဲ အဖျားပိုင်းလောက်လေးနဲ့ ထစ်ခံနေတော့ နှစ်ယောက်လုံး မချင့်မရဲ ဖြစ်နေကြရတယ်..။ စိုးထိ်ုက်က အားစိုက်ကာ ဖိချထိုးသွင်းလိုက်ချင်ပေမဲ့ စစချင်းဆောက်နဲ့ထွင်း ဆိုသလို ဖြစ်သွာပြီး အမျိုးသမီးကြီး နာကျင်ထိတ်လန့်သွားမှာကိုလဲ မလိုလားတော့ သိပ်မကြမ်းရဲသေး…။ ညှာပြီး လိုးနေရတယ်…။
စိုးထိုက်က ဖိမထိုးတော့ပဲ ဆိုင်းနေသောအခါ ဒေါ်ခင်မေထားက လှုပ်ရှားပေးလာတယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ပြီး တင်ပါဆုံကြီးကို ကော့တင်ပေးလိုက်ရာ ထစ်နေသော လီးဒစ်ပြဲလန်ကြီး စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားတယ်..။“အား……..အိ…ကျွတ်ကျွတ်…ကျွတ်..အင်း..ဟင်း…ဟင်း…..“လီးဒစ်ကြီး နစ်မြုပ်တိုးဝင်လာမှုကြောင့် စောက်ခေါင်းဝတွင် ကျိန်းစပ်နာကြင်သွားရာ ဒေါ်ခင်မေထား မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့ကာ ညည်းမိရှာတယ်..။ ပင့်တင်ထားသော တင်ပါးကိုလဲ အောက်ပြန်ချသည်…။ စိုးထိုက်က အလိုက်သင့် ထိန်းကာလိုက်ပေးသောကြောင့် စောက်ဖုတ်ထဲ မြုပ်ဝင်နေသေား လီးဒစ်ကတော့ ပြုတ်ထွက်မသွားပါ..။ အောက်သို့ပိကျသွားမှုနှင့် အတူ လက်တစ်ဆစ်သာသာခန့်ပင် တိုးဝင်လာသည်..။ ကျန်တဲ့ လီးတန်ကြီးအပိုင်းကတော့ အပြင်ဘက်မှာ ရှိနေဆဲ…..။“အား…..ဟင့်ဟင့်ဟင့်…..“ဒေါ်ခင်မေထား ညည်းသံလေးပြုရင်း စိုးထိုက်လက်မောင်အိုးကြီးများကို လက်ချောင်းလေးများနဲ့ ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်…။ သူမရဲ့ခေါင်းကတော့ ဘယ်ညာယမ်းခါလို့ နေတယ်…။ စိုးထိုက် ဖိထိုးသွင်းခြင်း မပြုသေးပဲ အမျိုးသမီးကြီး သူမဖာသာ ကော့ပင့် ထိုးသွင်းယူလာအောင် စောင့်ရင်း အပေါ်မှ အသာပင် ငြိမ်နေတယ်…။ဒေါ်ခင်မေထားလဲ လီးဝင်လမ်း ပိုဖြောင့်စေရန် သူမတင်ပါးကြီးကို နေရာနဲနဲ ရွှေ့တယ်..။ ပေါင်တန် ဖြူဖြူဝင်းဝင်း တွေကိုလဲ ပိုကားလိုက်တယ်..။ ထို့နောက် တင်ပါးဆုံကြီးကို ဇတ်ခနဲ ကော့ပင့်တင်လိုက်ရာ လီးတန်ကြီး တစ်ဝက်ခန့် နင့်ခနဲ တိုးဝင်လာတယ်..။ “အား…အမလေးလေး..လေး….နာတယ်…နာတယ်..အီး…အကြီးကြီးပဲကွယ်…မင်း ဟာကြီးက အကြီးကြီးပါလား…..အင်း..ဟင်း…နာလိုက်တာကွယ်……“တင်းကြပ်စွာ တိုးဝင်လာသော လီးကြီးကြောင့် အဖုတ်ထဲမှာ အောင့်သွားပေမဲ့ ရှိန်းမြရင်ဖိုဖွယ်ရာ ကောင်းလှသည့် လီး၏ အထိအတွေ့ကိုလဲ သိပ်သိပ်သည်းသည်း ခံစားရသောကြောင့် နာလို့အော်ညည်းမိပေမဲ့ ကောင်းလွန်းတဲ့အရသာကိုလဲ ကျေနပ်နှစ်သက်မိသည်…။ စိုးထိုက်က အသာ ကိုယ်ကို ကိုင်းပြီး နို့သီးလေးများကို တစ်လှည့်စီ ကုန်းစို့ပေးလိုက်တယ်..။ စောက်ဖုတ်ထဲက နာကြင်မှုနဲ့ အရသာ အပြင် နို့သီးများ အစို့ခံရမှုကလဲ ယားကျိကျိ စိုစိုစိစိနှင့် အရသာတစ်မျိုးထူးတာမို့ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ တင်ဆုံကြီး မြောက်ခနဲ လှုပ်ခါ ကြွတက်သည်..။ လီးလက်တစ်ဆစ်သာသာခန့် ထပ်တိုးဝင်လာတယ်…။စိုးထိုက်က နို့သီး တွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းစို့ပေးတယ်..။ သွားဖြင့် တဆတ်ဆတ် ကိုက်ဆွဲတယ်..။ လက်နဲ့လည်း နို့အုံသားတွေကို နယ်တယ်၊ ပွတ်တယ်..။ ဆုပ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်တယ်..။ လီးသွင်းတာကို ခဏရပ်ထားကာ နို့အုံတွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း သုံးနေတယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားမှာ မူ အောက်မှ ဖင်ကြီး တလှုပ်လှုပ် ဖြစ်နေသည်..။ လီးကပိုမဝင်တော့ပေမဲ့က ဝင်ပြီးသမျှ တစ်ဝက်ကျော်ကျော်ကတော့ စောက်ဖုတ်ထဲ တိုးဝင်လိုက် ၊ ပြန်ထွက်လိုက်နှင့် တစ်ပြူတစ်ပြူ လှုပ်ရှားနေသည်..။ ညှောင့်ပေးနေတာ ခံနေရသလိုမျိုး…။ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးတန်ကြီးက ရှစ်လက်မနီးပါးမျှရှိရာ တစ်ဝက်ကျော်လောက်ဝင်နေတာဆိုတော့ သာမန်အရွယ်အစား လီးတစ်ချောင်းစာ ဝင်သလောက်တော့ ရှိသည်..။ ကွယ်လွန်သွားသူ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ လီးက ခြောက်လက်မ မရှိတရှိလောက် ရှည်သည်..။ ဒါကြောင့် ဒေါ်ခင်မေထားအနေနဲ့ လီးအရသာကို ခံစားနေရပေမဲ့ တစ်ချောင်းလုံး အကုန်မဝင်သေးတာကြောင့် ဆက်ပြီးတော့အသွင်း ခံချင်နေမိတယ်…။ ဒီအသိကလဲ ကာမအရသာကို တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဆန်းသစ်ခံစားရစေသည်..။
ဒေါ်ခင်မေထား ကြာကြာ ဆက်မအောင်အီးနိုင်တော့..။ မခံစားရသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော လီးအရသာကြောင့် သွေးသားတွေ အရမ်းလှုပ်ရှားလာကာ ပါးစပ်မှ တအိအိ တအင်းအင့် အသံလေးတွေ မြည်တမ်းမိကာ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း တွန့်လိမ်ကော့ပျံလာသည်..။ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေကလဲ အလွန်အမင်း လှုပ်ရွလာသည်..။ အမျိုးသမီးကြီး ပြီးလုနီးလာကြောင်း စိုးထိုက်က သိလိုက်တယ်…။ ဒါကြောင့် လီးကို ကော့ကော့ပေးတယ်..။ ဆောင့်လိုးတာ မခံရသေးသော်လည်း စောက်ဖုတ်ထဲတွင်ရှိနေသော လီးတန်ကြီး ငေါ့ခနဲ ငေါ့ခနဲ လှုပ်ခါသွားမှုကို ဒေါ်ခင်မေထား ကောင်စွား သိရှိခံစားရတယ်..။ လီးအငေါ့တွင် စောက်ဖုတ်အတွင်းသားများကို လှုပ်ပေးနှဲ့ပေးနေသလိုဖြစ်ရာ ဆောင့်လိုးတာခံရသည့်အသွင်နှင့် နဲနဲ ဆင်တူသည်..။ဒေါ်ခင်မေထား မနေနိုင်တော့…။ တစ်ကိုယ်လုံး ကော့ပျံ ကြွတက်ကာ တအီးအီး တအားအား အော်မြည်ရင်း တစ်ချီကောင်းကောင်းကြီး ပြီးသွားရတော့သည်..။တစ်ချီအပြီး ဒေါ်ခင်မေထားတစ်ယောက် ကော့ပျံလူးလွန့်နေချိန်မှာ စိုးထိုက်က သူ့လီးကို အသာဖိထိုးသွင်းလိုက်ရာ တစ်လက်မခန့် ထပ်ဝင်သွားသည်..။ အဆုံးဝင်အောင် ဖိသွင်းချင်စိတ် တဖွားဖွား ပေါ်လာသော်လည်း စိုးထိုက်မှာ အောင့်အည်းကာ ထိန်းလျက် ဘရိတ်အုပ်လိုက်ရသည်..။လီးပိုဝင်လာသောအခါ လီးဒစ်ပိုင်းသည် စောက်ခေါင်း အတွင်းပိုင်း သို့ ပိုပြီး နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဝင်သည်..။ ဒီအပိုင်းတွေဟာ စောက်ခေါင်း အတွင်းကျကျ နေရာများမှာသာ ရှိတာမို့ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ခင်ပွန်းသည် လီးက ခြောက်လက်မခန့်သာရှိတာကြောင့် ထိုနေရာများသို့ လီးမရောက်ခဲ့ဘူးပါ..။ စောက်ခေါင်းအတွင်းဘက်ပိုင်းနေရာများဟာ လီးနဲ့ မထိတွေးဖူးသောကြောင့် ပြောရလျင် အပျိုစင်နေရာလေးများလို ဖြစ်နေသေးသည်..။ အခုဆို စိုးထိုက်ရဲ့ လီးကြီးကလဲ တအိအိ တိုးဝင်နေရာ တစ်လက်မလောက်သာ အပြင်မှာ ကျန်တော့တာမို့ ထို အပျိုစင်နေရာများထိအောင် လီးကရောက်နေပေသည်..။ မကြုံဖူးသော ထိတွေ့မှုမို့ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ သွေးသားတွေ အရမ်းကို ဆူပွက်လာပြန်ကာ နောက်တစ်ချီ ဆက်ရွေ့ ပြီးသွားရပြန်သည်…။“အားပါးပါး…အားအီးအား…အား..အမလေးလေး….အီးအီး ကောင်းလိုက်တာ…အားပါး…ထွက်ကုန်ပြန်ပြီ…အမလေး…..ထွက်ကုန်ပြန်ပြီ…..“ဒေါ်ခင်မေထား၏ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ပေါက်ကွဲ ထွက်လုနီးပါးကို ဖြစ်သွားသည်..။ နှစ်ချီ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပြီးရသည့်အပြင် တစ်ခါမျှ မကြုံဖူးသေးသော အာသာပြင်းပြင်းနဲ့ ပြီးခြင်းမျိုးလည်း ဖြစ်နေပြန်သည်..။ ပြီး သွားမှုနဲ့အတူ ဇောရမက်ကလဲ အတောမသတ်နိုင်အောင် ပိုမို ထန်ပြင်းလာရသည်..။ စိုးထိုက်ကို တအားပင် တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားသည်မှာ စပါးကြီး မြွေ ရစ်ပတ်ထားသလို ဖြစ်နေသည်..။ စောက်ဖုတ်ထဲမှလည်း အရမ်းကို လှုပ်ရှား ရွစိထိုးကာ စိုးထိုက်၏ လီးတန်ကြိးကို တစစ်စစ်ပင် စုပ်ယူနေသည်..။ စိုးထိုက် အနေဖြင့် သူ့လီးမှ သုတ်ရည်များ မထွက်သွားရလေအောင် မနည်းပင် ကြိုးစားထိန်းထားရသည်..။ သည်မျှလောက် ရမက်ထန်ပြင်းစွာ ပြီးရတာမျိုး ဒေါ်ခင်မေထားဘဝမှာ ယခင်က တစ်ခါမျှ မဖြစ်ဖူးခဲ့ပါ..။ နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ဆိုသလိုမျိုးလည်း မပြီးခဲ့ဖူး..။ တစ်ချီကောင်းလောက်သာ ပြီး ဖူးသည်..။ ဒီလို ဆက်တိုက်ပြီးသည့် အကြောင်းများကို ကြားဖူးနားဝတော့ ရှိခဲ့သည်..။ ယခုတော့ ကိုယ်တွေ့ ကြုံရပြီ…။ ဒါတောင် စိုးထိုက်ရဲ့ လီးချောင်းကြီး အကုန် တစ်ချောင်းလုံး သူမစောက်ဖုတ်ထဲ မသွင်းရသေး…။ သူမကတော့ နှစ်ချီ ဆက်တိုက် ကြမ်းကြမ်းကြီး ပြီးခဲ့ရလေသည်..။ စိုးထိုက် သုတ်ရေ မထွက်သေးတာကိုလည်း ဒေါ်ခင်မေထား သိသည်..။ သူကတော့ ဆက်လိုးဦးမှာပဲ..။
လီးအကုန်ဝင်အောင် သွင်းပြီး တအားဆောင့်လိုးတာခံရလျင် သူမ ဘယ်နှစ်ချီလောက်များ ဆက်ပြီးရဦးမှာ ပါလိမ့်နော်…..စိုးထိုက်က လီးကို ဆက်ရွေ့ ဖိသွင်းနေတယ်…. ။ တအားကြီး ဆောင့်ချ ထိုးသွင်းတာမျိုးမဟုတ်ဖူး…။ တရစ်ချင်း တအိအိ သွင်းနေတာ…။ ကျန်နေသေးတဲ့ လီးအပိုင်းဟာ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို တထစ်ထစ်နဲ့ တိုးဝင်နေတယ်..။ နှစ်ချီ ဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားကလဲ အောက်က အရမ်းဟော့ပြီး တွန့်လိမ်ကော့ပျံနေတာ ပါလား..။ ဒီတော့ လီးသွင်းရတာ သိပ်ညှာနေစရာ မလိုတော့ဖူးပေါ့..။ ခံစားနေရတာတွေက လက်ကုန်လို ဖြစ်နေတာကြောင့် ဒေါ်ခင်မေထားခမျာ လီးကြီး တစ်ချောင်းလုံး ဝင်လာတာကို နာကြင်ရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး..။ ဒီလိုနဲ့ပဲ လီးတန်ကြီးတစ်ချောင်းလုံး ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးထဲ နေရာလပ် မကျန်အောင်ကို ထိုးဝင်ရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်…။ နှစ်ချီဆက်တိုက်ပြီးခဲ့တဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ တစ်ကျော့ပြန်ပြီး ရမက်ဇောတွေ ထန်ပြင်းလာခဲ့ပြန်တယ်..။ တစ်ကိုယ်လုံးကို ကြက်သီးတွေ ဖြင်းဖြင်းထပြီး တုန်ရင်နေတာပဲ…။ ပေါင်တန်ကြီး နှစ်ချောင်းဆို တာ ထိုးခနဲထွန့်ခနဲ ကိုဖြစ်လို့..။ အကြောဆွဲနေသလိုမျိုး..။ ဒါပေမဲ့ သုံးချီမြောက်တော့ ပြီး မသွားသေးပါဘူး..။ နှစ်ချီဆက်တိုက်ပြီးခဲ့ရလို့ ရမက်ထန်ပြင်းလာရတဲ့ အနေအထားမျိုး…။ဒီနောက်တော့ စိုးထိုက်က ပထမဆောင့်ချက်အနေနဲ့ လီးကို အသာဆွဲထုတ်ပြီး ဆတ်ခနဲ ဆောင့်လိုးလိုက်တယ်..။ “ဘွတ်….အားပါး…အီး…“အဆောင့်ခံရတာနဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ ကော့တက်သွားအောင်ကို အရသာတွေ့သွားရတယ်..။ စိုးထိုက်ရဲ့ ပုခုံးကို လက်သည်းတွေနဲ့ ကုတ်ခြစ်ဆွဲတယ်..။ ဖင်ဆုံကြိးကိုလဲ ကော့ပင့် လှုပ်ရမ်းပေးတယ်..။ ဆောင့်သွင်းလိုက်တဲ့ လီးတန်ကြီး စောက်ဖုတ်ထဲကို တိုးသိပ်ဝင်ရောက်လာမှုက ပြောမပြတတ်အောင်ပဲ အရသာရှိလှတယ်..။ တစ်ချက်ဆောင့်ထိုးကြည့်တာ အမျိုးသမီးကြီး ခံနိုင်မှန်း သိရတော့ စိုးထိုက်က ဆက်ပြီး ခပ်မှန်မှန် ဆောင့်လိုးတယ်..။ အရှိန်ကရလားတော့လဲ ဆောင့်လိုးရတာ လွယ်ကူအဆင်ပြေသွားပါတယ်..။ နှစ်ချီဆက်ပြီးခဲ့ရလို့ အရည်ကြည်တွေကလဲ စောက်ဖုတ်ထဲမှာ အရမ်းကို ရွှမ်းရွှမ်းစို နေတာပဲကိုး…။ စောက်ရည်ကြည်တွေက လီးတန်ကြီးကို ဆီးသုတ်ပေးသလို ချောမွေ့ ပြောင်လက်နေတယ်..။ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း တင်းတင်းကြပ်ကြပ် စီးစီးပိုင်ပိုင်နဲ့ လျှောခနဲ တိုးဝင်နေတာ..။ ဆောင့်လိုးနေတဲ့ စိုးထိုက်ရော ၊ ဆောင့်အလိုးခံနေရတဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားရော နှစ်ယောက်စလုံး အရသာတွေကို စူးစူးနစ်နစ်ကို ခံစားနေရတယ်..။ စိုးထိုက်က ဆောင့်ချက်တွေကို တစစ မြန်ပေးတယ်..။အားလည်း ပိုထည့်ပေးတယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားကလဲ အငြိမ်မနေပဲ သူမရဲ့ ဖင်ဆုံကြီးကို ကော့ပင့် လှုပ်ယမ်းပေသလို စောက်ဖုတ်အတွင်း ကြွက်သားတွေနဲ့ လီးတန်ကြီးကို ဖျစ်ညှစ်စုပ်ဆွဲ ပေးနေပါတယ်..။ တဘွတ်ဘွတ် တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ ဆောင့်လိုးသံတွေ၊ ဆီးစပ်ချင်း တဖတ်ဖတ် ရိုက်ခတ်သံတွေ ၊ အသက်ပြင်းပြင်း ရှူရှိုက်သံတွေ၊ မောဟိုက်သံတွေနဲ့ သောသောညံလို့နေပါတယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ အောက်ပေးတော်တော် ကောင်းတယ်..။ ဖင်ကြီးကို ရိုးရိုးကော့ပင့်ပေးတာ မဟုတ်ပဲ ခါးကိုကော့တင်ပြီး ဆီးခုန်ကြွတက်အောင် လုပ်ပြီးမှ တင်ပါးကို ဆတ်ခနဲ ကော့ပင့်လိုက်တာ..။ သေသွားတဲ့ သူမလင် ရဲ့လီးအရှည်က ခြောက်လက်မလောက်တောင် မရှိချင်တာမို့ ဆောင့်လိုးရင် လီးထိပ်က သားအိမ်ကို မထိမိဘူး..။ ဒါကြောင့် စောက်ခေါင်းကို ကျုံ့စေပြီး သားအိမ်ကို ရှေ့တိုးလာအောင် ခါးကော့ ဆီးခုန်ကြွပြီး တင်ပါးကို တည့်တည့်မတ်မတ် ကော့ပင့်တင်မှ လီးထိပ်ပိုင်းလာက်သာ သားအိမ်ဝလေးကို မသိတသိလေး ထိမိတာ…။ မိန်းမတွေအဖို့ ဆောင့်သွင်းလိုက်တဲ့ လီးကြီးက သားအိမ်ကို ထိုးစိုက်မိပြီး ပူခနဲ အောင့်ခနဲဖြစ်သွားမှသာ အရသာ နင့်နင့်စူးစူးရှိတာ မဟုတ်လား…။ ဒါကြောင့် သူမသဘာဝအလျောက် ဒေါ်ခင်မေထားက အောက်ပေးနည်းတစ်မျိုးကို တတ်ကျွမ်းနေတာ …..။\_ဟော….အခု ရှစ်လက်မကျော်ရှည်တဲ့ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးကြီးနဲ့ ဆောင့်လိုးတာခံရင်း စောစောကပြောတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အောက်ပေးနည်းနဲ့ ဖင်ကြိးကို ကော့ပင့်တင်ပေးလိုက်တဲ့ အခါကျတော့ လီးဒစ်ကြီးတစ်ခုလုံး သားအိမ်ထဲ စိုက်ဆင်း တိုးဝင်သွားတော့တာပေါ့..။ စောက်ဖုတ်အကြီး ကြီးထဲက စောက်ဖုတ်အသေးလေးတစ်ခုကို ဆက်ပြီး လိုးရသလိုမျိုး အရသာထူးစေတယ်..။ စိုးထိုက် မိန်းမလိုးခဲ့တာ မနည်းတော့ပါဘူး.။ ဒီနေ့ပဲ ဖြူဖြူတောင့်တောင့် ဆော်ကြီးတစ်ပွေကို တွယ်ခဲ့ရသေးတာ..။ အခု ဒေါ်ခင်မေထား လိုမျိုး အောက်ပေးတတ်တဲ့ မိန်းမ မကြုံဖူးသေးဘူး..။ ပြီးတော့ သူ့လီးက သားအိမ်ထဲ သည်လောက် ထိုးနစ်စိုက်ဝင်တာမျိုးလည်း မဖြစ်ဖူးသေးဘူး….။ လိုးကောင်းကောင်းနဲ့ တအားဆောင့်လိုးပစ်လိုက်တာ ဆောင့်ချက်တွေ အရမ်းကြမ်းပြီး အဝင်ကလည်း သိပ်ကိုနက်တာမို့ ဒေါ်ခင်မေထားတစ်ယောက်ဟာ တစ်ချီပြီး တစ်ချီ ဆက်တိုက်ကို ပြီးနေလိုက်တာ ငါးချီလောက်ကို ရှိသွားတော့တာပဲ…။ စိုးထိုက်ကတော့ သုတ်မထွက်ရလေအောင် ကြိုးစားပြီး ထိန်းထားတယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ လိုးလို့ အရမ်းကောင်းတာမို့ တတ်နိုင်သမျှ အချန်ဆွဲပြီး လိုးချင်တာကြောင့် သုတ်ကို ထိန်းနေတာပါ..။ ယဉ်ပါးလာပြီးရင် လိုးနည်းအဆန်းတွေနဲ့ တစ်မျိုးပြောင်းဆော်ဖို့လည်း စိတ်ကူးထားတယ်လေ….။ဟော…အခုစပြီ…။“ကျနော်နဲ့ လိုးရတာ ဘယ့်နှယ်နေလဲ ..ကောင်းရဲ့လား..““အိုကွာ….မင်းကလဲ..““နောက်တစ်မျိုး ပြောင်းလိုးချင်တယ်..လိုးရအောင်နော်…မမ..““သိဘူး…ကွာ….သဘောပဲ….““ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ မမရဲ့….ပြောပါအုန်း…““ဟာ…..သိပါဘူးဆို….““မမ အရင်တုန်းက ဘယ်လိုမျိုး အလုပ်ခံဘူးလဲ….““ဟေ့အေးကွာ…..အဲဒါမျိုးတွေ..မမေးပါနဲ့…““အော်…..သိချင်လို့ပါ မမရဲ့…၊ မမဟာ အခုမှ စအလိုးခံဘူးတာ မဟုတ်မှန်းတော့ ကျနော် သိပါတယ်ဗျ….““အံမယ်….လူကို ..အလကားနေရင်း လိုက်ခံနေတဲ့ဟာမျိုး ထင်လို့လား….““ဟာ…ဆောရီး….ဆောရီး မမ…မထင်ပါဘူး မမရာ…စကားအဖြစ်ပြောတာပါ….မမရဲ့..““မင်းကို အမှန်အတိုင်းပြောပြမယ်….တို့ယောက်ျား သေသွားပြီး သမီးတစ်ယောက် ကျန်ခဲ့တယ်.၊ ယောက်ျားကလွဲပြီး အခြား ဘယ်သူနဲ့မှ အခုလိုမျိုး မအိပ်ဖူးဘူး..မင်းဟာ ပထမဆုံးပဲ…သိရဲ့လား…ဟွန်း…““အော်…ဒီလိုကိုး..၊ ကျနော်မသိလို့ မေးမိတာ စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်…မမ..၊ ဒါနဲ့ မမဘဲကြီးကကော ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ လုပ်သလဲ…““လာပြန်ပြီ..ဒါမျိုးတွေဆို သိပ်သိချင်တယ်…ဟလား…၊ သူကပက်လက်တစ်မျိုးပဲ လုပ်တာ..အခြား ဘာမှ အပြောင်းအလဲ မလုပ်ဘူး..၊ တို့ကတော့ အခြား ပုံစံ အပြောင်းအလဲလေးတွေနဲ့ ခံကြည့်ချင်ပေမဲ့ သူ့ကို ဘယ်လိုလုပ် ပြောထွက်မှာလဲ..၊ အခု မင်းလုပ်ချင်တာကို ပြောလေ…တို့ဘယ်လိုနေပေးရမလဲ..၊ မင်းဘယ်လို လုပ်ချင်လဲ…““ဒါဆို…မမကျနော့်ကို ကုန်းပေး…လေးဘက်ထောက်ပြီးလုပ်ချင်တယ်..““ ရတယ်…ဘယ်လိုနေပေးရမလဲသာ..ပြော…““ဘာမှ မခက်ပါဘူး….လေးဘက်ထောက်ပြီးသာ ကုန်းပေးပါ…၊ ကုန်းတဲ့အခါ အောက်ပိုင်းက ဒူးနှစ်ဘက်ကို ခပ်ခွာခွာလေးထားပေး…၊ ရှေ့ပိုင်းကတော့ တံတောင်ဆစ်ကို သာ အားပြုပြီးထောက်ထား…ရလား…“ စိုးထိုက်ဟာ…ရင်အုံထွားထွား ဖင်ဆုံကားကား နှင့် ဖြူဖြူတောင့်တောင့် ကြီးဖြစ်သော ဒေါ်ခင်မေထားကို ဖင်ထောင်ခိုင်းပြီး နို့ကြီးတွေ ဆွဲပြီးလိုးချင်နေရာ ကုန်းပေးရမဲ့ ပုံစံကို သေသေချာချာပင် ပြောဆို ညွှန်ပြပေးနေတယ်..။ သူ့လီးကြီးကိုလဲ လိုးလက်စ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်..။ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးကြီးကတော့ အပြတ်ကို မာတောင်နေတာပဲ…။ စောက်ရည်ကြည်များကလဲ လိမ်းကျံထားသလို တလက်လက်နဲ့ ပြောင်ထင်းနေတယ်..။ မာန်ထနေချန်မို့ လီးကြီးက တယမ်းယမ်း လှုပ်ရှားကာ သူ့ဆီးစပ်ကိုပင် ပြန်ရိုက်မိမတတ် ဖြစ်နေရာ ၊ ထိုလီးကြီးကို လှမ်းကြည့်မိသော ဒေါ်ခင်မေထားမှာ အလိုးခံချင်သော စိတ်များ ပိုမိုပြင်းပြထက်သန်လာတော့တယ်…။ ထို့ပြင် ယခင်က သူမ တစ်ခါမျှ မခံခဲ့ဘူးသော လေးဘက်တောက် ပုံစံနဲ့ အလိုးခံရမှာမို့လည်း စိတ်တွေက ပိုလို့တောင် နိုးကြွနေသေးတယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထား လေးဘက်ထောက်ပြီး ဖင်ထောင်ကုန်းပေးလိုက်ချိန်မှာပင် တယ်လီဖုန်းက မြည်လာသည်…။ဒေါ်ခင်မေထားသည် ကမန်းကတန်း ထမိန်ကို ကောက်ယူ ရင်လျားကာ တယ်လီဖုန်းရှိရာ ဧည့်ခန်းသို့ ပြေးထွက်သွားသည်..။ ဖင်ကုန်းပေးထားသော ဒေါ်ခင်မေထားကို တက်လိုးတော့မည့်ဆဲဆဲ စိုးထိုက်မှာတော့ ဆတ်တငံ့ငံ့နှင့် မချင့်မရဲကြီး ဖြစ်ကျန်နေခဲ့သည်..။ တယ်လီဖုန်းပြောပြီး ပြန်ရောက်လာမှ အားရပါးရ တီးပစ်လိုက်မည်ဟု စိတ်ကူးကာ စိုးထိုက် စောင့်နေလိုက်ရသည်…။“တို့သမီး…မိုမိုဟန် ဖုန်းဆက်တာ…၊ သူပြန်ရောက်လာပြီ…ကားဂိတ်မှာ လာကြိုပါတဲ့..။ ဒီတော့ တို့ ဒီမှာပဲ ရပ်လိုက်ကြမှဖြစ်လိမ့်မယ်….“`ဒေါ်ခင်မေထား တယ်လီဖုန်းပြောပြီး ပြန်ရောက်လာကာ ပြောလိုက်သည့် စကားကြောင့် စိုးထိုက် စိတ်ကူးကာ တေးထားသမျှ ပျက်ပြယ်ကုန်ကြရလေတော့သည်…။ ကိုင်း….ဘာများတတ်နိုင်ပါဦးမည်လဲ…..။
နောက်တစ်နေ့မနက်……..။ ဒေါ်ခင်မေထား အိပ်ယာထ နောက်ကျတယ်…။ ညက အိပ်မက်တွေ အမျိုးမျိုးမက်ပြီး ကောင်းကောင်းမှ အိပ်မရပဲကိုး…။ ဒါပေမယ့် လူကတော့ အတော်လေးကို ကြည်ကြည်လင်လင် လန်းလန်းဆန်းဆန်း ရှိနေတယ် ။ မခံစားရတာ ရှည်ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ ကာမအရသာကို အတော်ကြီးပင် ခံစားလိုက်ရတာကိုး….။ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ သွေးတွေဟာ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ တက်ကြွ လန်းဆန်းနေတယ်လေ…။ ဒီတော့ လူလည်း ရွှင်ပျ ပေါ့ပါးနေတာပေါ့..။ မိုမိုဟန်ကတောင် သူ့မာမီ ထူးခြားရွှင်လန်းနေတာကို သတိပြုမိတယ်..။ ဒါပေမယ့် ကာမစပ်ယှက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်လို့တော့ မထင်ပါဘူး ။ အကြောင်းထူးတစ်ခု ရှိရမယ်လို့တော့ တွေးမိတယ်..။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့မာမီကို မသိမသာလေး အကဲခတ်ကြည့်နေခဲ့တယ်…။ ဒီနေ့က စနေနေ့ဆိုတော့ ဒေါ်ခင်မေထား ရုံးသွားစရာလည်း မလိုဘူးလေ…။ ပြီးတော့ မိုမိုဟန်က နံနက်စာ စီစဉ်ပေးထားတာမို့ အိပ်ရာထနောက်ကျပေမယ့် ဘာမှ ကသီလင်တ မရှိပါဘူး..။ မိုမိုဟန် ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ နံနက်စာကို အသင့်ဝင်စားလိုက်ရုံပဲ ။ စားလို့ကလည်း အတော်ကို ဝင်တယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ နံနက်စာ စားပြီးတာနဲ့ သူ့အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်တယ် ။ ခုတင်ကြီးပေါ်မှာ အသာလဲလျောင်း အိပ်နေရင်း မနေ့တုန်းက ဒီခုတင်ကြီးပေါ်မှာ စိုးထိုက်နဲ့ ကာမစပ်ယှက် အပျော်ကြူးခဲ့ကြပုံတွေ ၊ ကာမအရသာ မိန်းမိန်းမူးမူး ခံစားခဲ့ရပုံတွေကို ပြန်စဉ်းစားနေမိတယ်…။ မိုမိုဟန်ကတော့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ စာအုပ်တစ်အုပ် ထိုင်ဖတ်နေတယ်…။ အမေရိကန် စာရေးဆရာ Harrold Robin ရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ ။ ဒီစာရေးဆရာက ကာမမှုရေးရာတွေ အကြောင်းကို အတော်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ရေးလေ့ရှိတဲ့ စာရေဆရာပါ..။ လီးတန်ကြီးမားထွားကြိုင်းပြီး အလိုးသန် အဆောင့်ကောင်းတဲ့ သူဌေးကြီး လော်ရင်းက သူ့ချွေးမလေးကို လိုးတဲ့အခန်းက တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာပဲ..။ ဖတ်ကြည့်ရင်း မိုမိုဟန်ဟာ လီးကြီးကြီးနဲ့ အလိုးခံရတဲ့ အရသာကိုတောင် လိုလားတမ်းတလာမိတယ်…။ မိုမိုဟန်ဟာ အပျိုစင် စစ်စစ် လေးတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် အပျိုရည်တော့ မပျက်သေးဘူး..။ ဆိုလိုတာက သူမစောက်ဖုတ်လေးထဲကို ဘယ်ယောက်ျားရဲ့ လီးမှ ထိုးဖောက်မဝင်ဖူးသေးတာကို ပြောတာ..။ ဒါပေမယ့် သူမက ကပြားမလေးဆိုတော့ ဆိုရှယ်ကျတယ်..။ အပေါင်းအသင်း စုံတယ်..။ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းတွေများတယ်..။ ပွင့်လင်းစွာ ခင်မင်တတ်တယ်..။ ရဲတင်းစွာလဲ ဆက်ဆံတတ်တယ်..။ ရည်စားက သုံးယောက် ၊ သူငယ်ချင်းမက ရည်းစားလည်း မကျတဲ့ ကောင်လေးက ဆယ်ယောက်လောက်ရှိတယ်..။ မိန်းကလေးအချင်းချင်း ဖွဲ့ထားတဲ့ အချစ်တော်ကလည်း နှစ်ယောက်လောက်ရှိတယ်..။ နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်ခံရတာ ၊ နို့ကိုင်ခံရတာ ၊ ဖင်ပွတ်ခံရတာတွေကတော့ အများကြီးပဲ…။ ဒါတွေတင် ဘယ်ဟုတ်မှာလည်း..။ စောက်ဖုတ်ကို လက်နဲ့ အုပ်ကိုင်ပွတ်ပေးတာတို့ ၊ စောက်ဖုတ်ထဲ လက်ချောင်းနဲ့ ထိုးသွင်းကလိတာတို့ကိုလည်း ခံဘူးတယ်..။ ကုန်ကုန်ပြောရမယ်ဆို ဘိုင်ဘရေတာလို့ခေါ်တဲ့ လျပ်စစ် တုန်ခါတံ တောင်မှ စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းပြီး ကာမအရသာ ခံစားဖူးတယ်..။ အဖုတ်ထဲကို ဘယ်လီးမှ ဝင်မအောင်းဖူးသေးတာ တစ်ခုကြောင့်သာ အပျိုစင်လေးလို့ပြောရတာ..။ စောက်ဖုတ်မှာ အပျိုမှေးပါးလေးလည်း ဖုံးအုပ်လျက် ရှိမနေတော့ပါဘူး..။“ ကလင်….ကလင်……ကလင်…..“
လူခေါ် ခေါင်းလောင်းသံ မြည်လာတာကြောင့် မိုမိုဟန်ဟာ စာအုပ်ဖတ်နေရာကထပြီး တံခါးဝကို လာခဲ့တယ်..။ တံခါးက နှစ်ထပ်ရှိတာမို့ သံဘာဂျာတံခါးကို အရင်ဖွင့်ရတယ်..။ ပြီးမှ သစ်သားတံခါးမကြီးကို ထပ်ဖွင့်ရတာ..။ ဒါပေမယ့် တံခါးနှစ်ထပ်လုံးကို ညကျမှသာ ပိတ်တာပါ..။ ခုလို နေ့ခင်းဘက်ပိုင်းမှာ ဆိုရင်တော့ သစ်သားတံခါးကြီးကို ဖွင့်ထားပြီး သံဘာဂျာတံခါးကိုပဲ ပိတ်ထားတာ..။ ဒီတော့ အထဲကနေ လှမ်းကြည့်ရင် အပြင်မှာ ရှိနေတဲ့လူကို ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်တယ်.. ။ သံဘာဂျာတံခါး ဖွင့်ဖို့မလိုဘူး..။ အပြင်ဘက်မှာ လူရွယ်တစ်ယောက်ရပ်နေတယ်..။ အသက် ၂၅ နှစ်လောက်ရှိမယ်..။ လူပုံက ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့် ပါပဲ..၊ ဝတ်စားထားတာကလဲ အပျံစား..။
“ သမီးက မိုမိုဟန် မဟုတ်လား…..“
ဧည့်သည်လူရွယ်က မိုမိုဟန်ကို ခပ်စူးစူး ကြည့်ပြီး မေးလိုက်တယ်..။အခု မိုမိုဟန့် အသက်က ၂၀ ရှိပါပြီ..။ ဧည့်သည်လူရွယ်နဲ့ ဆိုရင် အသက်ချင်း သိပ်မကွာလှပါဘူး..။ အဲဒါကို သမီးလို့ အခေါ်ခံရကြောင့် စိတ်ထဲ မကျေနပ်သလို ဖြစ်မိတယ်..။ ပြီးတော့ လူရွယ်ရဲ့ အကြည့်ကလည်း အရမ်း စူးစူးရဲရဲ နိုင်တယ်လို့လည်း ထင်မိပြန်တယ်..။ “ဦးက ဘယ်သူ့ကို တွေ့ချင်လို့လဲ…….“
သမီးလို့ခေါ်တာကို အရွဲ့တိုက်တဲ့ အနေနဲ့ မိုမိုဟန်က ဧည့်သည်လူရွယ်ကို ဦး လို့ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်လေ…။
“သမီးရဲ့ မေမေကို တွေ့ချင်လို့ပါကွ…၊ ဦးက သမီးမေမေရဲ့ မိတ်ဆွေပါ…“
မိုမိုဟန် နှာခေါင်းရှုံ့သွားမိပြန်တယ်..။ လေးဆယ်ကျော်အရွယ် သူမမာမီက အသက်အစိတ်လောက်ပဲ ရှိဦးမယ့် ယောက်ျားပျို တစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်မှာတဲ့လား…။ ပြောပုံက တကယ်ရင့်တယ်…။ အပြတ် ပြန်ဟောက်လိုက်မယ်လို့ မိုမိုဟန် စိတ်ကူးနေတုန်းမှာပဲ သူမမာမီရဲ့ စကားသံ ကြားရတယ်..။
“ဟော…..မောင်လေးပါလား…၊ ဘယ်ကလှည့်လာတာလဲ…..လာလာ..၊ အထဲကိုဝင်လေကွယ်..“
ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ အသံလွင်လွင်ကလေး..၊ ပြီးတော့ ဧည့်ခန်းထဲဝင်လာတဲ့ သွင်ပြင်ဟန်ပန်ကလည်း ကြော့ကြော့ မော့မော့လေး…။ မိုမိုဟန်က အသာလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူမမာမီရဲ့ မျက်နှာဟာ အရွှင်ဆုံး ပြုံးလို့ အရည်လဲ့နေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ဧည့်သည်လူရွယ်ကို ကြည့်နေတာ သတိပြုမိတယ်..။
“မမ ဆီပဲ တမင်လာလည်တာပါပဲ…မမရဲ့..၊ ဘယ်ကမှ လှည့်ဝင်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး…“
ဧည့်သည်လူရွယ်က ပြန်ပြောတယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားကိုယ်တိုင် တံခါးကို သွက်သွက်လေး ဖွင့်ပေးလိုက်တော့ သူက ဧည့်ခန်းထဲကို ဝင်လာပါလေရော…။
“ဒါ….မမသမီး မိုမိုဟန်လေ…၊ သမီးရေ…သူက ကိုစိုးထိုက်တဲ့..၊ မာမီ့ မိတ်ဆွေပေါ့..၊ သွားကွယ်..သူ့အတွက် တစ်ခုခု လုပ်ခဲ့ပါ….“
ဒေါ်ခင်မေထားက မိုမိုဟန်ကို စိုးထိုက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်..။
“မမ သမီးက အချောစားကြီးပဲကိုး…၊ မမနဲ့လည်း အတော်တူပါတယ်…“
စိုးထိုက်က ပြောရင်း မိုမိုဟန်ကို သူ့ထုံးစံအတ်ိုင်း စူးစူးရဲရဲ ကြည့်လိုက်ပြန်တယ်..။ မိုမိုဟန်တစ်ယောက် စိုက်အကြည့်ခံလိုက်ရလို့ စိတ်ထဲ လှုပ်ရှားသွားရတယ်..။ သူမကို ချောတယ် ပြောလို့ မိန်းကလေးပီပီ သဘောကျသွားတယ်..။ စူးရဲတဲ့ အကြည့်တွေကို မကျေနပ်သလိုဖြစ်မိပေမယ့် ၊ ရင်ထဲမှာတော့ လှိုက်ဖိုသွားတယ်..။ အကြည့်စူးရဲတဲ့ ယောက်ျားတွေဟာ အချစ်ကြမ်းတတ်တယ်လို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောဖူးတာကို အမှတ်ရမိတယ်…။ ထို့ကြောင့် မိုမိုဟန်ရဲ့ အကြည့်က စိုးထိုက်ရဲ့ဘောင်းဘီခွကြားသို့ဖြတ်ခနဲ တစ်ချက်ရောက်သွားတယ်..။သိပ်မသိသာသော်လည်း ဘောင်းဘီးခွကြားတွင် ဖုဖုထစ်ထစ်နဲ့ဖောင်းမို့နေတာမို့ လိင်အင်္ဂါအတော်ထွားနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းကြည့်မိတယ်..။ ယောက်ျားများရဲ့ လိင်အင်္ဂါအရွယ်အစား သိလိုလျင် လက်မကိုကြည့်ကာ မှန်းယူရတယ်လို့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးထားတာကြောင့် စိုးထိုက်ရဲ့ လက်မကိုလည်း မသိမသာ ကြည့်မိတယ်.။ လက်မက အတော်ကြီးတယ်..၊ သန်မာပုံလည်းရတယ်..။ ဒီတိုင်းဆိုရင် သည်လူရဲ့ လီးကလည်း အပြတ်ကိုကြီးမှာပဲ…ဟုမိုမိုဟန် တွေးလိုက်မိတယ်..။ စိုးထိုက်က ဧည့်ခန်းထဲမှ ထိုင်ခုံတစ်ခုမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်..။ မိုမိုဟန်လည်း မာမီခိုင်းထားတာလုပ်ပေးဖို့ မီးဖိုခန်းဘက် ဝင်ခဲ့တယ်..။ တင်ပါးကို မသိမသာ ခါယမ်းသွားအောင်လုပ်ပြီး လျှောက်သွားတယ်..။ အကြည့်ရဲတဲ့ စိုးထိုက်ကို စ ကြည့်ချင်တဲ့ သဘောပါ..။ မီးဖိုခန်း အဝင်ဝရောက်တော့ ဆတ်ခနဲ ခေါင်းငဲ့ပြီး ကြည့်လိုက်တယ်..။ သူမတင်သားတွေ လှုပ်ခါယမ်းနေတာကို ငမ်းနေမယ့် စိုးထိုက်ကို တွေ့ရ့မလားလို့ စူးစမ်းလိုက်တယ်..။ ဒါပေမယ့် မိုမိုဟန် ထင်ထားသလို မဟုတ်ပါဘူး..။ စိုးထိုက်က သူမမာမီ ဒေါ်ခင်မေထားနဲ့ နှစ်ယောက်သား ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီး တွတ်ထိုးသလို စကားပြောနေကြတာကိုပဲ မိုမိုဟန် မြင်ရတယ်..။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကြည့်နေကြတဲ့ မျက်လုံး အကြည့်တွေ မရိုးသားတာကိုလည်း မိုမိုဟန် အကဲခတ်မိတယ်..။ မိုမိုဟန်ဟာ ခြေတစ်ချက်ဆောင့် ၊ နှုတ်ခမ်းကို ခပ်စူစူလေးလုပ်ပြီး မီးဖိုခန်းထဲ ဝင်သွားပါလေတယ်..။ စိုးထိုက် ခုလိုရောက်လာတာက ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခု ရှိတယ်..။ တစ်ခုက ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ သမီး မိုမိုဟန်ဆိုတာ ဘယ်လိုအနေအထား ၊ အရွယ်အစားမျိုးလဲ ဆိုတာ အကဲခတ်ကြည့်ချင်လို့…။ နောက်တစ်ခုကတော့ သည်ညမှာ ဒေါ်ခင်မေထားနဲ့ တွေ့ပြီး လိုးပွဲဆင်ရအောင် အချိန်းအချက် လုပ်ဖို့…။ သူ့ရည်ရွယ်ချက် နှစ်ခုစလုံး အောင်မြင်တယ်လို့ ဆိုရမယ်…။ မိုမိုဟန်က ဘိုကပြားမလေး အသွင်နဲ့ စွဲမက်စရာ လှလှပပ တောင့်တောင့်တင်းတင်း ဖြစ်တာကို တွေ့ရမြင်ရတယ်..။ ( ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ကွယ်လွန်သူ ခင်ပွန်းသည်က အင်္ဂလိပ်- ဂျာမန် ကပြားတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ မိုမိုဟန်မှာ ဘိုသွေးပါမှန်းတော့ စိုးထိုက် မသိသေးပါဘူး..။) ပြီးတော့ မိုမိုဟန် ကြည့်ရတာ အစိမ်းသက်သက်လေးမဟုတ်ပဲ စ ကြည့်ရင် ရနိုင်တဲ့ အနေအထားရှိမှန်း အကဲခတ်မိတာကြောင့်လဲ စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်ပြီး ကျေနပ်သွားတယ်..။ တကယ်လို့ အဆင်ပြေအောင် ဖန်တီး ကိုင်တွယ်နိုင်လို့ရှိရင် အမေရော ၊ သမီးပါ နှစ်ပွေစလုံး အပြတ်ဖိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်လား…။ အစတုန်းကတော့ ဒေါ်ခင်မေထားကို အပြင်ခေါ်ထုတ်သွားဖို့ အချိန်းအချက်လုပ်မယ်လို့ ကြံထားတာပဲ…။ အခု မိုမိုဟန်ကို မြင်ရပြီးတဲ့နောက် မှာတော့ အကြံတစ်မျိုး စိတ်ကူးရတာကြောင့် ဒေါ်ခင်မေထားကို အပြင်ခေါ်ထုတ်ဖို့ စကားမဟတော့ဘူး..။ ဒီအိမ်မှာပဲ ညဘက် တွေ့ဖို့ ပြောဆိုလိုက်တယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားရော စိုးထိုက်ရော တစ်ချီကောင်းပဲ လိုးခဲ့ဆော်ခဲ့ရတာဆိုတော့ မကျေနပ်နိုင်ကြသေးဘူး…။ ဒါက အစပျိုးရုံပဲ ရှိသေးတဲ့ သဘောလောက်ပဲမဟုတ်လား..။ နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်ရန် အများကြီး ကျန်နေသေးတယ်လေ…။ ဒါကြောင့်လည်း စိုးထိုက်က လာပြီး အချိန်းအချက်လုပ်တာ…။ ဇာတ်လမ်းဆက်ချင်နေသေးတဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားကလည်း စိုးထိုက်ရဲ့ ချိန်းဆိုချက်ကို လက်ခံလိုက်ပါတယ်….။ ချိန်းထားတဲ့ အချိန်ကလည်း သိပ်အဝေးကြီး မဟုတ်ပါဘူး…။ ဒီနေ့ည (၁၁) နာရီ……။
အဲဒီနေ့ညဦးပိုင်း ၉ နာရီ ကျော်ကျော်လောက်ကထဲက ဒေါ်ခင်မေထားတို့ရဲ့ အိမ်ကလေးဟာ မီးမှိတ်ပြီး တိတ်ဆိတ်လို့ သွားပါတယ်..။ ဒါပေမယ်. အိမ်ထဲက အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်ကတော့ အိပ်နေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး..။ သမီးဖြစ်တဲ့ မိုမိုဟန်က မျက်စိကြောင်ပြီး အိပ်မပျော်နိုင်ဖြစ်နေတာ..။ သူမအိပ်ခန်းထဲမှာ စာအုပ်ဖတ်မယ်လို့တောင် စိတ်ကူးနေသေးတာ.။ သူမအမေ စောစော အိပ်ရာဝင်တာ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်မှာစိုးလို့ မဖတ်တော့ဘူး…။ မိုမိုဟန်ရဲ့ အိပ်ခန်းက ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ အိပ်ခန်းနဲ့ ဘေးချင်းကပ်လျက်လေ..။ ခြောက်ပေသာသာလောက် မြင့်တဲ့ သုံးထပ်သား ခန်းဆီး နံရံလေးပဲ ကာထားတာ…။ မီးဖွင့်မယ်ဆိုရင် အပေါ်ဘက်ခြမ်းကနေ တဆင့် ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ အခန်းထဲထိ လင်းသွားနိုင်တယ်..။ မျက်စိကြောင်ပြီး အိပ်မပျော်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ မိုမိုဟန်ဟာ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း တောင်တွေးမြောက်တွေး လျှောက်တွေးနေမိတယ်..။ မိုမိုဟန်ရဲ့ အတွေးတွေထဲကို ထူးထူးခြားခြား ပါဝင်လာတာက နေ့ခင်းက အိမ်လာလည်ခဲ့တဲ့ လူ ကိုစိုးထိုက် ဆိုတဲ့ အစ်ကိုကြီးပေါ့..။ ဟုတ်တယ်…ကိုစိုးထိုက်အကြောင်းကို မိုမိုဟန် တွေးနေမိတယ်..။ အထူးသဖြင့် ကိုစိုးထိုက်ရဲ့ အကြည့်စူးစူးရဲရဲတွေလေ.။ အဲဒီ အကြည့်တွေကြောင့် မိုမိုဟန် ရင်ဖိုခဲ့ရတယ်…။ ဟော အခု ပြန်တွေးကြည့်မိတဲ့ အခါကျတော့ ရင်ဖိုရုံသာ မကဘူး..။ အဖုတ်ထဲကပါ စိုစိစိ ဖြစ်လာတယ်.။ ဘယ်လိုလဲ…တစ်မျိုးကြီးပါလား…။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင်သွားလာနေတဲ့ ကပြားမလေး မို့ မိုမိုဟန်က အရမ်းကို ခေတ်မီပါတယ်..။ ဖြတ်ဆို…အထာပေါက်ပြီးသား..။ သူမအမေနဲ့ ဒီဘဲကြီး ကိုစိုးထိုက်တို့ဟာ မရိုးကြဘူးဆိုတာ သူမ အကဲခတ်မိပြီးသား…။ မိုမိုဟန်အဖို့ အတွေးခက်ရတာက သူတို့နှစ်ယောက် အသက်အပိုင်းအခြား အများကြီး ကွာနေကြတာကိုပါ..။ စိုးထိုက်က သူမအမေထက် အသက် အပုံကိုငယ်တာ..။ လေးဆယ်ကျော်ပိုင်း အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ သူမအမေဟာ စိုးထိုက်လို အသက်အစိတ်လောက် အရွယ်ရှိတဲ့ ယောက်ျားပျိုတစ်ယောက်နဲ့ ဖြစ်နေတာ ဟုတ်နိုင်ပါ့မလား..လို့ တွေးမိတယ်..။ စိုးထိုက်လို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ မိန်းမတွေကျအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ( မိုမိုဟန်ရဲ့ အကဲဖြတ်ချက်ပါ ) လူတစ်ယောက်က မေမေ့လို အသက်ကြီးကြီးမိန်းမတစ်ယောက်ကို သဘောကျနိုင်ပါ့မလား ။ ချစ်နိုင်ပါ့မလားလိုလည်း တွေးမိတယ်..။ ငါထင်မိတာ ဟုတ်မှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင် သံသယဖြစ်မိသေး….။ ဒီလို ဟိုတွေးဒီတွေး ၊ အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ လျှောက်တွေးနေတာ ၁၁ နာရီ သာထိုးရော..။ အိပ်ချင်စိတ်ကို လုံးဝမရှိသေးဘူး…။ မျက်လုံးကလဲ ကြောင်လို့…။ အဲဒီတုန်း မှာပဲ……………။ ည ၁၁ နာရီ တိတိမှာ စိုးထိုက်ဟာ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ အိမ်တံခါးပေါက်ဝကို ရောက်လာပါတယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားကလည်း ၁၁ နာရီ အကိုက်မှာပဲ အိပ်ခန်းထဲက အသာ ခြေဖျားလေးထောက်ပြီး ထွက်လာကာ အိမ်တံခါး နှစ်ထပ်ကို သော့ဖွင့်လိုက်တယ်..။ စိုးထိုက် တံခါးဝရောက်သွားတဲ့ အချိန်နဲ့ ဒေါ်ခင်မေထား တံခါးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အံကိုက်ပဲ…။ အချိန်ကိုက်ဖြစ်မှာပေါ့….။ ဒေါ်ခင်မေထား နဲ့ စိုးထိုက်တို့ဟာ နာရီချင်း အပီ တိုက်ထားခဲ့ကြတာကိုး…။ ဒေါ်ခင်မေထား ဖွင့်ပေးတဲ့ အိမ်တံခါးကနေ စိုးထိုက်က လှစ်ခနဲ ဝင်တယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ တံခါးကို ချက်ချင်းပြန်ပိတ်လိုက်တယ်..။ ဘာမှ အချိန်မကြာလိုက်ဘူး…။ စိုးထိုက်တစ်ယောက် အိမ်ထဲကို ရောက်သွားပြီ..။ အိပ်ခန်းထဲ ရောက်တာနဲ့ စိုးထိုက်က မီးခလုတ်ကို ဖွင့်လိုက်တယ်..။ ပြီးတော့…..သူမအမေရဲ့ အိပ်ခန်းဘက် မီးချောင်းလင်းသွားတာက မိုမိုဟန်ရဲ့ အခန်းဘက်ခြမ်းကိုပါ အတော် လင်းလင်းချင်းချင်း ရှိသွားစေတယ်..။
အခန်းနှစ်ခုက ခန်းဆီး နံရံတွေက ခြောက်ပေသာသာလောက်ပဲ မြင့်ပြီး အပေါ်ဘက် ခြမ်က မျက်နှာကျက်နဲ့ သုံးပေလောက် ကွာနေတယ်..။ ဒီတော့ တစ်ဘက်ခန်းက မီးထွန်းလိုက်တဲ့ အခါ တစ်ဘက်ခန်းကို အပေါ်ပိုင်းကနေ အလင်းရောက်နေတယ်..။ ပထမတော့ မိုမိုဟန် ဘာမှ အထွေအထူး စိတ်မဝင်စားလှသေးပါဘူး..။ ဘာသိဘာသာပဲ နေလိုက်တယ်..။ ဒါပေမယ့် သူမအမေအခန်းထဲက စကားပြောသံလိုလို၊ လှုပ်ရှားသံလိုလို အသက်ပြင်းပြင်း ရှူသံလိုလို မသဲမကွဲ အသံတွေ ကြားရတော့ စိတ်ဝင်စားလာတယ်..။ ဘာသံရယ် ကွဲကွဲပြားပြား မသိရတဲ့ အသံတွေ ပေမယ့် မရိုးသားလှကြောင်းကိုတော့ အလိုလို စိတ်ထဲ သိနေတယ်..။ ခံစားလို့ ရတယ်..။ မိန်းမဆိုတာ အနည်းနဲ့ အများတော့ စပ်စုတတ်ကြတာပဲ…။ မိုမိုဟန်လဲ ဒီလိုပဲပေါ့….။ စိတ်ဝင်စားမိတာနဲ့ ခုတင်ပေါ်လဲံလျောင်းနေရာက ထပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်.. ။ တစ်ဘက်ခန်းကို ချောင်းကြည့်ဖို့ပေါ့…။ ကံကောင်းချင်တော့ အိပ်ခန်းနှစ်ခု ခြားထားတဲ့ သုံးထပ်သားအစပ်မှာ ဟတတ အက်ကြောင်းရာလေးတစ်ခု ဖြစ်နေတာကို မိုမိုဟန် သွားမြင်ရတယ်..။ ဟိုဘက်ခန်းမှာ ထွန်းထားတဲ့ မီးရောင်က အဲဒီ အက်ကြောင်းရာကနေ တိုးဝင်လာလို့ အက်ကြောင်းရှိနေမှန်း သိရတာပါ..။ မဟုတ်ရင် သိဖို့ မလွယ်ပါဘူး…။ မိုမိုဟန်က အဲဒီးအက်ကြောင်းကနေ ဟိုဘက်ခန်းကို အသာချောင်းကြည့်လိုက်တယ်..။ ချောင်းကြည့်မိတဲ့ နေရာကလဲ တကယ့် နေရာကောင်း..။ တစ်ဘက်ခန်းက နှစ်ယောက်အိပ်ခုတင်ကြီးနဲ့ တည့်တည့်တန်းနေတာပဲ…။ ဒီတော့ အဲဒီ ခုတင်ကြီးပေါ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ ကို အပီအပြင် မြင်နေရတော့တာပေါ့…။ စိုးထိုက်ဆိုတဲ့ လူက သူမအမေ အိပ်ခန်းထဲ ရောက်နေတယ်လေ…။ ပြီးတော့ သူမအမေနဲ့ စိုးထိုက်တို့ ဖက်ပြီး နမ်းနေကြတယ်..။ နမ်းတာမှ ပါးစပ်ချင်းတေ့ကပ်ပြီး အာသာငမ်းငမ်းနဲ့ စုပ်နမ်းနေကြတာ..။ ပြီးတော့ စိုးထိုက်ရဲ့ညာဘက်လက်က ဒေါ်ခင်မေထား ဝတ်ထားတဲ့ ရှပ်အကျီ င်္ပုံစံ ဘလောက်စ်ရဲ့ ရင်ဘတ် ကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်နေတယ်..။ ကြယ်သီးပြုတ်ပြီး ပွင့်ဟသွားတဲ့ ဘလောက်စ်အကျီ င်္ထဲကို စိုးထိုက်ရဲ့လက်တိုးဝင်သွားတာကိုလည်း မိုမိုဟန် ကောင်းကောင်းမြင်လိုက်ရတယ်…။ သူမအမေဟာ စိုးထိုက်ရင်ခွင်ထဲမှာ ကြော့ကြော့မော့မော့နဲ့ ကော့ကော့လေး ရှိနေတယ်..။ စိုးထိုက်ကို တန်ပြန် စုပ်နမ်းနေကြောင်း မိုမိုဟန် သိတယ်…။ ဘလောက်စ် အကျီ င်္အောက်ထဲက စိုးထိုက်ရဲ့ လက်တွေကလည်း သူမအမေရဲ့ နို့အုံတွေကို ဆုပ်နယ်နေမှာပဲလို့လည်း မှန်းဆမိတယ်…။ မိုမိုဟန်ဟာ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးမဝင်ဖူးသေးတာသာ ရှိတယ်..။ ချစ်မှုရေးရာတွေမှာတော့ အတွေ့အကြုံ အတော်များများ ရှိဖူးပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ လိုးကြတာကိုတော့ တစ်ခါမှ ချောင်းမကြည့်ဖူး ပါဘူး…။ ဟော…..အခုတော့ ချောင်းကြည့်တွေ့မြင်ရတော့မယ်လေ…။ မြင်မဲ့ မြင်ရတော့လည်း သူမအမေကို ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်က ချတာကို သေသေချာချာ ကြည့်ရတော့မှာ…။ ကိုယ့်အမေကိုယ်တိုင် အလိုးခံရတော့မှာကို ချောင်းကြည့်တာ သင့်တော်ပါ့မလားလို့တောင် မိုမိုဟန် မစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူး..။ စိတ်တွေအရမ်းပဲ လှုပ်ရှားနေပြီ…။ သွေးသားတွေ အပြတ်ကို ဆူဝေနိုးကြားစပြုနေပြီ…။ ဒီတော့ သင့်မသင့် တော်မတော် ဆိုတာတွေကို ဘေးချိတ်ထားပစ်လိုက်တော့တယ်…။
စိုးထိုက်က သူမမိခင်ကို လိုးတော့မှာ ဆိုတာကို မိုမိုဟန် တစ်ယောက် အသေအချာကို သိနေတယ်လေ..။ အမေလုပ်တဲ့လူ အလိုးခံရမှာကို သမီးကချောင်းကြည့်နေတဲ့ အဖြစ်ပေါ့..။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အခုမှ ဈေးဦးဖောက်ကြတာ မဟုတ်ဘူး.။ ဒီလိုမျိုး လိုးခဲ့ကြပြီးတာကတော့ သေချာပါတယ်..။ ကြည့်လေ…ဘယ်သူကမှ ရှက်ရွံ့ နောက်တွန့်နေတာမျိုး မရှိဘူး..။ ရဲရဲတင်းတင်း သွက်သွက်လက်လက် လုပ်သွားကြတာကို မိုမိုဟန် ရင်တဖိုဖိုနဲ့ မြင်တွေ့နေရတယ်..။ ဟော ကြည့်ပါအုန်း..၊ စိုးထိုက်က မာမီ့ ဘလောက်စ် အကျီ င်္ကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပါပြီ..။ ဘရာစီယာ ကိုလည်း ချန်မထားဘူး ရှင့်…။ လက်သွက်သွက်နဲ့ တစ်ဆက်တည်း ချိတ်ဖြုတ် ချွတ်ခွာ ပစ်လိုက်တယ်..။ တုန်ခနဲ ခါခနဲ ပေါ်လာတဲ့ မာမီ့ရဲ့ နို့အုံကြီးတွေက အတော်ကို ထွားတယ် ရှင်…။ ပြီးတော့ တင်းရင်းနေတာပဲ..။ ကျမ ငယ်ငယ်က စို့ခဲ့ရတဲ့ နို့ကြီးတွေပေါ့…။ အခုတော့ ဟိုငနဲသား စိုးထိုက်က သူ့လက်ကြမ်းကြီးတွေနဲ့ အုပ်ကိုင် ဆုတ်နယ်လို့ နေတယ်လေ..။ အံ့သြစရာတော့ ကောင်းတယ် ရှင့်..။ ကျမ မာမီရဲ့ နို့တွေကို ဆုပ်နယ်အသုံးချနေတဲ့ ကိုစိုးထိုက်ကို ကျမ မနာလိုတာတွေ ဘာတွေ မဖြစ်မိဘူး..။ အဲဒါတွေကို ကြည့်ပြီးတော့တောင် ကျမရဲ့ ရမက်စိတ်တွေ နိုးကြားထကြွ လာရသေးတယ်.။ ရင်တွေပူလောင်ပြီး တလှိုက်လှိုက်နဲ့ ဖိုမောနေတယ်..။ ပေါင်ကြားက အဖုတ်ကလဲ ဖောင်းလို့..။ အရည်ကြည်တွေလည်း စိုးနေတာပဲ ရှင်..။ မာမီ့ ရဲ့နေရာမှာ ကျမသာဆိုရင် ဘယ်လိုများနေမလဲလို့တောင် တွေးမိတယ်..။ အဲဒီအတွေး ဝင်လာတဲ့အခါ ကျမ ကြက်သီးလေးတွေတောင် ထသွားမိတယ် ရှင်…။
“မောင်လေး…..မမကို လုပ်ရော လုပ်ချင်သေးရဲ့လား…ဟင် “ ဟော မာမီ စကားပြောလာပြီ..။ အသံက တုန်ရင်နေတယ်..။ မာမီလည်း ရမက်ဇောတွေ နိုးထနေမှန်း ကျမ ရိပ်မိပါတယ်..။ ကျမလည်း ဒီလိုပဲ ဖြစ်နေရတာကိုး…။
“ဟာ….လုပ်ချင်တာပေါ့ ..မမရယ်..။ မမကို လုပ်ဖို့ ကျနော် တကူးတကတောင် လာရတာပါ..၊ ဘာဖြစ်လို့ ဒါမျိုးမေးရတာလဲ…“
“သြော်……မမက အဖွားကြီးလို ဖြစ်နေပြီ..မဟုတ်လား…၊ မင်းကလူငယ်ဆိုတော့ ငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေကို ပိုသဘောကျမလားလို့ပါ….“ ကိုစိုးထိုက်က ကျမကို နေ့ခင်းတုန်းက စူးစူးရဲရဲ စိုက်ကြည့်တာကို သတိရမိတယ်…။ မာမီက အဲဒီလို ကြည့်တာကို မြင်လို့များ ဒီစကားမျိုးပြောတာများလား….။
“မမ သမီးကို စိုက်ကြည့်မိတာကြောင့် မမက မကျေမနပ်ဖြစ်နေပြီ ထင်တယ်….“
ကိုစိုးထိုက်က ပြောရင်း မာမီ့ နို့သီးတွေက်ို ပွတ်ချေပေးလိုက်တာ ကျမ သတိထားလိုက်မိတယ်..။ မာမီ တစ်ယောက် ဆတ်ခနဲတုန်သွားတာကို ကျမ မြင်လိုက်ရတယ်..။
“ဟင့်ဟင့်…..မိုမိုက ငယ်ငယ်ချောချော တောင့်တောင့် မဟုတ်လာ..။ မင်းတင် မဟုတ်ပါဘူး…၊ ယောက်ျားတိုင်း ကပဲ မိုမိုကို ဒီလိုငေးကြည့်တတ်ကြတာပဲ..။ ဘာလဲ မင်းက မိုမိုလေးကို သဘောကျနေလို့လား…“ ကိုစိုးထိုက်က ဘာပြန်ဖြေမလဲဆိုတာ ကျမ သိချင်လိုက်တာနော်…။ အပီကို နားစိုက်ထားလိုက်တယ်…။
ကိုစိုးထိုက်က မာမီမေးတာကို ရေရေရာရာ မဖြေဘူး…။ ရောချပစ်ပြီး မာမီ့ နို့သီးတွေကိုသာ ထပ်ပွတ်နေတယ်..။ မာမီ့ နို့သီးတောင်ထလာတာ ကျမ အတိုင်းသား မြင်ရတယ်…။ အလို…..ကိုစိုးထိုက်က မာမီ့လက်ကို အသာဆွဲယူပြီး သူ့ပေါင်ကြားထဲ ထည့်ပေးလိုက်ပါရောလား…….။ ကျမရဲ့ မျက်လုံးအကြည့်ကလဲ ကိုစိုးထိုက် ဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ ခွကြားကို အလိုလို ရောက်သွားပြီး…..ဘောင်းဘီခွကြားမှာ ဖုဖုဖောင်းဖောင်းကြီး ဖြစ်နေတာကို မြင်ရပါတယ်…ရှင်…။ ဂျင်းဘောင်းဘီ ရှိနေသေးတာဆိုတော့ သူ့ဟာကြီးကို မမြင်ရသေးပါဘူး…။ အရိပ်အယောင် လောက်သာ မြင်ရသေးတာပါ..။ မြင်ရတာကို ခန့်မှန်းကြည့်ရရင်တော့ သူ့လီတန်ကြီးက အတော်ကို ကြီးမားတုတ်ခိုင်မှာပါပဲ..။ကျမဟာ ယောက်ျားလီးတွေ တောင်နေတာကို ထိမိတာမျိုး ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်..။ အပြာစာအုပ်တွေနဲ့ အပြာကားတွေထဲမှာလည်း လိင်တန်ကြီးတွေကို မြင်ခဲ့ဖူးပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် အပြင်ဘက်မှာတော့ တစ်ခါမှ မမြင်ခဲ့ဖူးသေးပါဘူး..။ ဒါကြောင့် အခု တွေ့ချင်မြင်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေတယ် ရှင်…။ အပြာကားတွေထဲက လီးတွေနဲ့ အပြင်ကတကယ့် လီးတွေနဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားလည်းဆိုတာ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ချင်တယ်…။
ကျမမာမီရဲ့ နို့သီးတွေကို သူ ကုန်းစို့နေပြီရှင့်….။သူလက်ကလည်း မာမီ့ စောက်ဖုတ်ကို နှိုက်နေတယ်..။ မာမီဟာ ဖီလင်တွေ တက်နေပုံရပါတယ်..။ မျက်တောင်တွေကို မှေးစင်းကျလို့……..။ ပါးစပ်ကလည်း မဟတဟလေး..။ ဒီလိုအလုပ်ခံရရင် ဘယ်လိုမျိုး စိတ်လှုပ်ရှားလာရတယ် ဆိုတာ ကျမသိတာပေါ့…။ ချောင်းကြည့်နေရတဲ့ ကျမတောင် ကြက်သီးတွေထ ၊ ရင်တဖိုဖို နဲ့…။ ကျမ မနေနိုင်တော့ဘူး ..။ ကိုယ့်အဖုတ်လေးကိုယ် လက်နဲ့ အသာအုပ်ပြီး ပွတ်နေမိတယ်…ရှင်…။ ကျမစိတ်တွေလည်း အရမ်းးကို လှုပ်ရှားနိုးကြွလို့ လာနေပါပြီ….။ မရှက်တမ်း ပြောရရင် ကိုစိုးထိုက်လုပ်တာကို ခံချင်လာတယ်..။ ဘာကြောင့် ဒီလို ဖြစ်လာရမှန်း ကျမလည်း မရှင်းပြတတ်ဘူး…။သူကသာ လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျမ တစ်ကိုယ်လုံး ပုံပေးလိုက်ဖို့ အသင့်ပဲ…။ သူ့စိတ်ကြိုက် သူ့သဘော …။ သူလုပ်ချင်သမျှ ကျမလိုက်လုပ်ပေးမိမှာပါ…။ လီးစုတ်ခိုင်းရင်လည်း စုတ်မယ်..၊ သူက ကျမ စောက်ဖုတ်ကို ယက်ချင်တယ်ဆိုလည်း ပေးလျက်လိုက်မယ်…။ အိုရှင်…..ကုန်ကုန်ပြောမယ်…သူက ကျမကို ဖင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တောင် ကုန်းပေးလိုက်ဖို့ အသင့်ပဲ…။ ဒီလောက်ထိအောင်ကို ဖြစ်နေရတာ…ရှင့်…။ သူ့လီးတန်ကြီးကိုလည်း …မြင်ချင်လှပါပြီ…။ သူဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီရယ်….မြန်မြန် ကျွတ်ကျပါသွားပါတော့….နော်……………။
တစ်ဘက်အိပ်ခန်းထဲမှာတော့ စိုးထိုက်က ဒေါ်ခင်မေထားကို စနစ်တကျ နှိုးဆွ ပေးနေတယ်..။ အမျိုးသမီးကြီးဟာ ရမက်ဇော အဟုန်ပြင်းပြင်းတွေ နိုးကြားထကြွနေပါပြီ…။
“မမ…သမီးက ဟိုဖက်ခန်းထဲမှာ အိပ်တာ မဟုတ်လား…“
စောက်ဖုတ်ကို ကလိရင်း မေးတယ်…။
အဖုတ်ကလိခံရပြီး ဖီလင်တွေတက်နေတာမို့ ဒေါ်ခင်မေထား ပြန်ဖြေသံက တုန်တုန်ခိုက်ခိုက်နဲ့…။
“ကျနော်တို့ ဒီဘက်ခန်းထဲမှာ လိုးကြလို့ ဖြစ်ပါ့မလား…“
စိုးထိုက်က တမင်ပဲ မေးလိုက်တာပါ..။ ခုအခြေအနေရောက်မှတော့ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ အလိုးမခံတော့ဘူးလို ဘယ်လိုလုပ်ငြင်းပယ်နိုင်တော့မှာလဲ….။ ရမက်ဇော အရမ်းထနေတာမဟုတ်လား…။ မနေ့တုန်းက တစ်ချီလိုးခဲ့ရတဲ့ အရသာကို ဒေါ်ခင်မေထား အပြတ်ကို စွဲမက်နေခဲ့ရပြီလေ..။ မိုမိုဟန်ဆီက တယ်လီဖုန်းလာလို့သာ မရပ်ချင် ရပ်ချင်နဲ့ တစ်စခန်း ရပ်ခဲ့ကြရတာမဟုတ်လား…။ အဲဒီ တယ်လီဖုန်းသာ မလာလို့ကတော့ တစ်နေကုန်ပြီး ညဘက်ထိအောင်တောင် လိုးပစ်မိကြမှာ..။
ဒါကို စိုးထိုက်ကလည်း အကဲခတ်မိနေတယ်လေ…။ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ကိုယ်လုံး တုန်တခိုက်ခိုက်ဖြစ်နေတာ ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီခွကြားပေါ် လက်တင်ပြီး လီးကြီးကို မက်မက်စက်စက် ပွတ်ကိုင်ကြည့်နေတာ ၊ နို့အုံသားတွေ တင်းမာပြီး နို့သီးခေါင်းတွေ ချွန်ထွက်ကော့တက်နေတာ ၊ ပေါင်တန်ကြီးနှစ်ခု စိလိုက် ဟလိုက် ဆတ်ခနဲ တွန့်လိုက်ဖြစ်နေတာ ၊ ဒါတွေက ဒီမိန်းမ ဘယ်လောက် နှာထန် ရမက်ပြင်းနေပြီဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ပြနေကြတယ် မဟုတ်လား….။
ဒီလို အရိပ်အသွင်မျိုးတွေအပြင် ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ပါးစပ်ဖျားကနေ ကာမရမက် လွှမ်းတဲ့အပြောအဆိုလေးတွေ ပေါ်လာရအောင်လို့ ဒီမေးခွန်းကို မေးလိုက်တာ..။
“သမီးက အိပ်ပျော်မိရင် တော်တော်နဲ့ မနိုးပါဘူး..၊ အစောကြီးဝင်အိပ်တာဆိုတော့ အခုလောက်ဆို ကောင်မလေး ကောင်းကောင်းအိပ်မောကျနေပါပြီ….မမတို့ အသံ သိပ်မမြည်ရင် ပြီးတာပါပဲ….လုပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်….“
ဒီစကားတွေ ပြောချပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ မျက်နှာ ရဲခနဲ ဖြစ်သွားတယ်..။ တဏှာဇောကြွနေတာမှန်ပေမယ့် အရှက်အကြောက်ကြီးတတ်တဲ့ မိန်းမစားမဟုတ်လား…။ ရှက်တော့ ရှက်သွားတာပေါ့…။ ဒီရှက်ရွံ့သွားဟန်ကလေးကလည်း တစ်မျိုးမက်စရာလေးပါလေ…။
အရမ်းအလိုးခံချင်နေတာမှန်ပေမယ့် ဒေါ်ခင်မေထားဟာ ထမိန်ကိုတော့ ချွတ်မပေးမိသေးပါဘူး..။ စိုးထိုက် ချွတ်ခွာထားလို့ အပေါ်ပိုင်းကတော့ ဗလာကျင်းလုလု ဖြစ်နေပါပြီး…။ ထမိန်ကို ကိုယ်တိုင်ချွတ်ပေးရင် သိပ်အပေါစား ဆန်သွားပြီး စိုးထိုက်က အထင်းသေးသွားမှာကို ဒေါ်ခင်မေထား စိုးရိမ်မိတယ်..။
စိုးထိုက်က ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ထမိန်ပေါ်ကပဲ အသာ အုပ်ကိုင်လိုက်တယ်..။ အမျိုးသမီးဟာ အတွင်းခံဘောင်းဘီးတွေဘာတွေ ဝတ်မထားဘူး..။ ထမိန် တစ်ထပ်တည်းပဲ..။အချွတ်ရ လွယ်ပါတယ်..။ ဘာခက်တာ မှတ်လို့…..။ အခုလောလောဆယ်တော့ စိုးထိုက်က ထမိန်ကို ချွတ်မပစ်သေးပါဘူး..။ စောက်ဖုတ်ကို ထမိန်ပေါ်ကပဲ အုပ်ကိုင်ပြီး ပွတ်ပေးတယ်..။ စောက်ဖုတ်ကြီးက မုန့်ပေါင်းကြီး ကျနေတာပဲ.. မို့မို့ကြီးဖောင်းလို့…။
ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ နှုတ်ဖျားက အသံလေး ပေးလာတယ်..။ အဖုတ်ပွတ်ခံရလို့ အပြန်ခိုက်သွားပြီလေ…။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ တစ်ဖက်ခန်းဆီက စိုးစိုးစွတ်စွတ်အသံတိုးတိုးလေးတွေကို စိုးထိုက် ကြားရတယ်..။ ချောင်းကြည့်ရင်း ဖီလင်တွေတက်နေတဲ့ မိုမိုဟန်က သူမစောက်ဖုတ်ထဲကို လက်ချောင်းနဲ့ ထိုးထည့်ကလိနေရာက ပေါ်လာတဲ့အသံလေးတွေပါ…။ တိုးလည်းတိုးပါတယ်..။ စိုးထိုက်က နားပါးတဲ့အပြင် တစ်ဖက်ခန်းထဲက မိုမိုဟန်ရဲ့ အခြေအနေကို သေသေချာချာ နားစွင့် အကဲခတ်နေလို့သာ ကြားမိတာပါ..။ စောက်ဖုတ်အပွတ်ခံရလို့ ဖီလင်တွေ တိုးပြီး တဟင့်ဟင့်ဖြစ်နေတဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားကတော့ ဒီအသံတိုးတိုးညင်ညင်ကလေးတွေကို မကြားရပါဘူး…။ သူ့ဖီလင်နဲ့ သူငြိမ့်နေတာကိုး…။
စိုးထိုက်ကတော့ အထာပေါက်သွားပါပြီ..။ မိုမိုဟန် အိပ်ပျော်မနေဘူး..။ သူမအမေကို လုပ်တော့မှာကို သေသေချာချာ ချောင်းကြည့်နေတာ..။ ချောင်းကြည့်ပြီး စိတ်တွေလည်းထနေပုံရတယ်..။ ကြားရတဲ့ အသံကတော့ စောက်ဖုတ်နှိုက်ပြီး ကလိတဲ့ အသံမျိုးပါ..။ ဒါကလည်း ကောင်းပါတယ်လေ…။ ကိုယ့်အတွက် ဟန်ကျတာပေါ့…။ မိုမိုဟန်ကို အကွက်ဆင်ပြီးဖန်တီးဖို့ ပိုပြီး အဆင်ပြေတာပေါ့…လို့ စိုးထိုက်က တွေးတယ်..။ သူက မိုမိုဟန်ကို တွေ့တွေ့ချင်း သဘောကျပြီး လိုးချင်နေတာကိုး…..။
သူမသမီး ဒီလိုချောင်းကြည့်နေတာကို ဒေါ်ခင်မေထားသိရင် တက်သေသွားမှာပဲ…။ ကောင်းပြီ မိုမိုဟန်အတွက် စိတ်ဇောကြွစရာ မြင်ကွင်းတွေဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်..။ ဒါမှ ကောင်မလေး ပိုစိတ်ထလာမှာ။ ကိုယ့်အနေနဲ့လည်း ပိုလွယ်လွယ်ကူကူ ကြံနိုင်မှာ…။ စိုးထိုက် စိတ်ကူးလိုက်တယ်..။
“ကျနော့်လီးကြီးကို ထုတ်လိုက်မယ်…၊ မမက လီးပေါ်ခွထိုင်ပြီး တက်လိုးပေးပေါ့ ဟုတ်လား….“
စိုးထိုက်ကပြောတယ်..။ တစ်ဖက်ခန်းထဲက ချောင်းကြည့်နေတဲ့ မိုမိုဟန်ကြားနိုင်လောက်အောင် အသံကို နည်းနည်းကျယ်အောင် ပြောလိုက်တာပါ…။ မိုမိုဟန် ကောင်းကောင်းကြားရတာပေါ့…။
မိုမိုဟန်က စိုးထိုက်ရဲ့လီးကြီးကို ကြည့်ချင်မြင်ချင်နေတာ မဟုတ်လား…။ ဒီစကားတွေကြားရတော့ အရမ်းကို ဟော့လာတော့တာပေါ့…။ ဒီလူကြီးကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီလိုလည်း စိတ်ထဲက တွေးမိတယ်…။
စိုးထိုက်က ပြောပြောဆိုဆို သူဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချပစ်လိုက်တယ်..။ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို လည်း ချန်မထားဘူး..။ ခပ်မြန်မြန် ခပ်သွက်သွက်ချွတ်ပစ်လိုက်တာမို့ တခနလေးအတွင်းမှာပဲ စိုးထိုက်ဟာအောက်ပိုင်း ဗလာဖြစ်သွားတော့တယ်…။
တန်းခနဲ ပေါ်လာတဲ့ လီးကြီးကတော့ တကယ်အားရစရာကြီးပါ..။ မတ်မတ်ကြီး တောင်နေတာပဲ..။ မာလိုက်တာမှ သံချောင်းအတိုင်းပဲ..။
မီးရောင်အောက်မှာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်နေရတဲ့ လီးချောင်းကြီးကို ကြည့်ပြီး ဒေါ်ခင်မေထား မျက်လုံးအရောင်တလက်လက် တောက်လာတယ်..။ ခပ်တိုးတိုးလေး ရေရွတ်ရင်း လီးကို လက်ချောင်းကလေးတွေနဲ့ ခပ်ဖွဖွလေး ဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်..။
စိုးထိုက်ရဲ့ လက်ကတော့ ဒေါ်ခင်မေထား စောက်ဖုတ်ကို ထမိန်ပေါ်ကနေပြီး အုပ်ကိုင် ပွတ်ပေးနေတုန်းပဲ..။ ကိုယ်ကို ကိုင်းချပြီး နို့သီးခေါင်းကိုတောင် ကုန်းစို့ပေးလိုက်သေးတယ်..။ နို့သီးတစ်ခုကို စို့ပေးနေတုန်း ကျန်တဲ့ နို့သီးကို လက်နဲ့ ဖျစ်ညှစ်ပေးတယ်..။ နို့အုံသားကို လက်ချောင်းလေးချောင်းနဲ့ ဖျစ်ညှစ် ပြီး နို့သီးကိုတော့ လက်ညှိုးလေးနဲ့ ဖိပွတ်ပေးတာမျိုး လုပ်တယ်..။ အဖုတ်ကို နှိုက်ပွတ်နေတဲ့လက်ကို လွှတ်ပြီး နို့အုံနှစ်ခုကို စုံကိုင်ဆွဲတယ်..။ နို့သိးခေါင်းလေးတွေကို တစ်လှည့်စီ လျှာနဲ့ ရက်ပေးလိုက် ၊ ပါးစပ်နဲ့ ငုံစို့ပေးလိုက် ၊ သွားနဲ့ မနာမကျင် ကိုက်ဆွဲလိုက် လုပ်တယ်..။
ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ နို့အုံကြီးနှစ်လုံးနဲ့ နို့သီးခေါင်းတစ်စုံကို ကောင်းကောင်းကြီး အသုံးချပေးပစ်လိုက်တယ်လို့ပဲ ဆိုရမယ်..။မကြာပါဘူး……..။ ဒေါ်ခင်မေထား တွန့်လိမ်ကော့ပျံလာတယ်..။ တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ဆတ်တုန်ရင်လာတယ်…။
ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ပါးစပ်က ရေရွတ်မြည်တမ်းသံတွေ ပေါ်ထွက်လာတယ်..။ တော်တော်လည်း ကျယ်တယ်…။ ဒေါ်ခင်မေထားတစ်ယောက် ပြီးသွားခဲ့ရတာပါပဲ….။ ဒီတော့ ထိန်ထိန်သိမ်းသိမ်း မလုပ်နိုင်တော့ဘူး…။ ဖင်ကြိးတောင် ကြွတက်လာတဲ့ အထိ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်တယ်…။
ဒီလို အရမ်းလှုပ်ခါနေတာကြောင့် စိုးထိုက် ပါးစပ်နဲ့ ငုံစို့ပေးနေတဲ့ နို့သီးခေါင်းတောင် ပါးစပ်ကနေ ကျွတ်သွားပါတယ်..။ စိုးထိုက်က ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ထမိန်ပေါ်က အုပ်စမ်းကြည့်တော့ အပြတ်ကို ဖောင်းပြီး အရည်တွေ စိုရွှဲနေတာတွေ့ရတယ်..။
ဒေါ်ခင်မေထားဟာ ဟင်း ခနဲ သက်ပြင်းရှည်ကြီးချပြီး…ခုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လဲကျသွားတယ်…။ သူမရဲ့ လက်တွေကတော့ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးတန်ကြီးကို ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ထားတုန်းပဲ…။
စိုးထိုက်က မေးတယ်…။ မေးရင်း ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ စောက်ဖုတ်ကိုလည်း လက်နဲ့ အသာပွတ်ပေးလိုက်တယ်…။
“အေးကွယ်…ရင်ကို မောသွားတာပဲ..၊ ခဏလောက် နားလိုက်ချင်တယ်..နော်….“
ဒေါ်ခင်မေထား က မောသံလေးနဲ့ ပြောတယ်…။ဒေါ်ခင်မေထားဟာ ဒီလိုပြီးတာမျိုးကို မခံစားဖူးသေးပါဘူး…။ စောက်ဖုတ်ထဲလီး ထိုးသွင်းပြီးလိုးတာခံရင်း ပြီး ရတာမျို ၊ အဖုတ်ကို လက်ချောင်းနဲ့ ထိုးကလိဆွရင်း ပြီး ရတာမျိုးတွေကိုတော့ ကြုံဖူးပါရဲ့…။
နို့အုံကြီးနှစ်လုံးနဲ့ နို့သီးခေါင်းတွေကို ဆုပ်ကိုင်ဆွဲစို့ ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်တာကိုပဲ ခံရင်း ပြီး တာမျိုး အခုမှသာ ကြုံဖူးတာပါ…။ ပြီးတော့ ဒါဟာ ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် နို့ ပြန်ကိုင်ပေးတာမျိုးမဟုတ်လို့ တစ်ကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေမှု သဘောလည်း မဟုတ်ဘူး…။ ယောက်ျားတစ်ယောက်က ကိုင်တွယ် စို့ဆွဲပေးတာလေ…။
အရသာကတော့ တစ်မျိုး ထူးခြားပါတယ်..။ဒီလိုမျိုး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရမက်ဇောသန်သန်နဲ့ ပြီးတာမျိုး ဒေါ်ခင်မေထား မကြုံဖူးသေးပါဘူး..။
စိုးထိုက်ပေါ် နှစ်နှစ်ကာကာချစ်မိတာမျိုး မရှိဘူး ။ (သူ့လီးကို ကာမအရသာကြောင့် စွဲမပြီးတော့ အခု စိုးထိုက်နဲ့ ဖြစ်ရတာကလည်း တဏှာရမက်စိတ်သက်သက်ကြောင့်ပဲ ။ က်နှစ်သက်တာကတော့ တစ်မျိုးပေါ့လေ..။ ဒါကို အချစ်လို့ မသတ်မှတ်ပါဘူးလေ..) ရမက်လိုအင်ကြောင့်ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ အတူတူ လုပ်ကြတဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်မှု တစ်ခုလို့ပဲ ဒေါ်ခင်မေထား က ခံယူထားတယ် ။ စိုးထိုက်က သူမခင်ပွန်းသည်မဟုတ်တာကြောင့် တရားဝင် ကာမစပ်ယှက်တယ်လို့လည်း မခေါ်နိုင်ဘူး ။ အလွယ်ဆုံး အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ “ အပျော်ချစ် “ ချစ်ကြတာပါပဲ..။ ဟုတ်ရဲ့လား…။ အပျော်ချစ် လေးကြောင့်လည်း ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီး ကာမအရသာ ခံစားရတာလေ…။
မိုမိုဟန်ကို ဖျော်ရည်ထဲ အိပ်ဆေးခပ်ပြီး တိုက်ထားလိုက်ရရင် အကောင်းသာလို့ ဒေါ်ခင်မေထား တွေးမိတယ်..။ အဲဒီလိုဆိုရင် ဒီဘက်ခန်းမှာ သူမနဲ့ စိုးထိုက် မီးကုန်ယမ်းကုန် အသံဘယ်လောက်မြည်မြည် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်ရမ်းရမ်း လိုးနိုင်ဆော်နိုင်ကြမှာ မဟုတ်လား…။ စိုးထိုက် သုတ်ရည်မထွက်သေးတာ ဒေါ်ခင်မေထား သိတယ်..။ အမောပြေသွားရင် အလိုးခံရမှာကတော့ အသေအချာပါပဲ..။
ဒီလီးကြီးရဲ့ အရသာကိုလည်း လက်တွေ့ခံစားဖူးပြီးတာမို့ ဒေါ်ခင်မေထား ကောင်းကောင်းသိနေတယ်လေ ။ ရမက်ထန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ရက်ရက်ရောရော ပြီးသွားရတာကြောင့် စိတ်မော လူမောဖြစ်လို့သာ ခဏတာ နားနေအမောဖြေနေရတာ..။ အသက်ကြီးလားတော့လည်း ဒီလိုပါပဲလေ…။အမောပြေရင်တော့ တဝကြီးကို အလိုးခံပစ်လိုက်မယ်…။
ဒီလိုနဲ့ပဲ….တစ်ဘက်ခန်းက ချောင်းကြည့်နေတဲ့ မိုမိုဟန်မှာတော့ ကာမစိတ်တွေ ငယ်ထိပ်ရောက်အောင်ကို တိုးတက်နေပြီ…။ သူမမေမေ တစ်ချီတစ်မောင်း ပြီး သွားခဲ့တာကို သေသေချာချာ မြင်ရပြီး မိခင်လုပ်သူရဲ့ ရမက်ပြင်းပြင်း ရေရွတ်မြည်တမ်းသံတွေ ကြားရတော့ သမီးလုပ်တဲ့ လူမှာလည်း ဟော့လာရတာပေါ့…။ကိုယ့်စောက်ဖုတ်ကိုယ် လက်နဲ့ ထိုးနှိုက်ကလိနေတယ်…။ ကိုယ့်နို့အုံကိုယ် ပြန်ပြီး ဆုပ်နယ် ပွတ်သပ်နေမိတယ်…။ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးတန်ကြီးကလည်း သူမကို စိတ်လှုပ်ရှားစေအောင် ဖန်တီးနေပြန်တယ်လေ..။ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးက ရှစ်လက်မကျော်လောက် ရှည်ပြီး သူမလက်ကောက်ဝတ်လောက်နည်းနည်းကို တုတ်တာကိုး..။ အဲဒီ လီးတန်တုတ်တုတ် ထွားထွားကြီးကို ကြည့်ပြီး မိုမိုဟန် စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားလာတာကိုလည်း အပြစ်ပြောလို့ ဘယ်ရမှာလဲ..။ ဒါဟာ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝမဟုတ်လား..။
သူ့လီးကြီးက တကယ့်ကို ကြီးတာပဲ..။ နည်းတဲ့ဟာကြီး မဟုတ်ဘူး ..။ ဒါကြီးထိုးသွင်းရင် မာမီ ခံနိုင်ပါ့မလား..။ ငါ့ဟာလေးထဲကို ထိုးထည့်ရင်ကော ဝင်ဆန့်ပါ့မလား…။ အရမ်းနာမှာကတော့ အမှန်ပဲ…။
တကယ်ပါပဲ ရှင် ..။ ကျမလေ သူ့လီးတန်ကြီးကို ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်းနဲ့ ကို သဘောကျလာမိတာ…။ စိတ်လည်း အရမ်းတက်ကြွလို့လာရပါတယ်..။ ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လက်ညှိုးနဲ့ ထိုးကလိနေရတာကို အားမရနိုင်တော့ဘူး..။ အဲဒီလီးကြီးနဲ့ လာလိုးတာကိုတောင် ခံချင်နေတာ..။ ဒါပေမယ့် အခုလောလောဆယ်မှာတော့ အဲဒီလီးက မာမီ့ အတွက်ပဲလေ..။ အခု ဆို မာမီက နားနေတယ်..။ တော်တော်ကြာလို့ မာမီအမောပြေရင် အဲဒီလီးကြီးက မာမီ့စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းပြီးလိုးမှာ အသေအချာပဲ…။
လက်ညှိုးနဲ့လည်း အာသာမပြေ ၊ လိုလားတမ်းတနေတဲ့ လီးကလည်း ကျမကို လာလိုးမှာ မဟုတ်တော့..၊ တစ်ဖက်ခန်းမှာ မာမီတို့ အနားယူနေတုန်း ကျမကလည်း ဒီဖက်ခန်းမှာ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ အလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲ ရှိတာပေါ့နော်…။ ကိုစိုးထိုက်ရဲ့ လီးလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ပေမယ့် လက်ညှိုးနဲ့ ထိုးကလိတာထက်တော့ ပိုကောင်းအောင် အရသာပေးနိုင်တာ တစ်ခု ကျမမှာ ရှိနေပါတယ်…။ အဲဒါကို သုံးရတော့မှာပဲ…။
ကျမဟာ ချောင်းကြည့်နေတဲ့ အခန်းနံရံကနေ အသာခွာလိုက်တယ်..။ အဝတ်ဗီဒိုကို ဖွင့်ပြီး အံဆွဲလေးထဲမှာ အသေအချာ သော့ခတ်သိမ်းထားတဲ့ဟာကို ထုတ်ယူလိုက်တယ်..။ အခြားဟာ ဟုတ်ပါရိုးလား…။ ဘိုင်ဘရေတာ လို့ခေါ်တဲ့ လျပ်စစ် တုန်ခါတန်လေ..။ မြင်ဖူးတွေ့ဖူးကြမှာပါ…။ ဖြူဖြူရှည်ရှည်နဲ့ ထိပ်ဖျားချွန်လုံးလုံး ချောချော…။ လုံးပတ်မှာ မြောင်ကလေးတွေ ပါတဲ့ဟာလေး..။ အထဲမှာ ဓါတ်ခဲ နှစ်လုံးထည့်ရတယ်…။ ခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင် အတန်တစ်ခုလုံး တုန်ခါလာတယ်..။ ဒါကို စောက်ဖုတ်ထဲ သွင်းသွင်း စောက်စိကိုထိပြီး ကလိကလိ ၊ နို့သီးခေါင်းတွေမှာ တေ့ကပ်ထားထား အရသာတွေ့ရတာချည်းပဲ…။
လီးအတု တစ်မျိုးလို့ ဆိုရမှာပေါ့…။ ဒီလိုဟာမျိုးတွေက ဒီမှာဝယ်လို့ ရ မရတော့ ကျမ မသိပါဘူး..။ ကျမတော့ သင်္ဘောသားတစ်ယောက်နဲ့ အဆက်ဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းမလေးတစ်ယောက် အကြံအဖန် လုပ်ပေးလို့ ရထားတာ…။ လီးအစစ်လောက် အရသာမကောင်းပေမယ့် တစ်ကိုယ်တော် စိတ်ဖြေတဲ့ နေရာမှာတော့ အတော် အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်…။
ဘိုင်ဘရေတာကို ယူပြီးတော့ ကျမခုတင်ပေါ်တက် ပက်လက်အိပ်လိုက်တယ်..။ ထမိန်ကို လှန်တင်ပြီး ဒူးထောင် ပေါင်ကားလိုက်တယ်..။ ဘိုင်ဘရေတာရဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ်ဖွင့်ပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်ခါလာတဲ့ ဒီအတန်ကို စောက်ဖုတ်မှာ တေ့လိုက်တယ်…။ ဘိုင်ဘရေတာ အဖျားပိုင်းနဲ့ စောက်စိ ထိုးမိသွားတာနဲ့ ကျမဟာ ရင်ကို တုန်သွားရတာပဲ…။ ဒါကြောင့်လည်း ဘာမျှ တုန့်ဆိုင်းမနေပဲ တုန်ခါနေတဲ့ ဘိုင်ဘရေတာကို စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်…။ အို…ကောင်းလိုက်တာရှင်..။ စောစောက ဖီလင်အရှိန်ကလည်း တက်နေတုန်း မဟုတ်လား..။ အပြတ်ကို ခိုက်သွားတာပေါ့..။ ပါးစပ်က အသံထွက် မအော်ဟစ်မိအောင်တောင် မနည်းကြီး ထိန်းလိုက်ရတယ်..။ ဒါတောင် ခပ်အုပ်အုပ် အသံလေးတွေ ထွက်သွားသေးတယ်..။ ဒီအသံလေးတွေလောက်တော့ မာမီတို့ မကြားနိုင်လောက်ပါဘူးနော်…။ကျမနို့အုံကြီးနှစ်ခုဟာလည်း ထူးထူးခြားခြားကို တင်းရင်းနေပါတယ်..။ နို့သီးခေါင်းလေးနှစ်ခုလည်း တင်းမာကော့ချွန်ထောင်တက်နေကြတာပဲ…။ ဒီနို့သီးလေးတွေကို စို့ပေးပြီး နို့အုံတွေကို ဆုပ်နယ်ပေးတာခံရရင် သိပ်ကို ငြိမ့်မှာပဲလို့လည်း ကျမတွေးမိတယ်…။ကျမဟာ ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ နေထိုင်နေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး…။ ကာမစိတ်တွေလည်း မကြာခဏ တက်ကြွလှုပ်ရှားတတ်ပါတယ်…။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့ ခါတိုင်းနဲ့ မတူအောင်ကို ကာမစိတ်တက်ကြွမှု ပြင်းထန်နေပါတယ်..။ မာမီတို့ကို ချောင်းကြည့်ခဲ့တာကြောင့်များလားတော့ မပြောတတ်ဘူး…။ ပြီးတော့ နို့စို့ခံချင်တဲ့ စိတ် ၊ နို့အုံကို တအားဆုပ်နယ်တာ ခံချင်တဲ့ စိတ်တွေကလည်း တကယ့်ကို တိုးပွား ပြင်းပြလို့ နေရပါတယ်..ရှင်..။ မာမီ့နို့တွေကို ကိုစိုးထိုက်ကြီးက ကစားပေးရင်းနဲ့ မာမီ ပြီးသွားတာကို ကြည့်ခဲ့ရတာကြောင့် ကျမလည်း ဓါတ်ဆက်ပြီး ဒီလိုစိတ်မျိုး ဖြစ်လာတာနေမှာပါပဲ…။
နို့ဆွဲပေးမယ့် အခြားလူလည်း မရှိတာကြောင့် ကိုယ့်လက်ကိုပဲ အားကိုးရတော့တာပေါ့လေ..။ ဘိုင်ဘရေတာကို ညာလက်နဲ့ ကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်ကို ထိုးကလိရင်းနဲ့ နို့တွေကိုတော့ ဘယ်လက်နဲ့ အုပ်ကိုင် ဆော့ကစားလိုက်ပါတယ်..။တကယ်ကို မိုက်တာပဲကိုး…။ မကြာပါဘူး…။ ကျမတစ်ကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်ကော့ပျံပြီး ရင်ထဲ တလှပ်လှပ်နဲ့ တစ်ချီ ပြီး သွားခဲ့ရပါတယ်..။ တစ်ကိုယ်တော် စိတ်ဖြေရင်းနဲ့ ပြီးခဲ့တာတွေထဲမှာတော့ စွဲမက်စရာ အကောင်းဆုံးလို့ပဲ ဆိုပါရစေ…။အခုလောက်ဆိုရင် မာမီ အနားယူ အမောဖြေလို့ ပြီးလောက်ပါပြီ…။ မာမီနဲ့ ဦးနဲ့ လုပ်နေကြလေမလားပဲ..။ ကျမဟာ ကိုယ့်နို့အုံကြီးတွေကို ခပ်တင်းတင်း တစ်ချက်ဆုပ်နယ်လိုက်ပါတယ်..။ ပြီးတော့ ခုတင်ပေါ်က မြန်မြန်ဆင်းပြီး တစ်ဖက်ခန်းကို သွားချောင်းကြည့်တယ်..။
ချောင်းကြည့်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျမစိတ်တွေ တဖန်ပြန် လှုပ်ရှားပြီး ရင်ဒိန်းဒိန်းခုန်လာရပါတယ်…။ မာမီရဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ ထမိန် မရှိတော့ဘူး..။ ဗလာကျင်းနေပြီ..။ ဖင်ဆုံကြီးဆိုတာ ပြောင်ဝင်းနေတာပဲ..။ မာမီက ဦးရဲ့ ပေါင်ပေါ်မှာ တစောင်းထိုင်နေတယ်..။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ခုတင်ပေါ်မှာ မဟုတ်ကြဘူး..။ ခုတင်ဘေးနားက ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေကြတာ..။ ကျမချောင်းကြည့်တဲ့ နေရကဆိုရင် ဘေးတိုက်မြင်ရတာ..။ မြင်ကွင်းကတော့ တကယ်ကောင်းပါတယ်..။ ကျမ ချောင်းကြည့်ရင် ဒီလိုမြင်ရအောင် တမင်စီစဉ် လုပ်ပြနေသလားလို့တောင် ထင်စရာပဲ..။
မာမီက ဦးရဲ့ ဘယ်ဖက်ပေါင်ပေါ်မှာ ကျမဘက် နောက်ကျောပေးပြီး ထိုင်နေတာ ရှင့်..။ တောင်မတ်နေတဲ့ ဦးရဲ့ လီးကြီးကတော့ မာမီ့ ဖင်ဆုံကြီး နောက်နားမှာ ကပ်ပြီး တောင်ရက်သားကြီး ရှိနေတယ်..။ မာမီက ခေါင်းလေးအသာငဲ့ပြီး ဦးကို မျက်စချီ ကြည့်နေတာကိုလည်း မြင်ရတယ်..။
ကျမချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဦးရဲ့ လက်တစ်ဖက်က မာမီ့ ဖင်ဆုံကြီးကို ပွတ်နေပြီး ၊ ကျန်တဲ့ လက်တစ်ဖက်က မာမီ့ နို့အုံတွေကို ဆုပ်ကိုင် ဆော့ကစား နေတယ်..။ မာမီရဲ့ ညာဖက်လက်ကတော့ ကိုယ်နောက်ဘက်ကို ပစ်ပြီး ဦးရဲ့ လီးကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ထားတယ်..။ ငြိမ်ငြိမ် ကိုင်ထားတာတော့ မဟုတ်ဘူး..။ လီးတန်ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး အသာအယာ ပွတ်ပေးနေတာ..။ ဂွင်း တိုက်ပေးနေသလိုပေါ့…။
ဟော… ဖင်ပွတ်နေရာကနေပြီး ဦးက မာမီ့စောက်ဖုတ်ကို လှမ်းကိုင်တယ်..။ မာမီက အလိုက်သင့် ပေါင်ကို ကားပေးတယ်..။ မာမီ့ ပေါင်တန်ကြိးတွေ ကွယ်နေတာကြောင့် စောက်ဖုတ်နေရာကိုတော့ ကျမ မမြင်နိုင်ပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် ဦးရဲ့ လက်အလှုပ်ကို ကြည့်ပြီး အဖုတ်ကို ပွတ်နေ ထိုးကလိနေမှန်း ကျမ သိပါတယ်..။
ဦးကို ခုလို အိမ်လာဖို့ ခွင့်ပြုတာ သူမအိပ်ခန်းထဲမှာ နှစ်ပါးကြည်ကြတာဟာ အတော်ထူးခြားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ..။ ကျမကသာ ဆိုရှယ်ကျပြီး ကောင်လေးတွေနဲ့ တွဲနေတာ ၊ မာမီက အရမ်း ကို တည်တည်တန့်တန့် နေတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ..။ တစိမ်းယောက်ျားတွေနဲ့ သိပ် အရောတဝင်နေတာ မဟုတ်ဘူး..။ အိမ်ကို အခြားယောက်ျား ဧည့်သည်တွေ ဘာတွေ လည်း တစ်ခါမှ လာတာ မမြင်ဖူးဘူး..။ ဟော…ဦးကျမှ အိပ်ခန်းထဲ အရောက် လာခွင့်ပေးခဲ့တာဟာ တော်ရုံနဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး..။ ဦးနဲ့ လိုးရတာကို သိပ်ကို စွဲမက် သဘောကျနေလို့ပဲ ဖြစ်ရမယ်..။ မာမီလို တည်ငြိမ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဒီလောက်ဖြစ်ရလောက်အောင်ဆိုတော့ ဦးဟာ အတော်ကို အလိုးကောင်းမယ့် လူတစ်ယောက်လို့လည်း ကျမ တွေးမိတယ်..။
နောက် သူတို့နှစ်ယောက် အသက်ချင်းကလည်း အတော်ကွာတာမဟုတ်လား..။ ငွေကြေး မြိုးမြိုးမြက်မြက် ယူပြီး အသက်ကြီးကြီး မိန်းမကြီးတွေကို လိုက်ချပေးတတ်ကြတဲ့ အငှါးလင် တွေ အကြောင်း ကျမ ကြားဖူးပါတယ်..။ ဦးဟာလည်း မာမီက ကြေးကြီးပေးပြီးခေါ်ထားတဲ့ အငှါးလင် တစ်ယောက်များလား..။
အို ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးရဲ့ လီးနဲ့ အကိုင်အတွယ်တွေကိုတော့ ကျမ လိုလားတမ်းတ နေမိတာ အမှန်ပဲ..။ ဦးနဲ့ လိုးရဖို့အတွက် ပိုက်ဆံပေးရမယ်ဆိုရင်လည်း ပေးဖို့ အသင့်..။ဦးကိုကြည့်ရတာတော့ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် မွန်မွန်ရည်ရည်ပါ..။ အငှားလင် တစ်ယောက်မဟုတ်ပဲ မာမီနဲ့ အပျော်ချစ်ကလေးတွေ ချစ်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ..။ ဒီလိုတွေးမိတော့ ကျမဟာ မာမီ့ကိုတောင် မနာလိုသလို ဖြစ်မိတယ်..။ ဦးက ကျမကိုကော အပျော်ချစ်ကလေး ချစ်ဖို့ စိတ်မကူးဖူးလား…။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မာမီရယ် ၊ ကျမရယ် ၊ ဦးရယ် သုံးယောက်သား ပျော်ကြရရင်ကော …၊ ဦးအနေနဲ့ ဆော်နှစ်ပွေကိုတော့ ကောင်းကောင်း ထိန်းနိုင်မှာ သေချာပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် မာမီက ဒီလောက်အထိ ပွင့်လင်းရဲတင်းပါ့မလား..။ ကိုယ့်သမီးနဲ့ အတူတူ ယောက်ျားတစ်ယောက်တည်းနဲ့ ကာမစပ်ယှက် အပျော်ကျူးတာမျိုးကို သဘောတူ လက်ခံနိုင်ပါ့မလား..။ အရှက်အကြောက်ကြီးပြီး တည်တန့်စွာ နေလေ့ရှိတဲ့ မာမီဟာ တကယ်လို့ သူမစိတ်ထဲက ပါတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုး လုပ်ဖို့ ငြင်းပယ်လိုက်မှာပါပဲ…။ လွယ်မယ်မထင်ပါဘူး..။ ဦးနဲ့ အဆင်ပြေရလေအောင် ကျမဖာသာ ကျမ တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ အကြံအဖန်လုပ်တာမှ ပိုကောင်းမလားပဲ..။
မရှက်တမ်း ဝန်ခံရမယ်ဆိုရင် ကျမ အလိုးခံကြည့်ချင်နေတာ ကြာပါပြီ…။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ လီးနဲ့ ကျကျနန လိုးပေးတာကြောင့် ခံစားရတဲ့ ကာမအရသာဟာ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာကိုလည်း လက်တွေ့ စူးစမ်းကြည့်ချင်နေပါတယ်..။ ဇီဇာကြောင်တယ်လို့ ပြောချင်လည်း ပြောကြပါစေတော့…။ ကျမကို ပထမဆုံး စလိုးမယ့်ယောက်ျားကို ကျမစိတ်တိုင်ကြ စဉ်းစားပြီး ရွေးထားတာ..။ ချောရမယ်..၊ တောင့်ရမယ်…၊ ဖြောင့်ရမယ်..၊ လီးကြီးရမယ်..၊ မိန်းမတွေရဲ့ အထာကို ကျွမ်းရမယ် ၊ လက်ရဲဇက်ရဲလည်း ရှိရမယ်..၊ ကြောက်သလို ရွံ့သလို ဖြစ်မနေရဘူး…။ ကျမတွဲနေတဲ့ အထဲမှာ ရုပ်ဖြောင့်တာ တောင့်တာတွေတော့ ရှိပါရဲ့..။ အဲ…အချို့လည်း လီးကြီးမယ် ထင်ပါတယ်…( သေချာတော့ စစ်ဆေးမကြည့်တော့ မသိဘူး လေ ) ဒါပေမယ့် ကာမမှုမှာတော့ ကျွမ်းကြတာ နည်းပါတယ်..။ ကျမကလည်း အဲဒါမျိုးတွေနဲ့ မလုပ်ချင်ဘူး..။ ဒါကြောင့် ကျမစောက်ဖုတ်ဟာ ( အပျိုမှေးပေါက်နေတာကြောင့် ) ပါကင်ပိတ်လို့ မပြောနိုင်ပေမယ့် ဘယ်လီးမှ ဝင်မအောင်းဖူးသေးတဲ့ အပျိုစစ်စစ်လေးပါ..။ ဟော…အခုတော့ ကျမကို ကုသိုလ်ကံက မျက်နှာသာပေးပြီ ထင်ပါရဲ့ ..။ ဦးကို လာတွေ့နေရပါပြီ..။ ဦးက ရုပ်ဖြောင့်တယ်..၊ ( မျက်မြင်ပါပဲ ) ပြီးတော့ မိန်းမအကြော သိတယ်..၊ အလိုးလည်းကောင်းမှာ အမှန်ပဲ..လေ ။ ( မာမီတောင် စွဲမက်နေရတာ ကြည့်ပေါ့ )..။
မာမီ့ ညည်းညူသံလေးကို ကျမ ကြားလိုက်ရတယ်..။ ဦးက သူ့အဖုတ်ကို အပြတ်ကလိပေးနေတာကြောင့် ပွင့်ဟလာခဲ့တာပါ..။ ကျမ မမြင်နိုင်ပေမယ့် ဦးက မာမီ့ စောက်ဖုတ်ထဲ လက်ချောင်းထိုးထည့် ကလိပေးနေတာဖြစ်မှန်း သိပါတယ်..။
မာမီရာ ဖင်ကြီးကို ကြွပြီး လီးကို စောက်ဖုတ်ထဲ သွင်းယူလိုက်ပါတော့လားလို့တောင် ကျမစိတ်ထဲက အားမလိုအားမရ ပြောလိုက်မိတယ်..။ ဦးနဲ့ မေမေ လိုးကြမှာကို ကျမသိပ်ကို ကြည့်ချင်နေပြီ ရှင့်..။ လီးကြီးပြီး အကိုင်အတွယ် အနှိုးအဆွ ကျွမ်းသလို ၊ အလိုးအဆောင့်ရော ကောင်းရဲ့လားဆိုတာ ကျမဆန်းစစ်ကြည့်ချင်တယ်လေ..။အလိုးအဆောင့်သာ ကောင်းတယ် ၊ သန်တယ် ၊ ကြာတယ်ဆိုရင်တော့ အားလုံး အိုခေ..။ ကျမ ဦးကို ရအောင် ဖန်တော့မယ်..။ ဒါ အာပလာစကား မဟုတ်ဘူး..။ အပီအပြင် ပြောတာ..။
ဦးက ပြောလိုက်တယ်..။မာမီက ခေါင်းကိုတော့ ငုံ့မချဘူး..။ ဒါပေမယ့် ဦးရဲ့ လီးကိုတော့ တစ်ချက် ငုံ့ကြည့်လိုက်တယ်..။
မာမီ့စကား အဆင်မချောဘူး..၊ အထစ်ထစ် အငေါ့ငေါ့ ဖြစ်နေပါတယ်…။
အားပါး…ဦးက မာမီ့ကို လီးစုပ်ပေးခိုင်းနေတာပါလား..။ ကျမဖြင့် မာမီ့အစား အသည်းယားလိုက်တာရှင်..။ ဦးရဲ့ လီးကြီးကို မာမီက စုပ်ပေးမှာလား..၊ ငြင်းလိုက်မှာလား ၊။ ကျမကတော့ စုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်..။ ကျမသာဆိုရင်တော့ ကုန်းစုပ်လိုက်မှာပဲ…။ ဟော……။
စိုးထိုက်က ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးနှိုက်ကလိပေးနေတဲ့ လက်ကို ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်..။ ဒီအမျိုးသမီး သူ့လီးကို စုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့လည်း စိုးထိုက်က တွက်ထားပြီးသားပါ..။ ဒါဟာ ဒီမိန်းမအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် လီးစပြီး စုပ်ပေးရတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာကိုလည်း တွေးမိတယ်..။အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ ဒေါ်ခင်မေထား လီးမစုပ်ချင်ဘူး..။ ရွံတယ်..။ ကြောက်တယ်..။ ပြီးတော့ ရှက်လည်း ရှက်တယ်..။ သူ့ယောက်ျားကိုတောင် လီးစုပ်ပေးခဲ့ဖူးတာမှ မဟုတ်တာ..။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်ခင်မေထားဟာ ရမက်သိပ်ထန်နေတာ.၊ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးကိုလည်း စွဲစွဲမက်မက် ဖြစ်နေတာဆိုတော့ စိုးထိုက်က လီးစုပ်ပေးစေချင်နေတာကို မငြင်းချင်ဘူး..။ လီးတစ်ခါမှ စုပ်မပေးဖူးသေးပေမယ့် လီးစုပ်ရင် တစ်မျိုးစိတ်လှုပ်ရှားရပြီး.. တစ်မူထူးတဲ့ ကာမအရသာတစ်မျိုးကို ခံစားရလိမ့်မယ်လို့တော့ ဒေါ်ခင်မေထား သိနေတယ်လေ…။
ဒီလို ကောင်းမှာမို့သာ စိုးထိုက်က လီးစုပ်ခိုင်းတာပေါ့..။ မကောင်းဘူးဆိုရင် ဘယ်စုပ်ခိုင်းပါ့မလဲ..။ အို….ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စမ်းတော့ကြည့်လိုက်မယ်..။လီးစုပ်မယ်ဆိုရင် စိုးထိုက်ရဲ့ ပေါင်ပေါ်တက်ထိုင်ထားရက်နဲ့ ဘယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ..။ ဒါကြောင့် ဒေါ်ခင်မေထားဟာ စိုးထိုက်ရဲ့ ပေါင်ပေါ်က ဆင်းလိုက်တယ်..။ စိုးထိုက်ကတော့ ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ကျကျနန ဆက်ထိုင်နေလေရဲ့…။ ပေါင်နှစ်ခုက ခပ်ကားကား ၊ ပေါင်ရင်းခွဆုံက ငပဲချောင်းကြီးကတော့ မတ်မတ်ကြီးကို တောင်လို့..။
“အဲ့ဒီဘေးမှာရပ်..၊ ကိုယ်ကို ကိုင်းပြီး ခေါင်းအောက်ငုံ့ချလိုက်လေ…မမရဲ့..“
စိုးထိုက်က လီးစုပ်ပေးရမယ့် အနေအထားကို ခပ်တိုးတိုးလေး ပြောဆို ညွှန်ပြပေးတယ်…။ တစ်ဖက်ခန်းက ချောင်းကြည့်နေမယ့် မိုမိုဟန်အတွက် သူ့အမေ လီးစုပ်နေတာကို သေသေချာချာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်နိုင်အောင် လုပ်ပေးလိုက်တာပါ..။ဒေါ်ခင်မေထားက ကုလားထိုင်ဘေးမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး စိုးထိုက်ရဲ့ လီးကို စုပ်ပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတာ..။ တတ်လို့ နားလည်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး..။ ဒီလိုမျိုးမှ အဆင်ပြေမယ်ထင်မိလို့ ပါလေ..။စိုးထိုက်က ပြောဆို ညွှန်ပြပေးလာတော့ ဒေါ်ခင်မေထားလည်း စိုးထိုက်ပြောသလို အလိုအလျောက်ပဲ လိုက်လျော လုပ်ဆောင်ပေးလိုက်မိတယ်..။ စိုးထိုက်က ဒေါ်ခင်မေထား ရဲ့ ကာမဆရာ ဖြစ်နေပြီလေ..။ စိုးထိုက်ပြောတာကို ဒေါ်ခင်မေထား လိုက်လုပ်ရမှာပေါ့..။
ကုလားထိုင်ဘေးမှာ မတ်တတ်ရပ်တယ်..။ ပြီးတော့ ကိုယ်ကို ရှေ့ကိုင်းချလိုက်တယ်..။ သူမလက်ကို ဆန့်ထုတ်ပြီး စိုးထိုက်ရဲ့ မတ်တောင်နေတဲ့ လီးတန်ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်တယ်..။ စစချင်းတော့ လီးအလယ်ပိုင်းလောက်ကို ကိုင်လိုက်တာပါပဲ..။ ဒါပေမယ့် လီးစုပ်ပေးရမှာမို့ တော်ကြာ ကြားက လက်ခံနေမှာစိုးတာကြောင့် လက်ကို အောက်ရွှေ့လိုက်တယ်..။ လီးတန်အရင်းပိုင်းကိုပဲ ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်တယ်..။ ထိုအခါ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ လက်ဖဝါးအောက်ပိုင်းက စိုးထိုက်ရဲ့ ဂွေးဥကြီးကို အသာရွရွလေး ဖိမိသလို ဖြစ်သွားတယ်..။ ကိုယ်ကို ကိုင်းချလိုက်တာ ပါးစပ်နဲ့ လီးတန် ထိလုလု အထိပါပဲ..။ ဒေါ်ခင်မေထားက ပါးစပ်ကို အသာလေး ဟတယ်..။ ခေါင်းကို ဆက်ဖိချလိုက်တော့ လီးက ပါးစပ်ထဲ ဝင်လာပါရော.။ ဟထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို ပြန်စုကပ်လိုက်တော့ လီးတန်ကြီးက ပါးစပ်ထဲရောက်သွားတာပေါ့..။ လီးကို ငုံမိသွားပြီလေ…။မစုပ်သေးပေမယ့် မာကြောပူနွေးတဲ့ လီးတန်နဲ့ သူမနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေ ထိတွေ့မိသွားတဲ့ အထိအတွေ့ကို တော့ ဒေါ်ခင်မေထား ပြည့်ပြည့်ဝဝ ခံစားရတယ်..။ စိတ်လည်း အတော်လှုပ်ရှားသွားပါတယ်..။ ဒါကြောင့် ငုံမိထားတဲ့ လီးတန်ကြီးကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေး စတင်ပြီး စုပ်ပေးလိုက်ပါလေရော..။
လီးစုပ်သံလေး မတိုးမကျယ် ပေါ်လာပါတယ်..။ဒီလီးစုပ်သံကို လီးစုပ်ခံနေတဲ့ စိုးထိုက် ၊ လီးစုပ်ပေးနေတဲ့ ဒေါ်ခင်မေထား..၊ လီးစုပ်တာကို ချောင်းကြည့်နေတဲ့ မိုမိုဟန်တို့ သုံးယောက်စလုံး ကြားလိုက်ရတယ်..။တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီလည်း စိတ်လှုပ်ရှားသွားကြရတယ်.. ။ စိတ်လှုပ်ရှားရတာချင်း မတူပေမယ့် သုံးယောက်လုံး ရမက်ဇောတွေ ဟုန်းခနဲ ထန်ပြင်းလာတာကတော့ အတူတူပါပဲ..။ဒေါ်ခင်မေထားက မိုမိုဟန်ချောင်းကြည့်နေတဲ့ ဘက်ကို ဖင်ပေးပြီး လီးကုန်းစုပ်နေတာ..။ ငနဲသား စိုးထိုက်ကတော့ မိုမိုဟန် ချောင်းကြည့်နေတဲ့ဘက် မျက်နှာချင်းဆိုင်တည့်တည့် ..။ လီးစုပ်နေတဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားကို ဘေးဘက် ခပ်စောင်းစောင်းလေး ဖြစ်သွားအောင်လည်း မသိမသာတွန်းပြီး ထားလိုက်သေးတယ်..။ ဒီတော့ ချောင်းကြည့်နေတဲ့ မိုမိုဟန် မြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းက တကယ့်ကို အပီအပြင်ပဲ…။သူမဖက် ဖင်ပေးပြီး ကုန်းထားတာကြောင့် ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ တင်ပါးဆုံကြီး ဖြူဖွေးတင်းပြောင်နေတာ ၊ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ ညှပ်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီး နောက်ကို ပြူးတစ်ထွက်နေတာ ၊ ဖင်သားကြီး နှစ်မွှာကြားက ဖင်ပေါက်စူတူတူလေးဖြစ်နေတာ…၊ အို…..အားလုံးဟာ ရှင်းမှ ရှင်းပဲ…ရှင့်….။ ဒါတင် ဘယ်ဟုတ်အုန်းမှာလည်း..။ ကိုယ်မစောင်းတစောင်းအနေအထားမှာ ခါးလေး မလိန်တလိန်ဖြစ်နေတာမို့ အပေါ်ဘက်က လီးစုပ်ပေးနေတဲ့ မြင်ကွင်းကလည်း ရှင်းမှ ရှင်း..။ လီးတန်ကြီးကို နှုတ်ခမ်းသားတွေက တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ထိကပ်နေကြတာ..၊ ပါးလေး ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက် ဖြစ်နေတာ..၊ ပြီးတော့ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ လက်က စိုးထိုက် ဂွေးဥတွေကို ဆော့ကိုင်ဆော့ပေးနေတာ..၊ အားလုံးကျကျနန မြင်ရတာပါ…။လီးတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက် စုပ်ပေးပြီးတယ်ဆိုရင်ပဲ ဒေါ်ခင်မေထားတစ်ယောက် ပြီးလုလုဖြစ်လာတယ်..။ ဒါကြောင့် တဏှာ ပိုပြင်းပြီး လီးစုပ်လည်း ကြမ်းလာပါလေရော..။ စိုးထိုက်ကတောင် သင်ပြပေးစရာ မလိုတော့ပဲ ၊ ဂွေးဥကို လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင် ပွတ်သပ်ဆော့ကစားပေးလာတယ်..။ သဘာဝက သွန်သင်ပေးလိုက်တာလို့ပဲ ဆိုပါရစေတော့..။ဒေါ်ခင်မေထားဟာ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးကြီးကို အာသာငမ်းငမ်းနဲ့ ကို စုပ်နေပြီ..။ လီးကို ပါးစပ်ထဲ ဝင်နိုင်သလောက် ဝင်အောင် စုပ်ယူပေးတယ်..။ အခုမှ စပြီး လီးစုပ်ဖူးတာမဟုတ်လား..။ လည်ချောင်း အလိုက်သင့်ဖြစ်အောင် ဘယ်လုပ်တတ်အုန်းမှာလည်း..။ ဒီတော့ စိုးထိုက်ရဲ့ ရှစ်လက်မကျော် ရှည်တဲ့ လီးကို တဝက်သာသာလောက်ပဲ ပါးစပ်ထဲရောက်အောင် စုပ်ယူသွင်းနိုင်တယ်..။ လီးဒစ်က အာခေါင်ကို လာထောက်တာမို့ ဒီ့ထက်ပို မတတ်နိုင်တော့ဘူး..။ သူမကတော့ လီးတစ်ချောင်းလုံး အကုန်ဝင်အောင်သွင်းယူပြီး စုပ်ပေးချင်တာပါ…။
လီးစုပ်ပေးရတာ အတော်ကို ကောင်းပါတယ်.. ။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်ခင်မေထားဟာ လီးကြီးကို ပါးစပ်နဲ့ ငုံစုပ်ပေးနေရုံနဲ့ အားမရတော့ဘူး…။ အဲဒီ လီးချောင်းကြီးတုတ်တုတ်ကြီး စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းပြီး လိုးတာခံချင်နေပြီလေ..။ အရမ်းကို ခံချင်နေတာ..။ ဘယ်လိုမှ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရတော့လောက်အောင်ပဲ..။ဒါကြောင့် လီးစုပ်နေတာကို မရပ်ချင် ရပ်ချင်နဲ့ ရပ်လိုက်ရတယ်..။ ခြေဆန့်ကုန်းနေရာကလည်း ကိုယ်ကို ပြန်မတ်မတ် ရပ်လိုက်တယ်..။
အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ အရိပ်အကဲကို ကြည့်နေတဲ့ စိုးထိုက်က မေးတော့ ဒေါ်ခင်မေထား ခပ်မြန်မြန်ပဲ ခေါင်းကို ငြိမ့်ပြလိုက်ပြီး…
“အင်း…လာ ခုတင်ပေါ် သွားကြရအောင်…“
“ဒီပေါ်မှာပဲ လုပ်တာပေါ့ မမရ…“
“အဲဒီ ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ထိုင်ရက် လုပ်လို့ရလို့လား…“
“ဟာ …ရတာပေါ့ မမရ..၊ တစ်မျိုးတောင် ဇိမ်ရှိသေးတယ်..။ မမ …ဒီလို ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ မလိုးဖူးဘူးလား…“
“ဒါဆို ကျနော် ပြောပြပေးမယ်..၊ မမ ကျနော်ပြောသလို လုပ်လိုက်….“
စိုးထိုက် ပြောသလို ဒေါ်ခင်မေထားဟာ စိုးထိုက် ထိုင်နေတဲ့ ကုလားထိုင်ပေါ်ကို တက်ပါလေရော..။ ပြီးတော့ စိုးထိုက်ပေါ် ကားယားခွ ထိုင်လိုက်တယ်..။ ကုလားထိုင်ပေါ် လှမ်းတက်ရာကနေ ထိုင်ချလိုက်တာမို့ စိုးထိုက်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြစ်သွားတယ်..။ ဆောင့်ကြောင့် မကျတကျ ခပ်ကွကွ အနေအထားမို့ တင်ပါးဆုံကြီး အနောက်ဘက်ကို ကော့ပြီး အစွမ်းကုန် ကားစွင့် တင်းရင်းနေတာပဲ…။ ပေါင်ကြားက စောက်ဖုတ်ကတော့ ပြဲအာအာ…။ အဲဒီ စောက်ဖုတ်အောက်ဘက်တည့်တည့်မှာတော့ မိုးမျှော်နေတဲ့ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးတန်ကြီး…။ မိုမိုဟန် သေသေချာချာကို မြင်ရတာ..။ မြင်ရသမျှ သူမအမေက ဖင်ဆုံကြီး အောက်ကို နှိမ့်အချမှာ စောက်ဖုတ်ဝ တည့်တည့်ကို ကန်ပြီးတေ့ထောက်မိတာ..။ လီးထိပ်ဖူးနဲ့ ထိမိလို့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ ချိုင့်ခွက်ဝင်သွားတယ်..။ အဝနဲ့ မဆန့်အောင် ကြီးထွားတုတ်ခိုင်လှတဲ့ လီးကြီး ဝင်သွားတာကြောင့် အဖုတ်ရှုံ့ဝင်သွားတာက အစ မြင်နေရတယ်..။
ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ရေရွတ်ငြီးတွားသံကလည်း အတော်ကျယ်ကျယ် ပေါ်လာတယ်..။ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးကြီးက ဒေါ်ခင်မေထား အလိုးခံဖူးတဲ့ လီးထက် နှစ်ဆလောက်ကြီးတာကလား..။ ပြီးတော့ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ စောက်ဖုတ်ကလည်း လီးတိုးမဝင်ရတာ ကာလတွေ နှစ်ချီကြာညောင်းခဲ့ပြီလေ…။ ဒီတော့ တင်းနေတာပေါ့..။ ကြပ်နေတာပေါ့…။ နာပြီးလည်း.. အရမ်းအောင့်တယ်..။ဒါပေမယ့် တဏှာဇော အဟုန်ကလည်း အရမ်းကို ပြင်းပြထက်သန်နေတာဆိုတော့ နာတာတွေ ၊ အောင့်တာတွေကို ဘယ်စဥ်းစားနိုင်တော့မလဲ..။ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ဆတ်တုန်နေတယ်..။ ဖီလင်တွေ အရမ်းတက်နေတာကြောင့် လီးဒစ်မြုပ်ဝင်သွားချိန်မှာပဲ ဒေါ်ခင်မေထား တစ်ချီ ပြီးသွားတော့တယ်..။ စောက်ဖုတ်ထဲက အရည်ကြည်တွေ ယိုစီးထွက်လာတာမှ အများကြီးပဲ..။ စောက်ဖုတ်ဝမှာလည်း လီးဒစ်ပြဲလန်ကြီးက ဘူးဆို့လို တစ်ဆို့နေတာဆိုတော့ အံထွက်လာတဲ့ စောက်ရည်ကြည်တွေဟာ အတော့်ကို အားပြင်းပြင်းနဲ့ ထွက်ပေါက်ရှာယူရတယ်..။ လီးဘေးနားကနေ ကပ်ကပ်သပ်သပ် ထိုးထွက်စီးကျရတာမို့ စောက်ရေကြည်တွေမှာ အမြှုပ် ပူစီဖောင်းလေးတွေ ရောပါလာတယ်..။ ချောင်းကြည့်နေတဲ့ မိုမိုဟန်က ဒါကို သေသေချာချာ မြင်ရတယ်.။ လိုးနေကြတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကတော့ မမြင်နိုင်ဘူးလေ..။အဲဒီနေရာက သူတို့အတွက် မျက်ကွယ်ဖြစ်နေတယ်လေ..။ ဒေါ်ခင်မေထားဟာ စိတ်ထထနဲ့မို့ တင်ပါးဆုံကြီးကို အပြတ်ကို ဖိချပစ်လိုက်တာ..။ လီးတန်ကြီး တစ်ချောင်းလုံး စောက်ခေါင်းထဲ တိုးဝင်လာပါလေရော…။ စောက်ရည်ကြည်တွေ အရမ်းပြည့်လျှံအောင် ထွက်နေတာက လည်း လီးအဝင်အထွက် ချောအောင် ဆီသုတ်ပေးသလိုဖြစ်တာမို့ သာ ဝင်နိုင်တာပါ..။ မဟုတ်ရင် အတော်ကို တင်းနေကြပ်နေမှာ..။ ဒါတောင် လျှောခနဲ တိုးဝင်သွားတာ မဟုတ်ဘူး..။ တစ်ထစ်ချင်း ရစ်ရစ်ပြီး ဝင်တာ..။ လီးဝင်သွားတာနဲ့အမျှ စောက်ရည်ကြည်တွေကလည်း လီးတန်တလျှောက် ယိုစီးကျလာနေတယ်.။
လီးက ရှစ်လက်ကျော်ကျော်ရှည်တာမို့ စောက်ခေါင်းထဲ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တိုးဝင်တယ်..။ ဆောင့်ကြောင့်မကျတကျ ကွတတ တက်ခွပြီး ဖိသွင်းတာကြောင့်မို့လည်း စောက်စေ့နဲ့လီးလုံးပတ် အစအဆုံးထိတွေ့မိနေတယ်..။ ဒေါ်ခင်မေထား မခံနိုင်တော့ဘူး…။ နောက်ထပ် တစ်ချီဆက်လို့ ပြီးသွားရပြန်တယ်..။ နှစ်ချီဆက်တိုက် ပြီးသွားရတဲ့ သဘောပေါ့..။ ပြီးခဲ့တဲ့ အရှိန် လက်ကျန်တွေကလည်း ရှိနေပြီး ကူးလူးပေါင်းစည်းပေးတာဆိုတော့ အခု ဆက်ပြီးတာက ပိုလို့ ပြင်းထန်တယ်..၊ ဇောသန်တယ်..။ဒေါ်ခင်မေထားဟာ စိုးထိုက်ရဲ့ လီးကြီးပေါ်မှ ခွထိုင်လျက်သား တပ်လပ်ကြီးနဲ့ အရမ်းကို ဖြစ်လို့နေပြီး ပြင်းပြထက်သန်လှတဲ့ ကာမအရသာဟာ စောက်ဖုတ်ကနေ တဆင့် တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ရှိသမျှ အသွေးအသားတွေထဲ ကို ပျံ့နှံ့တယ်..။ ရမက်အရသာ မခံစားဖူးသေးတဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေတောင် အခုခံစားလိုက်ရပြီ..။ ဒါနဲ့ တတိယအချီ နောက်ထပ် ပြီး ရပြန်ရော..။
“အား ပါးပါး….အား ရှီး…အီး အီး…ထွက်ကုန်ပြန်ပြီ……အမလေးလေး….ထွက်ကုန်ပြန်ပြီ…..ကောင်းလိုက်တာ….အားအား….“
ပါးစပ်ကလည်း အသံမျိုးစုံ ရေရွတ်မြည်တမ်းမိတယ်..။ စောက်ဖုတ်ကြီး လှုပ်ရှားနေတာကတော့ ပြောမနေနဲ့တော့..။ ရှုံ့လိုက်ပွလိုက်နဲ့ပဲ..။ တစ်ဘက်ခန်းမှာ အိပ်နေတဲ့ သမီးဖြစ်သူ ကြားသွားမှာတွေ ဘာတွေကိုလည်း ထည့်မစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူး..။ အရသာ ကောင်းလွန်းတာကြောင့် ရေရွတ်မြည်တမ်းသံတွေကလည်း အတော်လေးကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်ပေါ်လို့ နေပါတယ်..။ ဖင်ကြီးကို အရမ်း မြင့်လိုက်နှိမ့်လိုက် လှုပ်ရှားပေးနေတာကြောင့် ဒေါ်ခင်မေထားဟာ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း တုန်ခါလို့နေပါပြီ…။ တုန်တုန်လှုပ်ခါ နေတဲ့ နို့အုံသားကြီးတွေက စိုးထိုက်ရဲ့ မျက်နှာကို တောင် ထိမိရိုက်မိလို့..။တတိယအကြိမ်မြောက် ပြီးသွားမှုရဲ့ နောက်ဆုံးစောက်ရည်ကြည် တစ်သုတ် စို့ခနဲ ထွက်လာပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ဒေါ်ခင်မေထား ပါးစပ်က “အားလားလား….ကောင်းလှည်ချည်လား……မောင်လေးရဲ့….ဟင့်ဟင့်….“
ဆိုတဲ့ အော်သံ ပေါ်ထွက်တယ်..။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ဆတ်ခနဲ တုန်တယ်..။ ပြီးတော့ စိုးထိုက်ကို ဖက်တွယ်ထားရက်သား ပျော့ခွေကျသွားပါလေရော….။အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ၃ ချီ ၃ လားတောင် ဆက်တိုက်ပြီးသွားခဲ့ရတာပဲလေ..။ မောဟိုက်နွမ်းလျ သွားတာပေါ့..။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ချွေးတွေ စိုရွှဲလို့…။ တောင်မတ်နေတဲ့ လီးတန်ကြီးကတော့ စောက်ဖုတ်ထဲမှာ တပ်ရက်သားကြီးနဲ့ ရှိနေပါသေးတယ်..။ စိုးထိုက်က မောလျ ပျော့ခွေနေတဲ့ ဒေါ်ခင်မေထားရဲ့ ကိုယ်ကို အသာသိုင်းဖက်ထားတယ်..။ စိုးထိုက်ရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာတော့ ကျေနပ်တဲ့ အပြုံးတစ်စ တွဲခိုလို့…။ ဒေါ်ခင်မေထား အရမ်းဟော့ပြီး ဝုန်းဒိုင်းကြဲနေလေတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ဘက်ခန်းက မိုမိုဟန်ရဲ့ ဖီလင်တက်သံတွေ လှုပ်ရှားသံတွေကို စိုးထိုက် ကောင်းကောင်းကြီး ကြားလိုက်ရတာကိုး…။မေမေတစ်ယောက် ဦးရဲ့ အပေါ်တက်ခွပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်း လှုပ်ရှားလိုးဆောင့်နေတာကို ကြည့်ပြီး ကျမလည်း အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားလာရပြန်ပါတယ်.။ စောက်စေ့လေး တင်းမာ ပြီးကော့ထောင်နေတာ ဘယ်လောက်များလဲ့ဆိုရင် ကျိန်းပြီး နာကျင်သလိုလို ဖြစ်လာတဲ့ အထိပဲ..။ ကျမရဲ့ ပေါင်ကြီးနှစ်ခုဟာလည်း ဟလိုက်စိလိုက်နဲ့ ..။ ဟိုဘက်ခန်းမှာ မေမေတစ်ယောက် လီးအရသာခံစားရင်း အရမ်းဖြစ်နေသလို ကျမဟာလည်း ဒီဘက်ခန်းမှာ ဖီလင်တွေ တက်ပြီး အကြပ်တွေ့နေပါပြီ…။အဖုတ်ကိုတော့ လက်ဖဝါးနဲ့ ပွတ် ၊ စောက်ခေါင်းထဲ လက်ညှိုးထိုးမွှေ လုပ်နေတာပါ..။ ဒါပေမယ့် လက်လောက်နဲ့ အားမရနိုင်ဘူး..။ ဘိုင်ဘရေတာ ကူမှဖြစ်မယ်…။ ဦးကို မေမေတက်လိုးနေတဲ့ မြင်ကွင်းကိုလည်း လက်မလွှတ်နိုင်ဘူး..။ ချောင်းကြည့်နေတဲ့ အခန်းနံရံပေါက်ကနေ မျက်စိမခွာနိုင်တော့လောက်အောင်ကို ဖြစ်နေတယ်..။ ဒါကြောင့် ဘိုင်ဘရေတာကို လက်လှမ်းပြီး ကမန်းကတန်း ယူတယ်..။ ခလုတ်ဖွင့်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲ ခပ်သွက်သွက် ထိုးထည့်လိုက်တယ်..။ အဲဒီအချိန်က ကျမစိတ်တွေ အပြတ်သောင်းကြမ်းနေတာမို့ ဘိုင်ဘရေတာရဲ့ တဒီဒီ မြည်သံကို တစ်ဘက်ခန်းက ကြားချင်ကြားနိုင်မယ်လို့ အစဉ်းစားမိတော့ဘူး..။မျက်စိက မေမေနဲ့ ဦးတို့လုပ်နေကြေတာကို ချောင်းကြည့် ၊ ညာဘက်လက်က ဘိုင်ဘရေတာကို ကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲကို ကလိ ၊ ဘယ်ဘက်လက်ကတော့ နို့အုံတွေကို ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်နဲ့ ကျမလေ အရမ်းကို ဖြစ်နေမိတာပါဘဲ…။ မေမေကလည်း အတော်ကို ထန်နေတာပဲကိုး..။ ဖင်ကြီးကို ပင့်တင်ပြန်ချ လုပ်နေလိုက်တာ မြန်မှမြန်ပဲ..။ ဦးရဲ့ လီးကြီးကလည်း မေမေ့စောက်ဖုတ်ထဲ တိုးဝင်ပြန်ထွက်နဲ့..။ ဒီလိုမျိုး ကျမတစ်သက် နဲ့ တစ်ကိုယ် တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးသေးပါဘူး..။ ကျမရဲ့ မေမေဟာ ဒီလောက် ကာမရမက်ဇောထန်ပြီး တဏှာကြွလိမ့်မယ်လို့လည်း ကျမ လုံးဝ မထင်ခဲ့ဘူး..။ အပြာဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရတာထက်သာတယ်..။ အပြာကား ထက်လည်း ပိုကောင်းတယ်..။ ဘိုင်ဘရေတာရဲ့ တုန်ခါမှုကိုတောင် ကျမအားမရနိုင်အောင်ကို ဖြစ်လာရတယ်..။ လက်အားကို ပါဖြည့်သုံးပြီး ကျမ စောက်ဖုတ်ကို ထိုးကလိနေပါတယ်..။ ဟော….ဟော ကျမအဖုတ်ထဲက ရွစိရွစိ ဖြစ်လာပြီ..။ လာတော့မယ်…။ အရည်တွေ ထွက်ကျလာတော့မယ်..။ ဘိုင်ဘရေတာနဲ့ စောက်စေ့ကို ဖိပွတ်တယ်..။ နို့သီးကိုလည်း ခပ်နာနာ ဆွဲညှစ်လိမ်လိမ်လိုက်တယ်.။ အမလေး……. အရည်တွေ ထွက်ကုန်ပြီ ရှင့်…။ ကျမ စောက်ဖုတ်ထဲက အရည်တွေ ယိုစီးကျလာကုန်ပြီ…။ ကျမ…….ကျမ တစ်ချီပြီးသွားရပြီ..။ ကောင်းလိုက်တာ ရှင်..။ အရသာ ခံစားမှု ကောင်းလွန်းတာကြောင့် ကျမလေ ပါးစပ်က တအီးအီး တအားအား တောင် အသံထွက်လိုက်မိတယ်…။ ပြီးမှ သတိရပြီး ကမန်းကတန်း ပါးစပ်ပိတ်လိုက်ရတယ်..။အဲဒီ အချိန်မှာပဲ မေမေဟာ….“အားလားလား….ကောင်းလှချည်လား..မောင်လေးရဲ့..ဟင့်ဟင့်….“ လို့အော်မြည်ပြီး ဦးကိုဖက်လို့ ပျော့ခွေငြိမ်ကျသွားတာ ကျမ လှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်..။ မေမေ ဘယ်နှချီ ဆက်တိုက် ပြီးသွားသလဲ ဆိုတာကို တော့ ကျမ တိတိကျကျ မသိပါဘူး…။ တစ်ချီတည်းမကတာတော့ သေချာပါတယ်..။ကျမလည်း နောက်ထပ် တစ်ချီကောင်းကောင်းကြီး ပြီးသွားတာမို့ အိပ်ခန်းနံရံနားမှာပဲ မောမောနဲ့ ငြိမ်ကျသွားရပါတော့တယ်…ရှင်တို့ရယ်….။